Linux abụghị okpukpe | Site na Linux
Linux abụghị okpukpe
Mgbe ọ bụla anyị banyere arụmụka, a na-ekewa ndị Linux na ọtụtụ akụkụ, otu n'ime ha na ọ bụghị opekata mpe, okwu gbasara nkà ihe ọmụma.
Mgbe m malitere iji Linux, echetara m na Windows 7 m na-arụ ọrụ zuru oke, enweghị m nsogbu ọ bụla dị mkpa, naanị ịmata ihe dugara m ịnwale distro mgbe distro na ịnọnyere ya ogologo oge.
Amalitere m oge mgbe m kwusịrị okwu Stallman, na-ejide n'aka na nke a bụ naanị eziokwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, mgbe anyị kwenyere na anyị nwere 100% nke eziokwu ahụ, anyị ezighi ezi, anyị enweghị ike ịhụ ụwa n'ezie, ha chọrọ na anyị na-abụ ụdị ndị okpukpe na-anụ ọkụ n'obi bụ ndị, ruo n'ókè ụfọdụ, na-echekarị nnwere onwe ngwanrọ karịa nnwere onwe mmadụ, nke na-atọ ụtọ mana ọ bụ eziokwu.
Ọ bụrụ na m mụtara ihe na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ na eziokwu ahụ dabere n'akụkụ nke ị na-ele anya, na ọ dịghị onye n'ime anyị nwere ya n'ozuzu ya.
N'ịlaghachi na ihe na-echegbu anyị, ọ bụghị mmadụ niile na-eji Linux na nkà ihe ọmụma, ikekwe ọtụtụ na-eme ya maka ịdị mfe na naanị mma, n'etiti ha, mma nke ịmegharị usoro gị ka ọ masị gị, mma nke inwe ike iji kọmpụta dị iche iche, njikarịcha nke sistem , na ọtụtụ ndị ọzọ n'ihi ihe dị mfe na ịchọ ịmata ihe, ọ bụ ya mere anyị ga-eji kpachara anya mgbe anyị kwuru nkebi ahịrịokwu ndị na-ada ụda dị ka:
"Anyị agaghị echefu nzube GNU!"
"Linux bụ nkà ihe ọmụma"
Mmehie dị oke njọ. Linux abụghị nkà ihe ọmụma, ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị ọzọ, ihe atụ doro anya bụ ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ndị nwekwara ikike ịzụlite ma jiri Linux maka mkpa ha, dị ka Oracle, AMD, Nvidia, Steam, Intel, IBM….
Ọbụna oriri na-ewu ewu nọ na mpaghara m na-eji Linux, nke dị mkpa, n'ihi na ọ gaghị emegharị ọtụtụ kọmputa yana naanị n'ihi na ọ na-ekpuchi ihe niile emere, yabụ na anyị enweghị ike ikpebi onye na-eme nke ahụ
M na-eji ya n'ihi na ọ masịrị m, ekwesịrị m ikweta na n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 ndị a, anọ m na-edozi ọtụtụ ihe na enwere m nsogbu dị iche iche, nke karịrị nke m nwere na Windows, ma ọbụnadị na m ka na-eji ya (ọkwọ ụgbọala nvidia, amd, Intel, mkpọka nke de's, ọnwụ nke X, mmemme ndị anaghị agba ọsọ).
Amụtawo m na nnwere onwe nke mmadụ karịrị nnwere onwe nke ngwanrọ na m ga-akọwa onwe m. Ọtụtụ oge anụrụla m nkebi okwu a, banyere sọftụwia nwere nke ọma "sọftụwia nwere nke mere gị ohu, ị ga-ahapụ ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ohu?"
Aga m emerụ ihe a. Nke mbu, anyi apughi iji nnwere onwe mmadu tunyere ihe omume pc di mfe, nke a adighi nma na nmegha.
Nke abụọ, ọ dị nwute na nnwere onwe nnwere onwe mmadụ, enwerekwa ohere ịnwe nnwere onwe n'aka ụmụ mmadụ ndị ọzọ, ihe mere ọtụtụ puku ugboro ma ọ dị nwute na ọ ga-aga n'ihu na-eme.
Nke ato, sọftụwia nwere nke anaghị ewepụ nnwere onwe gị, ọ na - enye gị nhọrọ, nke n'ọtụtụ ọnọdụ dị elu, n'ihi na enwere ụlọ ọrụ na - akwụ ndị mmepe oge niile (ndị nwere ezinụlọ nri) iji mepụta ngwanrọ na-ezukọ niile ahịa chọrọ.
Onye ọ bụla nwere nnwere onwe ịkwụsị iji ihe ha jiri ma gbanwee mmemme, ọ nweghị onye na-atụ aka narị otu narị maka anyị iji mmemme emechi.
Okpukpe dị iche iche na-eme otu ihe ahụ, ha na-agwa gị na ị ga-eme ihe ọma ha chere na ọ dị mma, ha na-egbochi nnwere onwe gị ịme ihe dị iche na ihe ha gosipụtara, ka anyị ghara ịdaba n'okpukpe na-anụ ọkụ n'obi.
Ọ bụrụ na ị na-eji Linux si echiche, zuru okè, ọ bụrụ na ị na-eji ya nke mkpa, zuru okè, ọ bụrụ na ị na-eji ya n'ihi na ị na-enweghị ike imeli a Mac, zuru okè, ka anyị ghara igbochi nnwere onwe nke ndị ọzọ.
Ihe ọma banyere Linux bụ nke a, na ị nwere ike iji ya site n'aka nwoke enweghị ebe obibi, onye isi ala nke United States, ma ọ bụ onye ọchịchị aka ike nke mba Arab ụfọdụ, Linux gbasara nnwere onwe iji mee ya ihe ịchọrọ, na-enweghị onye kwuru nke a ihe ziri ezi ma ọ bụ nke a ezighi ezi.
O di nwute na uwa n'ezie, echiche nke software bu ngwa ahia ka na-adi, ma enwere ugwo maka ojiji nke ngwanrọ a, anyi nwere ike icho ya ma anyi achoghi, ma nke a bu ihe omuma anyi bi n'ime ya, na imegide ya, bụ otu esi aga megide ụkpụrụ akụ na ụba ụwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe nlereanya gbanwere, ị ga-atụpụta ụdị, ebe ndị otu ahụ nwere ike ịga n'ihu na-akwụ ụgwọ maka ngwanrọ ma gaa n'ihu na-akwụ ndị ọrụ ha ụgwọ, ma na-aga n'ihu na-enweta uru, nke anaghị emekarị.
Ikekwe, olee otu onye mmepụta nke mepụtara ngwa egwu ga-esi nweta ego, na-enye ọrụ ọrụ aka, dịka ọ na-eme Red Hat? Eleghị anya ndị mmadụ agaghị akwụ ụgwọ maka ọrụ aka ọrụ, ebe ọ bụ na ịge egwu 4 ntị, ma nwee ọbá akwụkwọ egwu ahaziri, ọ dịghị mkpa. Ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ ịkpata ego, ọbụnadị obere ego, kedu ka ọ ga-esi kpọghee koodu ahụ?
Eleghị anya mmadụ ga-abịa, were koodu ahụ, melite ya, na ngwa ha ga-akarị nke mbụ, jiri obere mbọ, wee hapụ onye okike mbụ na asọmpi asọmpi, na-eme ka ha kpebie ịghara ịga n'ihu na mmepe na njedebe, nke O nwere mere ọtụtụ oge, nyere nsogbu nke monetizing obere oru. (Lee Nuvola Player na Google).
Emecha, Linux na-amasị m ma amata ntụpọ ya na njirimara ya, Windows na-amasị m ma ana m amata ntụpọ ya na ụfọdụ n'ime agwa ya, OS X na-amasị m ma amata ntụpọ ya na agwa ya, m ga-eji nke ọ bụla n'ime ha, dị ka maka mkpa ndị nwere n'oge ahụ.
Ọ bụrụ na m chọrọ iji Adobe okike Suite M ga-eji ya, ma ọ bụrụ na m chọrọ iji Microsoft Office, M ga-eji ya, ọ bụrụ na achọrọ m, m ga-eji Gimp ma ọ bụ Inkscape, m ga-eji ha, n'ihi na ihe kachasị mkpa bụ nnwere onwe na nrụpụta nke onye ọrụ.
Ihe omume dika Gimp nwere ike bụrụ nke zuru oke ma "onye ọrụ enyi" taa, ọ bụrụ na kama ịtụle etu ndị isi nke Adobe dị, anyị na-enye ezigbo onyinye maka ọrụ ahụ.
Eji m nke a na-ekwu ọfọ, ndụ ma hapụkwa ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Linux abụghị okpukpe
Ihe 290 kwuru, hapụ nke gị
Are na-agwakọta Linux na GNU, nke bụ echiche dị iche iche.
I to ihe ufodu na akpo gnu Linux, a na m asi Linux na period.
Iji kwuo okwu banyere teknụzụ kọmputa, echere m na ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị kpọọ ya GNU, Linux, GNU / Linux ma ọ bụ Jose Maria. Mana maka post na nkà ihe ọmụma, ọ bụrụ na ị ga-amata ọdịiche dị iche iche n'ihi na ha bụ nkà ihe ọmụma dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ ga - eme obere nyocha ka ị ghara ime ya.
Ọ dị mma, iji dee na blọọgụ, ị ga-abụrịrị teknụzụ teknụzụ, naanị ihe edeturu
Ọ bụghị ịbụ teknụzụ ma ọ bụ na ọ bụghị, echeghị m na gnu kwesịrị ịga n'ihu, ọ bụ ihe ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akwado nkwado, nke na-eji naanị nsonye Linux. I nwere ike ma ọ bụ na ọ gaghị amasị gị, mana ọ bụ uche m.
I kwuru na ọ bụ echiche gị, Linux bụ kernel naanị yana naanị, ọ bụ naanị maka ndị na-ebido ihe, ka ha wee mara ihe ha na-ekwu, o doro anya na ị na-aga ike
na gnu na os a, o bu ihe nchikota na ulo akwukwo 4 oburu na nani, na? Oge nghari site na gcc rue llvm zuru, gini ga-abu mgbaghara maka ikpo Linux gnu?
dika linen kwuru:
Ọfọn, echere m na ọ ga-abụ ihe ziri ezi, mana ọ ga-abụ onye ziri ezi ma ọ bụrụ na ị mepụta nkesa GNU Linux ... n'otu ụzọ ahụ m chere na "Red Hat Linux" dị mma, ma ọ bụ "SuSE Linux" ma ọ bụ "Debian Linux", n'ihi na ọ bụrụ na ị mee nkesa gị Kpọọ ya aha, mana ịkpọ Linux n'ozuzu "GNU Linux" bụ ihe nzuzu. 15
Anam aza gi maka aki. Gnu na-enweghị Linux agaghị abụ ihe ọ bụla, mana Linux na-enweghị gnu agaghị akwụsị ịbụ ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ nyocha ma ọ bụ ihe ọchị nke hacker si Mahadum Findlandia, yabụ dịka ha chọrọ ibe ha, ọ bụ ihe dị (maka ugbu a). Ma obu na obughi n'ihi na Mazi Stallman weputara OS ya ma oburu na IBM azuru Minix isi na Linus, nke a agaghi amata, eziokwu na m na-ekwughachi ya bụ na ha abụọ na-ebikọ ọnụ.
GNU na-enweghị Linux dị nke a na-akpọ HURD Linux na-enweghị GNU? Android? Onweghị ihe GNU dị na android?
Callkpọ Linux akpọọ nkụ dịka ịsị m zụtara Firestone, mgbe ọ bụ eziokwu ọ bụ taya na ụgbọ ala Ford m. Enweghị m ike ịgba ịnyịnya na-enweghị ha, mana ụgbọ ala m bụ Ford
@morfeo, Ntụle ahụ gaara abụ eziokwu, ọ bụrụ na ị sị na nke ọ bụla, Linux bụ injin nke ụgbọ ala ahụ.
Ọ dị mma, ụgbọ ala m bụ Volks Wagen nwere injin AUDI, mana anaghị m etu ọnụ maka ndị na-ege m !!
@Morpheus. Na gam akporo enweghi ihe GNU. Naanị ngwa Linux na Google.
Ma mgbe ahụ, anyị kwesịrị ịkpọ ya Linux, ọ bụghị gam akporo!
Ya mere, Patrick Volkerding kpọrọ ihe okike ya Linux Slackware.
@ eliotime3000 Kedu ihe kpatara na "okpukpe okpukperechi" a na-akpọ ya "Slackware"? Ekwesịrị m ịkpọ ya LINUX, ọ bụrụ na naanị ihe dị mkpa bụ kernel!
Banyere ajụjụ nke mbụ gị, ọ kpọrọ ya Slackware dabere na akụrụngwa nke sistemụ arụmọrụ a jiri tụnyere onye bu ya ụzọ, Softlanding Linux Systems (RIP).
Banyere ajụjụ nke abụọ gị:
Dị mfe, n'ihi na ọ bụ nkesa, na n'ihi na ọ bụ a obiọma onye ọchịchị aka ike maka ndụ. Na mgbakwunye, ọ bụ nkesa kachasị ogologo dị adị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ịbụ ọsụ ụzọ n'ihe banyere njikwa nchịkọta ngwugwu, ọ gaghị adị.
@ eliotime3000 dị iche iche, Patrick Volkerding nwere ikike karịa ịkpọ sistemu arụmọrụ gị ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ihe adịghị mma bụ ịkpọ Sistemụ arụmọrụ ka kernel dị mfe karịa GNU sistemụ arụmọrụ.
Iji doo anya: Torvalds anaghị emepe ma na-echekwa OS zuru oke ma na-arụ ọrụ, naanị kernel maka GNU.
FSF mepụtara GNU Sistemụ arụmọrụ ya na kernel ya HURD ruo ọtụtụ afọ tupu Linux adị (echere m na isi nsogbu Stallman bụ aha "na-abụghị nke azụmahịa" ọ họọrọ).
Ọfọn, m tụlere mkparịta ụka a, m na-aga ịnya ịnyịnya na VW / Audi m.
Jisie na ị ga-agwa tupu troll!
Dystopic Vegan dijo
Ọ dị mma, enwere Gnu / hurd, Gnu / Linux, GNU / kFreeBSD, mgbe Hurd a dị njikere enweghị mgbaghara ịkpọ GNU Linux yana na teknụzụ teknụzụ gam akporo, ọ ga-abụ Android / Linux mana onye ọ bụla m maara ya dị ka gam akporo na o buru na imara ihe o nwere kernel linux mana otutu ndi "linux" na aputa iti mkpu si n'elu ulo ... android nwere Linux !!! nwere Linux !! ha na-ekwu ... Linux nwetara ahịa ahịa ... mana ọ bụ n'ezie android nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70% anaghị akwụ ụgwọ ...
Zaghachi na Distopico Vegan
Enweghị m ịkekọrịta ihe ọ bụla ị na-ekwu. M na-enye gị otu ihe atụ: Ubuntu bụ nkesa na-adabere na GNU / Linux (ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịdịkwu ọcha GNU na Linux). Ihe anyị enweghị ike ime bụ ịsị "nke ọma anyị na-akpọ ya Linux ma ọ bụ ya" ma chefuo ndị niile rụrụ ọrụ na GNU. Nwere ike ịgbakwunye kernel ọzọ na GNU ma ọ bụ ya. Mana dịka ha kwugoro n’elu, Linux n’enweghị GNU bụ naanị “ọrụ ma ọ bụ tesis ma ọ bụ ihe ọchị nke onye hacker na Mahadum Findlandia”.
Ana m ekwukarị GNU / Linux na ederede, n'ihi nkwanye ùgwù. Mgbe m na-ekwu maka OS, m na-ekwukarị Linux nye ndị ọhụụ amaghị maka ya na GNU / Linux na ndị ọrụ m maara ndị ma maka ya. Na mgbe niile, m na-ekwukwa mgbe niile, m na-agbazi ndị mmadụ mgbe ha na-ekwu "linux" naanị iji zoo aka na sistemụ arụmọrụ zuru ezu: GNU / Linux.
Na Gnu ị gbakwunye kernel ọzọ, bsd dịka ọmụmaatụ, ma ịkwado nkwado nke 90% nke ngwaike ahụ, gnome ga-akwụsị ịrụ ọrụ n'ihi enweghị nkwekọ na ịghara ibuga ya na ọtụtụ puku ihe ndị ọzọ. Nuklia bu ihe kachasi mkpa n’ime sistemu, dikwa ya ka akuku kachasi n’ime uwa, obu nketa nke ihe niile.
Debian Gnu / Hurd:
Gnome maka Debian Gnu / Hurd:
(... na mgbe ahụ okwu amaghị ihe na-afụ ụfụ)
@ pandev92 WTF? Ọ bụrụ n ’ịnweta GNU na Linux, ọ bụ naanị ọrụ hacker nke Finnish.” GNU chọrọ Linux na Linux chọrọ GNU. Point. Onweghi ihe ozo ikwu. Ọ bụghị na m ziri ezi ma ọlị, nke ahụ bụ na ị maara na ọ dị otu a na anyị niile maara na ọ dị otu a. Gaghị eleda otu akụkụ ọrụ anya otu a. Nke a bụ ọrụ nkwonkwo ma akpọ ya GNU / Linux. Ubuntu bụ nkesa na-adabere na GNU / Linux. Ubuntu bu nkesa nke Debian nke dabere na GNU / Linux. Anyị niile ndị na-eji nkesa GNU / Linux eme ihe na-eji nkesa ndị dabeere na GNU / Linux. My pusi mgbe ọ bịarutere na tebụl m na ọ hụrụ na e nwere a cursor na m na ihuenyo na ọ na-akpali ma na-agbalị ijide ya, ọ na-ekpori ndụ na a cursor na-arụ ọrụ na GNU / Linux. O siri ike ịghọta, n’ezie. Linus nwere ike ikwu ihe ọ bụla ọ chọrọ.
Ọ bụrụ n ’wepụ Gnu na Linux, a ga-eji ssd ndị ọzọ wee dochie ngwa ọrụ ndị ahụ, dịka bsd n’efu mere, na-akwụsị iji gcc. Ma nke a abụghị mkparịta ụka.
Ọ BR you na ị jiri Linux dochie kernel BSD ọ ga-abụ BSD nwere kernel linux, ọ bụghị linux
Hey! site n'ihe m na-ahụ mgbe m hover òké ahụ na akara ngosi nke obere penguuin (tux) na onye ọrụ m, ahụrụ m na ọ na-ekwu "GNU / Linux x64" 🙂
Ahụrụ m ya n'ụzọ dị iche ... Maka m sistemụ arụmọrụ bụ Linux, na ọtụtụ nkesa na-agụnye usoro nke ngwa mepụtara ma ọ bụ wepụta n'okpuru usoro ikikere FSF, GNU GPL. Nke a abụghị ihe kpatara m ga-eji tinye GNU n'ihu Linux naanị maka nkwupụta mmụta nke ndị mmepe.
N'aka nke ọzọ, mgbe etinye GNU n'ihu Linux Anaghị m achọpụta ọrụ nke onye nrụpụta GIMP, ma ọ bụ onye nrụpụta GTK +, wdg, wdg, wdg. Mba, na-etinye GNU n'ihu Linux, ana m enye Richard Stallman na ntọala ya otuto, nke sitere na mbido bụ ihe na-ewute onye nwere abụba, na Linux na-anara otuto niile yana ewepụrụ ya (ma ọ bụ ntọala ya).
Ọ bụ naanị nnukwu nganga!
Zaghachi David Gómez
"Ihe anyị enweghị ike ime bụ ịsị" nke ọma anyị na-akpọ ya Linux ma ọ bụ ya "ma chefuo ndị niile rụrụ ọrụ na GNU"
Mana gịnị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkpọ ya "GNU / Linux" wee chefuo ndị ọzọ niile mmemme ha so na nkesa Linux (dịka KDE, Gnome, LibreOffice, ...) na ndị na-abụghị Linux Torvals ma ọ bụ na-arụ ọrụ maka GNU?
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhota, ị ga-akpọ ya "xxx / yyy / yyy / abc / 123 / xyz / pqr / rst / uvw /… /… /… / Linux".
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhota, ị ga-akpọ ya "xxx / yyy / yyy / abc / 123 / xyz / pqr / rst / uvw /… /… / GNU / Linux".
Nwere ike ịkpọ ya ihe ọ bụla ịchọrọ, mana onweghị onye na-ekwu na Linux (ma ọ bụ GNU / Linux, Ubuntu, Fedora, Android ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya) bụ nkà ihe ọmụma, ma ya fọdụzie okpukperechi. Onye na-ekwu ụdị ihe a, bụ n'ihi na ọ nwere echiche a gafere ma ọ bụ ikekwe ọ maghị mgbe ọ gụrụ nke ọma iji gụọ ihe dị n'asụsụ dị iche iche na saịtị nke Free Software Foundation. GNU abụghịkwa nkà ihe ọmụma ma ọ bụ okpukperechi, kama ọ bụ sistemụ arụmọrụ nke sitere na ụkpụrụ nke ngwanrọ n'efu, nke nwere akụkụ teknụzụ, ụkpụrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana nkà ihe ọmụma. Mkpebi dị mkpa nke edemede gị ziri ezi, mana ọ bụghị maka ebumnuche ị kwuru.
Zaghachi Carlos Zayas Guggiari
pandev92, kedu ka ị ga esi gwa Linux (a na m akpọ kwa ya Linux, period) ma ọ bụrụ na ọ bụ okpukperechi, ị ga - ahụ ya na nkọwa, ọ bụrụ na ọ bụ okpukperechi? N'ezie ọ bụ na ihe ndị ọzọ, ọ bụ fundamentalist, ọ bụ dị ka Catholic ezi nke tupu emepechabeghị, ọ dị ka Islam na-asọ oyi. Just na-ekwu ihe ọjọọ megide onye amụma (GNU ma ọ bụ ihe ọ bụla) ha na-egbutu àkwá gị ma ọ bụ sunye gị ọkụ mgbe ị ka dị ndụ ma ọ bụrụ na ha egbughị ha n'elu ite ahụ.
Okpukpe na-eji enweghị ọgụgụ isi nke ndị mmadụ emegharị ha anya.
The free software nkà ihe ọmụma na-aga na-emegide nke ahụ.
Ikekwe "isi na okpukperechi" nke ụlọ ọrụ ngwanrọ "ka elu" anaghị ahapụ ha ka ha hụ ihe mere eme.
Edemede onye ode akwukwo na okwu gi gbaliri “igbatu” ndi n’adighi eche echiche dika gi (na mgbakwunye na ndi Katoliki na ndi Alakụba), n’enweghi ntoala obula.
Lee ihe jọrọ njọ, ọ dị ka nwatakịrị na-akwado windo dere ya: S
Naanị ihe m kwenyere bụ na gnu / Linux abụghị okpukperechi, ihe ọ bụla bụ ihe mkpofu.
ezigbo ederede, na ihe ụfọdụ anaghị m ekwenye, mana enweghị obi abụọ ekwere m n'ozi izugbe "linux abụghị okpukpe".
Ezigbo ozi. Obi abụọ adịghị ya, ọtụtụ mmadụ adabala na "oke ịnụ ọkụ n'obi okpukpe" nke na-eme ka otu obodo nke ndị na-arụ ọrụ wee kewaa ma ọ bụ ghara ịnabata echiche ndị ọzọ, na-aghọ ndị ọcha ma ọ bụ ndị isi. 🙂
Ha mụnyere ọkụ, ma ekwere m n'ọtụtụ ihe ị na-ekwu, ekwuru m mgbe niile na onye ọ bụla na-eji ihe ọ chọrọ iyi.
Ihe na-amasị m bụ ihe @seba kwuru «endinggbachitere echiche na-emekwa ka ị bụrụ ohu ya, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, nke a bụ mmadụ». Ana m ekerịta nke a.
@ pandev92: Aghọtaghị m ihe ị na-ekwu site na «. Linux abụghị nkà ihe ọmụma, ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị ọzọ, ihe atụ doro anya bụ ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ndị nwekwara proprietary nmepe ma jiri Linux maka mkpa ha, dị ka Oracle, AMD, Nvidia, Steam, Intel, IBM ».»
Linux, Ọ dabeere na a na nkà ihe ọmụma, na ụlọ ọrụ na-eji ya na-enweghị ihe ọ bụla nkà ihe ọmụma apụtaghị na nke a adịghị, na njedebe nke niile «Nkà ihe ọmụma» bụ ugbu a, ihe na-agbanwe site na mmadụ onye na onye ọ bụla adapts ya. ka ihe ọ dị mma.
Ndị ọrụ na-eji linux na-enweghị nkà ihe ọmụma? nke ahụ bụ ihe zuru oke, ụlọ ọrụ na-eji nke ugbu a "Mercantilism" eme ihe, na Linux na-adaba na nke a ka ọ na-ebelata ụgwọ, na-abawanye nchekwa, ma na-enye ha ihe ọmụma na-enweghị ngwụcha na ha nwere ike itinye na mmepe nke ha. Ole mmemme mechiri emechi agaghị eji echiche ndị enwetara site na ngwanrọ n'efu? ma ọ bụ na ha ga-enwe koodu efu, na anyị enweghị ike nyochaa?
Ekele na ezigbo ọkwa
Ezigbo isiokwu! Ezigbo ọhụụ.
Zaghachi Nicolai Tassani
Ndo, mana site na ihe m guworo, o di m ka inwere isi aka gi n'elu nke ikwesighi ime ka o doo anya. Abughi m onye isi ala, ebe di anya na ya, ndi mmadu n’eji ihe obula ha n’acho, windo mac gnu / Linux, ihe obula bara uru diri onye obula. Anọla m na-eji "GNU / LINUX" eme ihe karịrị afọ iri, ọ dị m ka ụzọ gị si zie ezi. Aghọtara m ozi ahụ ma ọ bụghị eziokwu (maka m) ihe ị na-ekwu. Na-etinye GNU, LINUX na OPEN SOURCE n'otu akpa ahụ. Onye ọ bụla nwekwara ihe nke ya. GNU bụ (opensource) gburugburu ebe obibi na-agba na Linux, Linux bụ isi, yana Open Source bụ ngwanrọ emeghe. Linux, kernel, nwere akụkụ pụrụ iche n'ọtụtụ n'ime nkesa. N'aka nke ọzọ, enwere koodu efu nke erere ma nwee ike zụta maka ya, enweela ndị ekesara GNU / LINUX nke akwụgoro (yabụ na Xandros, Linspire, Suse… cheta) Nkà ihe ọmụma nke opensource abụghị nke iji igwe na ụfọdụ sistemụ arụmọrụ, nke ahụ ga-abụ ntụnyere ma dị mfe ntụnyere. Nkà ihe ọmụma nke opensource dabere na mmemme ihe ma ọ bụ gbanwee ihe maka ọdịmma mmadụ niile. M kwughachiri ọzọ, ị nwere ike ịgba ụgwọ, ma ọ bụrụ na ịgwaghị enyi m Jonhatan Thomas, onye okike nke Openshot, onye ya na kickstarter wepụtara iji wee rara onwe ya nye oge maka ihe ọ masịrị ya. Nanị ihe ị kpọrọ ndị nkwenkwe bụ ndị na-agbachitere iji koodu nweere onwe ha n'ihi na ha kwenyere na ya na ị nwere ike ịnweta ọha mmadụ ka mma, ọ bụrụgodi na ọ dị ka ọ bụ ihe iju anya, koodu efu anaghị emetụta ọha mmadụ.
Hee, nke mbu mu na Gnu linux, a na m akpo ya Linux, dika linus tovalval ga-asi, onweghi ihe g’enyere gnu n’ihu ya. Nke abuo, ị nyere m ihe atụ nke ngwa nke kickstarter kwadoro ..., otu ..., mgbe gị onwe gị maara na ọ gaghị ekwe omume maka ngwa niile ịme nke ahụ.
Nkà ihe ọmụma nke emepeebuce bụ ezigbo amamihe, nke ịnara koodu ma nwee ike iji ya maka uru onwe ya, yana ikikere nke kacha kwado omume a bụ ndị eji arụ ọrụ dịka chromium, wayland, x11 wdg.
Ka mehiere, n’ikpeazụ, abamuru maka obodo, ihe niile na-alaghachikwute ya, Free abụghị nke efu
Echere m na ị zighi ezi itinye ya na obodo naanị, ihe ndị kwuru otu afọ gara aga, gbasara ya:
N'ụzọ ụfọdụ, echere m na n'ezie mmeri kasịnụ nke Open Source na-enye onye ọ bụla ohere ịchọ ọdịmma onwe ya naanị, ọ bụghị ịnwa ime ka mmadụ niile tinye aka na ọdịmma.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anaghị m ahụ Open Source dị ka obere ozi nke "ka anyị niile gụọ kumbaya gburugburu ọkụ ma mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma." Mba, Open Source na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-enye onyinye maka ebumnuche nke onwe ya na nke ọdịmma onwe ya.
Ebumnuche mbụ nke ịchọ ọdịmma onwe onye maka Linux na-adabere naanị na ntụrụndụ nke tinkering. Nke ahụ bụ ihe mere m: mmemme bụ ihe omume ntụrụndụ m, agụụ m, na ịmụ otu esi ejikwa ngwaike bụ ihe mgbaru ọsọ m. Anyɛ yiye koraa no, ɛsɛ sɛ yedi kan siesie yɛn ho ma nhyiam no.
Ewerela ya n’onwe gi, kama ka ọ bụrụ onye na-ekwu maka izere ime ya okpukpe ị maara amaokwu niile Linus kwuru.
N'akụkụ ziri ezi, nke ahụ bụ ọnọdụ nke Maazị Linus, onye o doro anya na ọ bụ onye ị kacha elekwasị anya, mana ọ bụghị mmadụ niile dị ka ya ma ọ bụ gị, ọ bụghị dị ka m ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, onye ọ bụla n'ime anyị dị iche. Maazị Ritchie na-enweghị onye anyị na-agaghị ekwu maka aki, echeghị nke ahụ, Mazi Stallman ma ọ bụ Maddog, ma ọ bụ…. Na nke a achọghị m ka ị chee na m na-eme ka ha mara ha, site na ya, onye ọ bụla ga-enwe mkpebi nke aka ya na mkpali ya, mana ọ bụrụ na n'ime mkpali ahụ bụ ịrụ ọrụ na ọtụtụ ndị mmadụ yana nke ahụ, dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme erite uru Ha ga-enwe ohere na teknụzụ, mba ndị na-emepe emepe, ọbụlagodi ndị dị ka mụ na gị, agwala m na enwere nsogbu na nke ahụ. Ọ bụrụ na ị si n'ọnọdụ gị na blọọgụ ma ọ bụ mụ onwe m si na nke m nwere ike ịnyere aka ma rụkọta ọrụ na ọka nke ájá nke anyị nwere ike itinye, gịnị dị njọ na nke ahụ? Mana maka nke ahụ, anyị ga-adị obere njọ ma ghara ịgwakọta ihe, anyị kwesịrị "ịgwa", na ịraraghị onwe anyị nye na-agagharị onwe anyị na ọ bụrụ na gnu / Linux ma ọ bụ Linux (dị ka gị na Mazi Linux kpọrọ ya) bụ nke a ma ọ bụ nke ahụ , ọ bụrụ okpukpe ma ọ bụ nkà ihe ọmụma. Linux abụghị nkà ihe ọmụma ma ọ bụ okpukpe, mana GNU, na-enweghị nkà ihe ọmụma, nwere ike iyi nke a n'ihi na ọ kwenyere na obodo na akụkọ ahụhụ ya, na ihe ọhụrụ ya na onyinye ya, na-enweghị ịrịọ maka ihe ọ bụla na nloghachi, ee ee ... usoro eji arụ ọrụ nke ọma.
Achọpụtara m na ọ chọrọ ịmata ihe ị na-ekwu:
«Amalitere m oge mgbe m kwusịrị okwu Stallman, na-ejide n’aka na nke a bụ naanị eziokwu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, mgbe anyị kwenyere na anyị nwere 100% nke eziokwu ahụ, anyị ezighi ezi, anyị enweghị ike ịhụ ezigbo ụwa»
Luckily ị naghịzi eso okwu Mr. Stallman, mana site na ihe m hụrụ na nkwupụta gị ị na-agbaso okwu Maazị Linus Torvalds.
AH .. Onye isi akwukwo maka Torvalds, mana obughi maka Stallman.
Anyị niile nwere echiche anyị na ọkwa a na-arịọ maka nkwanye ùgwù, mana ọ na-asọpụrụ ọtụtụ echiche, echiche na ihe odide na-enweghị nke post a agaghị adị
Ọ dịghị ma ọlị @morfeo, abughi m onye isi mmalite nke torval, n'ọtụtụ ihe ọ na-ekwu na ekwenyeghị m ma ọ dịkarịrị obere na nsonaazụ ya, mana ebe a anyị anaghị atụle ma ana akpọ linux gnu linux, Linux, ma ọ bụ naanị ubuntu. N'ebe a anyị na-atụle ihe ọzọ, biko atụgharịla isiokwu ahụ.
Gịnịkwa bụ ihe ọzọ? Nke ahụ bụ ihe isiokwu na-ekwu maka ya, blissful "fundamentalisms" (opekata mpe o nwere aha ahụ).
Ọ dị mkpa ide ederede zuru ezu iji kwuo "Aga m eche echiche otu m chọrọ"? Ọ baghị uru ikwube. Ihe a na-aghọtaghị bụ ihe kpatara ha ji egbusi oge ha n'ịgha ụgha (enwere ọtụtụ ụgha, dị ka nke ahụ redhat na-enye ọrụ ọrụ aka: REDHAT IS PAID (n'efu bụ Fedora)). Nke a abụghị okpukpe, ma ọ bụ nkwenkwe, ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ: ọ bụ teknụzụ ozi dị ọcha na koodu isi, na mgbakwunye na ọchụchọ maka iwu nwere njikọ karịa nke ugbu a. Ọ bụ ịmara ihe egwu nke sọftụwia nwegasịrị (na na ọ gafeelarị na anya, ya na Snowden na NSA, na "fundamentalist" Stallman bụ eziokwu) Gịnị bụ ebumnobi? n'ihi na enweelarịrị isiokwu nke isiokwu na-anwa ịmanye echiche ndị a dị iche na blog a
Eziokwu, enwere m olile anya na ị ga-ewere ya nke ọma, ọ dị m ka ọ bụ ihe ziri ezi nye m, otu ị si agwa ndị na - agụ akwụkwọ gị akwụkwọ gosipụtara oke enweghị nsọpụrụ. Echere m na ị bụ nwata ma a na-agbazi ya na afọ na ịmara na ị na-amụtakwu ihe site na ịge ntị (ịgụ na nke a) karịa site na ikwu (ide).
N'ime ihe m na-elebara Stallman anya bụ iji obere sọftụwia nwere ikike ọ bụla enwere ike n'ihi nzuzo na ọkachasị n'azụ (Prism na ihe ndị ọzọ), mana site na ebe ahụ ịghọ onye nkuzi ma ọ bụ ịga n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ ...
Ihe bụ nsogbu bụ na ọtụtụ ndị na-emegharị anya pụtara na ọgwụgwụ.
Maka ọtụtụ, iji Linux bụ njedebe na ha na-anya isi na ya. N'aka nke ọzọ, enwere ndị na-eji naanị ihe na-enye ha ohere iwepụtakwu oge. Ọtụtụ oge anyị na-echefu na PC abụghị ihe ọzọ karịa ngwa ọrụ iji rụọ ụfọdụ ọrụ yana ngwa ọrụ iji mee ka ndụ dịkwuo mfe n'ozuzu.
N'okwu m, m na-eji Linux n'ihi na enwere m mmasị na ngwanrọ n'efu, ọ dịkwa ka ezigbo nkà ihe ọmụma nwere ike (ma ọ bụ kwesịrị) ebufe ya n'akụkụ dị iche iche nke ndụ anyị. Ma kwa, m na-eji Linux n'ihi na ọ na-azọpụta m oge ịnụ ụtọ ihe ndị ọzọ na m na-arụpụta karịa na OS ọ bụla.
Dị ka ị na-ekwu, Linux nwere ntụpọ na ọtụtụ oge ị ga-alụ ọgụ na ha. Mana ọ bụ ihe ọ pụtara iji ihe n'efu.
N'otu ụzọ ahụ, ọ na-emekwa na isi mmalite, ọ bụ ezie na a na-ahụ nke ahụ dịka ngwa ọrụ karịa ka ọ na-ajụ.
Banyere post n'onwe ya:
Also na-arụ ụka na ihe ị na-akpọ Linux anaghị enye usoro akụ na ụba ọzọ na isi obodo neoliberal ugbu a, yana iji kwụsị ihe mbụ, ị ga-enwerịrị ihe ọzọ. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị gụọ "Akụ nke netwọkụ", ọrụ a na-enye arụmarụ arụmụka banyere akụ na ụba dịka nke na-apụta na "linux" ma na-enye data bara uru nke na-akwado edemede ahụ, "Linux" na-enye ihe ọzọ. Ọ bụ ezie na enweghị ụzọ ọzọ enyeghị ya, ọ bụghị ihe kpatara ịkwụsị ọnọdụ gara aga, ka m kọwaa: n'oge Agha Worldwa nke Abụọ, ndị Poland lụrụ ọgụ megide ndị Nazi yana n'akụkụ ndị Soviet Russia, ọbụnakwa na ha maara na ndị Russia ọ bụghị ndị mmadụ. akụkọ ihe mere eme "enyi" ha (na dịka e mechara hụ ya n'oge ha nọ na USSR) n'ihi na ọbụlagodi na ha enweghị ụzọ ọzọ ọ ka mma iwepụ ọrịa kansa wee hụ ihe ha mere, enweghị nke ozo abughi ihe kpatara na adighi ewepu A tumor.
Ọ bụrụ na ị megharịa kernel linux, na GNU sistemụ arụmọrụ zuru oke yana nkà ihe ọmụma na ebumnuche dị n’azụ ya, Linux dị ka onye na-ede edemede a, ndị mmadụ chọrọ ịnwale ma jiri sistemụ ndị ọzọ arụ ọrụ, nyocha, nnwale na nkwanye ugwu.
Mana Free Software nwere ebumnuche ndabere, ọ bụ ya mere OpenSource wdg.
Linux dị ka Linux, geek nwere ọtụtụ oge n'efu, yana GNU na ngwanrọ n'efu bụ maka ndị chọrọ ụwa ka mma, n'efu, wdg. Maka ihe, ihe odide dịka RMS gụnyere ma kwado ọtụtụ mmekọrịta mmadụ na nnwere onwe , na agbanyeghị na ihe odide ndị a ekwenyeghi na ihe niile ma ọ dịkarịa ala, ọ na-enye gị ndabere na ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụghị naanị "ọ bụ n'efu ma enwere m ọchịchọ ịmata"
Ọ bụrụ na ọ bụ oke ịnụ ọkụ n'okpukpe, n'ihi na a tụrụ Gandhi mkpọrọ maka echiche ya n'ụwa ebe ọ dị mkpa ịghọta "mkpa na uto", Luther King nwụrụ maka "okpukpe okpukpe" ya ịhụ ikike obodo, dị ka Malcom X na Bakunin, Barry Horne, Emma Goldman wdg.
Ndị a tụrụ mkpọrọ ma ọ bụ nwụọ maka echiche ha, maka echiche nke ụwa ka mma ma dịkwa mma, enweghị ntụsara ahụ, ọ bụghị ịdị mma, ma ọ bụ na ọ bụghị naanị n'ihi ịchọ ịmata ihe mana maka echiche nke mgbanwe a na-achọkarị.
Nwatakịrị ahụ nwere mgbagwoju anya, ọ na-agwakọta nnwere onwe nke mmadụ na koodu efu.
I nweghikwa eziokwu zuru oke n'okwu a ... Sọpụrụ echiche ha dịka ị nwere ike ịkwanyere nke gị. Echiche dị ka nnwere onwe onwe onye bụ nke onye ọ bụla. Ha abughi ebumnuche ebumnuche ma apughi iji tuta ma obu jiri ha mee ihe ...
Ekwenyere m na Karlinux, ọbụlagodi na ị na-asọpụrụ onye ọzọ, ị nwere ike ị gaghị asọpụrụ echiche ya n'ihi na ọ bụ ezighi ezi, ọ bụrụ na m na-agwa gị na 2 + 2 = 5, ọbụlagodi na ị na-asọpụrụ m, ị ga-agwa m na m mejọrọ, ma ọ bụrụ na m agwa gị na ọ bụ uche m ma ọ ka dị mma dị ka nke gị? Ọ bụghị echiche niile dị mma, echekwara m na enwere usoro iwu na-ezighi ezi na post a, dịka gị onwe gị gosipụtara.
Ezigbo ihe atụ. Mgbakọ na mwepụ na-emezu ụfọdụ ụkpụrụ ndị bụ isi ma anaghị ahapụ ohere maka echiche. Ọ bụrụ na m gwa gị na 2 + 2 = 4 ị nwere ike ịgwa m na maka gị ọnụọgụ 4 a na-akpọ ya ise. Mana ị nweghị ike ikwu na 2 + 2 = 5 ebe ọ bụ na eziokwu anaghị adaba na akụkụ ahụ.
Aghọtara m echiche gị mana ihe atụ anaghị arụ ọrụ.
Mgbakọ na mwepụ na-agbaso ụkpụrụ axiomatic nke a nabatara ebe niile n'ihi na ewezuga ha enweghị usoro ọ bụla dị ka nke ahụ. Ya mere echiche dị na mpụga nke mgbakọ na mwepụ, ọ dịkarịa ala na ọkwa ahụ.
Ọ dị mma, nke ahụ bụ ihe m kwuru, enweghị ike iji nnwere onwe onye ọrụ atụnyere ma ọ bụ tụọ ya ma ọ bụ nwee mgbagwoju anya ya na nnwere onwe koodu, na enweghị ike ịme mgbagwoju anya, na agbanyeghị m rịọ mgbaghara n'okpuru ma ọ bụrụ na mmadụ nwere obi ọjọọ banyere ihe m kwuru.
Kwesighi ịrịọ mgbaghara maka ihe ọ bụla, nwoke. Anyị na-ekwu okwu n'ụzọ dị mma na enweghị ajọ okwukwe.
Nke a bụ kpọmkwem akparamagwa m na-eleda anya, omume nke onye nyocha nke onye nsọ dị nsọ, onye kwenyere na ya nwere eziokwu zuru oke, ma nwee ike duru ndị mmehie dara ogbenye n ’ọkụ ma ọ bụ kpọọ gị n’osisi.
Kedu nlelị, anaghị m eleda gị anya! N'ebe dị anya na ya, ọ bụrụ na m mere, agaghị m ede ihe m dere, ọ bụrụ na ọ nyere gị nsogbu, gbaghara m, ọ ga-eme ka ị ghọta na ị nwere ike ị na-agwakọta ihe na ọ bụ na ọ bụghị naanị m, kama ihe m kwuru abụghị ebum n'uche m imejọ gị, Ọ bụrụ na enwere m, ana m arịọ mgbaghara, achọghịkwa m ka ihe m kwuru gafee uka, ọ bụghị ma ọlị. Echiche m bụ echiche m dịka nke gị, ọ nweghị ihe ọzọ. Mana ọ bụrụ n ’inye echiche m, ị gafere m na ya, m ga-ele anya otube m ntakịrị. Ọ bụrụ na ọ bụ ya mere m ji bụrụ onye na-anụ ọkụ n’obi, ọ dị nwute, echeghị m, n’ezie m na-eji windo na laptọọpụ ma anaghị m echegbu onwe m, na abụghị m onye egwuregwu na achọghị m maka ọrụ. Mana ihe m kwuru, echere m na emejọghị m onye ọ bụla, mana emeela m ya, mgbaghara
Anọ m, m nọnyeere gị, ọ na-agbagha ihe niile ma nwee ahịhịa ọgụgụ isi. Ma eleghị anya, ha bụ mmetụta nke iji Windows 8 ...
Na nnwere onwe ịmata ihe ụlọ ọrụ na-eme na data m abụghị onye?
Ka anyị ghara ịkwado okwu a oke. Iji Richard Stallman tụnyere ndị dị ka Bakunin yiri ka ọ bụ nnukwu ikwubiga okwu ókè nye m. Biko, anyi na ekwu okwu banyere ngwa oru, obughi oru nke aka ya ma obu nnwere onwe mmadu ...
Ọ dị ezigbo iche ihe ha abụọ na-egosi.
Ọ bụrụ na site na ngwanrọ ha na-enyocha ma na-achịkwa mmadụ niile, ọ bụghị banyere nnwere onwe nke mmadụ?
«Lima, Septemba 23, 1984. M ga-aga na projector na gbochie njikwa igwe mmadụ".
@xex, @morfeo na @Distopico Vegan M na-aza gị atọ n'ime otu okwu ahụ maka ịdị mfe.
@xex: Ihe ndị mmadụ dịka Bakunin, Proudhon ma ọ bụ Kropotkin, ndị nna nna anarchism kwuru, anaghị aga otu usoro ihe RMS kwuru. Ha na agọnarị ndị ọchịchị aka ike ma na-arụ ụka ihe kpatara ha. Free software anaghị anwa megide ndị a ike owuwu. Onweghi mgbe a na-anarchism na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ ikike. Ihe omuma ihe omuma emeghe adighi egbochi okike ulo oru ya mere, dika m siri kwue, o naghi egbochi njide nke ihe ndia gha eme. Eziokwu ahụ bụ na m nwere ike ịhụ koodu nke ngwa nke ụlọ ọrụ na-enye agaghị egbochi m ịchịkwa n'ụzọ ndị ọzọ dịka ahịa.
@morfeo: Ihe m na-ekwu n’okwu m bụ, dịka m kwurula, na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ agaghị egbochi gọọmentị, ụlọ ọrụ na akụnụba na - aga n’ihu na - achịkwa ndụ anyị. Ma ọ dịkarịa ala, nke ahụ bụ ụzọ m si ahụ ya.
@Distopico Vegan: Anaghị m ekwu na anaghị m ekerịta echiche gị na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na - enwe mmetụta na - emebi ụfọdụ agbụ nke ọha mmadụ na - ewetara anyị. Ihe m kwuru n’okwu m bụ na ihe Stallman na-eme dịcha n’okpuru ihe ndị dị ka Bakunin nọ na-eso. Okwu nke ikpeazụ a sara mbara ma n'ọtụtụ ebe karịa nke Stallman. Ọ bụ ya mere m ji kwuo na anyị enweghị ike iji tụnyere abụọ. Ha abụọ na-akwado nnwere onwe, ee, mana ọ bụghị n'otu ọkwa. Ana m ekwu banyere nke ahụ.
O doro anya na nkà ihe ọmụma Open Source, m si ele ihe anya na nke gị, a na m ewere ya, bụ obere nzọụkwụ iwetara ndị mmadụ ụkpụrụ nnwere onwe na nnwere onwe nke ndị anarchist kwuru. Ana m eji Debian n'ihi na ọ bụ nkesa nwere ihe ngosi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme m mpako. M ga-aga n'ihu na-agbachitere ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ mgbe ọ bụla enwere ike, mana ọ bụkwa eziokwu na ọ bụ obere nkedo megide obodo emebere nke ọma site na ala. Ghọtala m ...
A ụtọ iso gị kparịta ụka a 😉
a ngwá ọrụ na ike nke ukwuu, dị ka telivishọn, dị ka ndị mgbasa ozi, dị ka okpukpe ihe ndị odide dị ka Bakunin kwuru banyere na boycotted, ọtụtụ ọgụ azụmahịa telivishọn na-akpọ "ngwá ọrụ", ụfọdụ ọgụ monsanto na-"ngwá ọrụ" ma n’ezie onye ọ bụla nwere nzụlite ya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ekwula ya ma gụọ uche m ma kwenye na 99.99%, nnwere onwe nke mmadụ gbanwere n'ihi gburugburu ebe mmadụ na-arụ ọrụ, ikekwe usoro GNU tụpụtara anaghị emetụta mmadụ niile, mana ole na ole, GNU OS / Linux bụ ihe kachasị mma na nke ahụ bụ eziokwu, naanị ị ga - ama etu ị ga - esi họrọ ezigbo ngwaike iji rụọ ọrụ dịka mkpa gị si dị, ya bụ, ị ga - achọ nkwekọ dịka ndị Buddha na - eme.
Ihe nlele: Ekwesiri m iji ihe eji eme ihe ngosi na uzo di nma ma merie 7, ma ha abughi ihe ojoo, ma etinye m mkpa maka GNU / Linux distro tupu ihe achọrọ maka inwe nkewa ma obu diski ike maka Windows, obu ezie na nke ahu bu n'ihe banyere laptọọpụ m, na desktọpụ m enwere Windows 8 iji gbue oge ezumike na-egwu COD, Crysis na egwuregwu ndị ahụ niile na-adịghị agba 100% na GNU / Linux, nke ahụ na-egbu nnwere onwe m ịhọrọ? ??, ọbụghị ma ọlị, na-enye m ụzọ ọzọ maka erughị eru nke OS n'okwu a
Zaghachi NayosX Ness
N'ọtụtụ ụzọ ekwere m na gị. Kedu ihe ọzọ, ana m eji GNU / Linux n'ihi na enwere m ohere ka mma iweghachi PC oge ochie na Slackware karịa Windows XP.
Ugbu a, nsogbu bụ na ọ bụrụ na ị kpọchie onwe gị na ụkpụrụ, ị ga-abụ onye nnabata zuru oke, nke ọtụtụ ndị fanboys na-eme, ma ị maghị na e nwere nde paradaịs na-esikwu ike, n'etiti ha, ihe dị mfe ».
Ihe m na-emegide ngwanrọ ngwanrọ bụ na, ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbachitere ikike nwebisiinka ha, ha ga-eme ya site na veto na ngwanrọ na ha ga-ere iwu n'ụzọ iwu n'agbanyeghị mba ha nọ, mana dịka anyị nke nwere obere ike ịzụta, ha gbaghara anyị maka ịpịa ihe ndị dị na ngwanrọ ma si otú a na-adabere n'ebe ha nọ nke mere na anyị kwere ka anyị wuo usoro ọdịnala nke gbanyere anyị na "naanị sọftụwia dị ukwuu" enwere.
Banyere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ekwere m na ọ bụ nke kachasị mma na nkà ihe ọmụma na ogo, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, mgbe a bịara n'ịzụlite ezigbo nnọchi maka ngwanrọ ngwongwo, ha na-enweta ya na-ezighi ezi na eziokwu bụ na ọ na-akpata nlelị nke nke ahụ na-aga n'ihu na-eji sọftụwia nwere ikike, ebe ọ naghị ewepụta ahụmịhe nke ha nwere ike ịkwagide iji ha rụọ ọrụ (okwu kachasị ama bụ gnash na distros nke FSF kwadoro).
Na Windows, ekwere m na mgbe ụfọdụ, ọ bụ ọgbaghara (NTFS, UAC, spyware dị ọnụ ala dịka WAT), mana ọ bụrụ na ị bi ebe ọ dabara n'ụzọ dị ka Peru, ọ dị nwute na ọ na-egbu mgbu na Windows na GNU / Linux, n'ihi na ọ bụrụ na igosighi ya na sọftụwia anaghị akwụ ụgwọ otu ihe ahụ na / ma ọ bụ karịa karịa nke ya, ọ gaghị akwụsị.
Ekwenyere m na ị na-akpọ ya Linux. N'oge na-adịbeghị anya, ahụrụ m eserese ebe ha gosipụtara pasent ole nke GNU dị na distro (echetaghị m nke) na ọ bụ naanị 8% nke ngụkọta. Mgbe ahụ ka anyị kwesịrị ịkpọ aha ihe ndị dị ka GNU / Linux / Xorg / KDE maka akụkụ nke usoro ọ bụla dị mkpa.
Na% nke linux?
Site na GNU enwere 8% (+ 5% si Gnome, nke bụ akụkụ gọọmentị nke ọrụ GNU!)
Nke kernel (Linux) enwere 9% (O siri ike ọdịiche)
Ihe ndi ozo sitere na ndi ozo (mozilla, java, xorg)
Ugbu a bụ os a distro?
ọ bụchaghị. Usoro ahụ nwere ike ịrụ ọrụ zuru oke na-enweghị xorg, na-enweghị java, na-enweghị mozilla, na-enweghị gnome, wdg.
Ọ fọdụrụ naanị Gnu na Linux, nke mebere OS zuru oke ma rụọ ọrụ.Ha nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị nke ọzọ?
Eeh, enwere HURD (kernel nke GNU) ma nwekwaa Android (nke nwere Linux, ma obughi GNU)
Enwere m ike ịkpọ GNU / Hurd Hurd?
Ọ gaghị abụ ihe ezi uche dị na ya, ihe nkịtị ga-abụ GNU doro anya, nke bụ aha OS.
Ekwesịrị m ịkpọ gam akporo gam akporo / Linux?
Ọ bụrụ na ịchọrọ, mana a na-akpọkarị ya gam akporo, nke bụ aha OS.
Ya mere, mmadụ zara m, gịnị kpatara anyị ji akpọ GNU (/ Linux) LInux naanị mgbe GNU bụ OS na Linux bụ otu n'ime kernels ya?
ezi isiokwu, ọ na-eje ozi maka mkparịta ụka na ike nke echiche ndị bụ isi dịka gnu, Linux na opensource ... nke a na-azụ ihe ọmụma m masịrị kde ọ bụ ya mere m ji eji Linux
Ire ọkụ ire ure dị ka mgbe niile mgbe ị na-ede ihe na na njedebe nke ugbu a kpochapụwo: «Ka m na-eche ma na-eme ihe ọ bụla m chọrọ, Abụ m Windowslerdo na iBorrego na ihe ha na-elekọta ...»
Ọbụna onye ọrụ gị gbara m mgba okpuru ... ịgba izu !!!
Ọ bụ isi ọwụwa iji jikwaa onye ọrụ-ọrụ na Google Chrome.
Ndị na-asị na ị na-ekwu "linux" ma ọ bụ "gnu / linux" n'amaghịdị ihe nkọwa nke sistemụ bụ, bia, gụọ ụzọ.
Ma ọ bụrụ na ị jụọ m ihe nkọwa nke sistemụ arụmọrụ bụ, ọ dịghị otu, n'akwụkwọ m hụrụ ma ọ dịkarịa ala 4, na wiki dabere na isiokwu ị gụrụ ma ọ bụ asụsụ nke nkọwa ya gbanwere.
ọ bụrụ na anyị ewere na sistemụ arụmọrụ bụ kernel, Linux na-enweta mmeri
ọ bụrụ na anyị ewere na sistemụ arụmọrụ bụ "ngwugwu" niile ha "na - ere" gị, mgbe ahụ mmeri, ubuntu, gentoo, wdg.
ọ bụrụ na anyị ewere na sistemụ arụmọrụ bụ kernel gbakwunyere ngwaọrụ ndị ọzọ "isi" mgbe ahụ gnu / Linux na-enweta mmeri
na mkparịta ụka ahụ nwere ike ịga n'ihu ruo mgbe ebighi ebi. adịla automatons na ọ bụ ihe niile ma ọ bụ 1 ma ọ bụ 0, na ndụ n'ezie enwere ike ịnwe eziokwu dị iche ma ọ bụ ụzọ isi hụ ihe.
si na nke a pụta, ana m ekele onye ode akwụkwọ maka ịnwa ide ihe dịka nke ahụ, mana ndị Taliban nọ ya, ha anaghị agbaghara, jisie ike na-aza ndị isi ike niile ndị ga-edere gị echiche mara mma nke na-anaghị ekwe ka a rikoma ime ka ha 🙂
Ndụ n'ime Kraịst abụghị okpukperechi, okpukpe dị iche iche na-ekwughachi ugboro ugboro na igbe ọgụgụ isi nke ndị na-eso ụzọ ya, Kraịst kwuru:
«Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ, ọ dịghị onye na-abịakwute nna ma ọ bụ maka m»
Jọn: 14: 6
“Unu ga-amarakwa eziokwu ahụ, eziokwu ahụ ga-emekwa ka unu nwere onwe unu” Jn: 8:32
"N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya (agbụrụ mmadụ) n'ụzọ dị otu a nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọ bụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi MA nwee ndụ ebighi ebi" Jn: 3:16
Kraịst hụrụ gị n'anya, chọọ ya mgbe enwere ike ịchọta ya.
"Amụtawo m na nnwere onwe nke mmadụ karịrị nnwere onwe nke ngwanrọ" kwuru nke ọma, ekele
"Lima, Septemba 23, 1984. Ana m egwu nzuzu ma ọ dịkarịa ala nye echiche m"
Ọ dị ka ị ghọtaghị egwuregwu ahụ e kwuru gbasara Orwell.
Nyocha a site na ngwanrọ na-akwụsị ịkwụpụ ịntanetị, ma, ọ bụrụ na ha na-ele gị, ọ na-amaliteghachi mgbe ị jikọtara, nke ahụ na-eme n'agbanyeghị agbanye sistemụ ị na-eji. Nnwere onwe dị na mkpịsị aka gị, ọ bụghị na sistemụ arụmọrụ ị na-eji.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgụ koodu ahụ, ị ​​ga-ama ihe ọ na-eme! Ọ bụrụ na ị ma ihe ọ na-eme, inwere onwe gị ịhọrọ iji ya ma ọ bụ na ọ bụghị. Nnwere onwe dị na ngwanrọ ị na-eji, ọ bụghị na mkpịsị aka m, kama na mkpịsị aka nke onye mere ngwa ngwanrọ ahụ. Gịnị mere ọtụtụ ndị ji enwe mmasị ịkọwa isiokwu ha na-amachaghị? Ha maara ihe ọ bụla gbasara mmemme?
Nnem, mana olee azịza nzuzu. Ọ dị mma, morpheus, sọpụrụ aha otutu gị ma were ezumike.
«Kedu azịza nzuzu» OK, mgbe ahụ, ndị nke anyị na-agbachitere SI anaghị anagide ihe. Enwere ndị mechiri emechi karịa windo n'onwe ya!
Eleghị anya ị kwesịrị iwepụ ESO tupu ịwụnye GNU / Linux.
Amaghị m otú e si ekwe ka e bipụta aber dị otú ahụ.
Banyere echiche: Maka ihe ụtọ nke agba, na maka ihe mkpofu.
Banyere ndị ekweghị ekwe XD hahaha.
Banyere ndị na-agbasaghị Open Code. ekele si Mexico.
Dịka onye ọrụ Linux ọ masịrị m ịmeghe ihe na ihe ọ bụla ọ na-anọchi anya ya. Agbanyeghị na anaghị m eme mmemme, amaara m na ihe mepere emepe dị ka igwe obibi akwụkwọ n'oge ọchịchịrị.
Ogbolu 93 dijo
ebusola ụmụntakịrị agha, nke a bụ maka ịgbakwunye ma ghara ịkewa.
Onye edemede ahụ kwuru na ihe mgbochi dị n'etiti "ndị okpukperechi okpukpe" bụ ndị na-akwado nkà ihe ọmụma nke Free Software na "ndị nweere onwe ha" ndị nwere "nnwere onwe" iji jiri sọftụwia ha hụrụ n'anya.
Aghọtaghị m, ihe dị njọ na ngwanrọ azụmahịa, nke dị iche na nke onwe, a ghọtara ihe dị ka ihe na-anaghị ekwe gị, nke na-anaghị ekwe gị mgbe n'ezie ọ na-arụ ọrụ ya, nri?
Naanị ya ọrụ? Gịnị bụ "ọrụ ya"? Kedu ka isi mara na ọ nweghị ihe dị njọ na ya ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ọ na-eme?
Onweghi onye kwuru na ihe dị njọ bụ na ọ bụ azụmahịa. Enwere ọtụtụ mmemme azụmahịa na n'efu (RedHat, Suse, ma ọ bụ ndị m na-eme, ọmụmaatụ).
Ọ bụ nke ya n'ihi na:
- ọ naghị ahapụ gị ka ị gbaba ya ebe ọ bụla yana otu ị chọrọ
- anaghị eme ka ị mara ka esi arụ ọrụ na ihe ọ na-arụ n’ime
- anaghị ekwe ka ịkekọrịta ya na onye ọ bụla ịchọrọ, ebe ọ bụla ịchọrọ
- Ọ naghị ekwe ka ị gbanwee ya n’oge ezumike gị ma kee ndị ahụ ịchọrọ ndị ahụ.
Ọ dị "njọ, onye isi ala, okpukperechi" ikwere na ọ B NOTghị ụkpụrụ (ma ọ bụ iwu iwu) ịre ahịa ikikere ngwanrọ nke ụlọ ahịa?
Ọ bụ ihe "dị njọ, onye isi ala, okpukpe" ịchọ ime ka ndị ọzọ hụ nke a ma ghọta etu adịghị mma ọnọdụ a dị?
Hasnye nwere uche mechiri emechi? Gini mere ndi oru ohuru kwesiri iji gbapu n'ihi nke a?
Dị ka ị na-ekwu, naanị ihe m ma bụ na ọ bụrụ na m hụ ndị dị ka gị n'okporo ámá, m na-eguzo n'akụkụ ma na-aga n'ụzọ m, dị ka a ga - asị na m na - eje ije oge niile iji gbanwee, gụọ koodu wdg, hahahahahaha kpọrọ, ekele na-aja m mma ụbọchị ahụ agwụla.
Ma anaghị m ekwu na ị ga-ahụ koodu niile.
M na-ekwu na ha agaghị egbochi ya
Ọfọn, ha ekwesịghị ịmanye gị ka ị gosi ya, nri?
Dịka ọmụmaatụ, gịnị kpatara na "a manyere" ndị na-emepụta nri iji gosipụta ihe ndị ha ji eme ha?
Nwere ike ire PC n’agwaghị ndị ahịa ihe nhazi na ebe nchekwa ọ nwere?
You ga-azụta ụgbọ ala ma ọ bụrụ na onye nrụpụta machibidoro gị imeghe ma ọ bụ gbanwee ya mgbe ọ masịrị gị?
Oh, ma otu ị si kwuo "ọ bụrụ na m hụ ndị dị ka gị n'okporo ámá, m ga-apụ n'akụkụ"
Kedu ka ị si eche m, dị ka onye egwu Alakụba nwere okpu na egbe na ihe niile? Naanị n'ihi na ọ dị mma ịnwe koodu nke mmemme m na-eji dị?
Ndị proprietary software ozioma na-arụ ọrụ ha nri demonizing anyị!
Uhie okpu bụ ezigbo curmudgeon gbasara nkesa ngwanrọ na / ma ọ bụ ihe ngwanrọ mepere emepe na mba dịka North Korea na Cuba (gụnyere enyemaka site na IRC), ma nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ ndị dị ka Red Hat dị ka Novell bụ azụmahịa n'ogologo, n'ihi ya ị nwere ike ịgụnye blobs ndị emere maka ebumnuche azụmahịa ndị ahụ.
N'ezie, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile nwere BLOBS ahụ (ha nọ na Torvalds kernel) ma e wezụga linux-libre. Banyere ihe ị na-ekwu banyere RedHat, ọ na-egosi na sọftụwia efu enweghị ihe ọ bụla metụtara ọchịchị Kọmunist, ma ọ bụ na ọ dịghị emegide "ebumnuche azụmahịa." SL dị oke ọnụ ahịa karịa sọftụwia nwegasịrị (ndị isi ike nwere ike zụta ma ree ngwaahịa ha chọrọ na enweghị mgbochi, sọftụwia nwegasịrị ike)
EGO NA-ADIFGH FROM IHE NA-AH FREEGH FREE N'efu, olee ihe ọzọ ị ga-eji kọwaa nke ahụ?
Ogbenye Stallman nwere Bekee !!
Commerce software abụghị ihe proprietary software. Free software nwekwara ike ịbụ nke azụmahịa. Ihe ngwanrọ nke onwe bụ nke na-egbochi otu ma ọ bụ karịa nke nnwere onwe anọ: iji, mmegharị, nkesa na mmelite nke ngwanrọ ahụ. Enwere sọftụwia nwere ikike nke a ga - eji ma kesaa n'efu, mana ọnweghị nke a ga - agbanwe ma ọ bụ kwalite ọfụma, n'ihi na nke ahụ ga - achọ koodu isi.
Zaghachi Carlos Zayas
Nke ahụ ziri ezi, enyi m, oke egwu a ha tinyere maka edemede nke m kwenyere nke ọma bụ ụdị ihe na - eme ka ndị ọrụ Linux n'ọdịnihu gbaa ọsọ, ma GNU dị n'ihu ma ọ bụ.
Ihe kachasị njọ banyere ndị agbụrụ bụ na ha enweghị ọchị ...
ọ bụrụ na Linux bụ okpukperechi, n'ezie ọ gaghị adị na ya, n'ihi enweghị m ekweghị na Chineke nke ọma na iwu nke St.IGNUcious bụ ihe nzuzu.
Ruo mgbe o mechara kwuo ihe dị ezigbo mma Fran, gịnị mere ya? onye tiri ya ihe? ma ọ bụ ebee ka m na-e copyomi a? Echeghị m na ị chere maka ya ... xD ekwuola nke ọma!
Kpọ ụfọdụ anụ mmiri nke na-apụta taa GNU / Linux dị ka ihe arụ nye m, ọ bụ ya mere m ji kpọọ ha Linux Linux (ma e wezụga Debian) ... Ọ dị m nwute maka ndị ọcha ahụ chọrọ ịmata ọrụ Stallman ... mana Agaghị m achọ itinye okwu GNU ka ọ gbasaa na ndabara weta DRM, firmwares na blobs mechiri emechi ma ọ bụ mee ka ị bụrụ "atụmatụ azụmahịa" (okwu maka adware).
1) ANY ARE B ALL Ndi Ohu na Ndi Nkume dika anyi ma obu Mu. Ọ bụ ohu ya ideals, ọ bụ ohu ya echiche, ọ bụ ohu ya ụkpụrụ omume, ọ bụ ohu ya ụkpụrụ ọma. Stallman (dika guru ọ bụla), ihe niile ọ na-eme bụ ịgba ohu nke uche site na ịgbanwe omume ọma mana ịhapụ ya, nke na -emepụta ìgwè ehi ọzọ nwere usoro dị iche. Ezigbo nnwere onwe na-eche echiche karịa otu echiche ma na-emegiderịta onwe ya ruo mgbe ebighi ebi ma na-enweghị ịhapụ ụzọ n'ihi na ụgha maka otu ụkpụrụ omume bụ eziokwu maka onye ọzọ. A ghaghị igbu Gurus.
2) ofdị ịgba ohu ọzọ bụ mkpa. Hụtụla pyramid Maslow? E kewara mkpa nwoke ọ bụla n’ime ọkwa ise ma mezue ọkwa ọ bụla, a ga-emerịrị ọkwa niile dị ala. Ọ bụrụ na nnwere onwe dị n'elu pyramid ahụ (na-ewere nnwere onwe na-eduga na obi ụtọ), mgbe ahụ mkpa ọ bụla bụ agbụ. Mana enwere ụfọdụ ụdọ na, mgbe agbajiri, gbuo onye ahụ (nke ọkwa mbụ, mkpa anụ ahụ). Yabụ, echiche bụ na "nnwere onwe enweghị ụdọ" dara n'ihi ihe m kwuru.
Ka anyi ghara ikwu maka nnwere onwe. Ka anyị kwuo banyere ịdabere.
"Anyị ga-egbu ndị gurus" onye na-ekwu? Okwu a adịghị gị ka “guru”?
Onye kwuru ya bụ onye anaghị achọ ụmụazụ. Zarathustra.
@Tina Toledo na-etinye + 1 na 3, 2, 1 ...
Ekwenyesiri m ike, ekwenyere m na nnweta nnwere onwe nke ngwanrọ n'efu na ngwanrọ na-arụ na Linux.
Onweghi onye nweere onwe ya .. dika mmadu .. eziokwu nke ịbụ mmadu (ma kwenye na anyị nwere ike imegide isi ebumpụta ụwa nke lanarị) na-eme ka anyị kpọchie na gburugburu ahụ (n'ezie yana ụfọdụ iche)
Mana kedu sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na - atụ aro bụ utopian mana mara mma .. eziokwu .. gburugburu na nkà ihe ọmụma obodo na - kere ebe ọ bụ ezie na onye ọ bụla dị ka zombies na - ekwu "Enwere m onwe m enwere onwe m" (ka ị nọ ọdụ n'ụlọ na kọmputa ụbọchị niile. " Ọ bụ ihe ijuanya na ") anyị maara na opekata mpe ụfọdụ n'ime anyị nwere ntụkwasị obi.
Na obodo nwere ikike ghara ịchọ (opekata mpe ọ bụghị 100%) ụlọ ọrụ ndị akpịrị na-akpọ ego na ike.
Na anyị nwere ike ịgbalị ịtụkwasị obi .. n'ime ụwa ọhụrụ a ebe .. teknụzụ na ịntanetị abụrụla nnukwu mmụba na ndụ .. .. opekata mpe anyị nwere ike ịtụkwasị obi (ma ọ bụ ọkara) na enwere ndị na-eme ya n'eziokwu n'ebughị ụzọ nwere olile anya ime ka anyi puta ihe na nloghachi .. ma oburu na obughi maka eziokwu di nfe nke icho inyere ndi ozo aka .. mara nma ..
Na nkà ihe ọmụma dị mkpa .. n'ihi na ọ bụ omenaala .. ụwa na-agagharị na omenaala .. ..
Ebee ka anyi ga agha ma o buru na omenala anyi nwere ... anyi choro inwere onwe anyi ma oburu na intaneti ma ekwenyesiri m ike na obughi nani intaneti ... ka ndi anyi choro na adikwa na ụmụ nwoke ibe anyị ... nwere ike inyere onye ọzọ aka na enweghị ihe ọ bụla na nloghachi .. ọ bụ akụkụ nke ndụ anyị .. ọ bụ ezie na ha bụ naanị kọmputa na nọmba .. ha dị ka mgbakwunye nke ọtụtụ n'ime anyị ma ọ bụ ihe dị mma na anyị na-achọ na-achịkwa ha nke ọma .. mana n’ebe ahụ ka anyị ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ma gharakwa ikwu ihe ndị dị ka «Enwere m onwe m .. ugbu a ana m eji linux» »ma nọrọ ụbọchị niile na kọmputa na-eleghara ezinụlọ anya, ma ọ bụ ihe omume ndụ nke ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ (belụsọ maka ndị na-arụ ọrụ na nke a ... ma ha bụ ndị mmemme ma ọ bụ ndị ọzọ ... ị mere ha nwere ihe ngọpụ xD)
Echere m na n'akụkụ ụfọdụ ị na-agbagha nnwere onwe nke mmadụ na nnwere onwe ime nhọrọ na usoro nke oriri.
Nchịkọta maka ndị na-achọghị ịgụ nke ukwuu: Sọftụwia na - egosi ọtụtụ ikike nwere ụdị dị iche iche nke imepụta yana nke ahụ bụ ihe na - atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ihe na-eweta free software na-abụ kpọmkwem a ọhụrụ software mmepụta usoro. Usoro a (ndị jikọtara onwe ha nke ọma na ndị njikwa onwe ha jikwa ya) kpuchiri otu ụlọ ọrụ ụfọdụ si eji ụdị usoro a, mana ọ bụkwa eziokwu na otu ụlọ ọrụ ndị a agbanweela otu o si arụ ọrụ n'ụzọ a. Ọ pụtaghị na ha kwụsịrị ịbụ ndị isi ike, n'ihi na usoro mmepụta ha bụ otu ihe nakwa na sọftụwia ahụ nwere "nnwere onwe" ọkachasị n'eziokwu na ọ bụ ebe ahụ ka onye ọ bụla were ma gbanwee.
Ọ bụrụ n'ịlelee ụdị nrụpụta megidere nke ikeketeorie, ha ga-ahụ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ ezigbo ụzọ iji mepụta sistemụ nke ha n'onwe ha na-atụ aro (yana isi awọ, n'ezie) na ha gbalịrị imezughị nke ọma itinye ya na nkeji oge na akụkọ ntolite. Ọ bụ ezie na ị ga-aga narị afọ nke XNUMX iji hụ nke ahụ, ikekwe). Otu n'ime echiche bụ isi nke ụdị ndị a megidere isi obodo / neoliberalism (nke sitere na isi aka ekpe) kwuru na mgbe ndị na-arụ ọrụ na-enweta ihe ọrụ na mkpebi banyere ihe a ga-eme ha, "usoro okike" na-arụpụta ga-enwe arụmọrụ ka mma, nnwere onwe ka ukwuu maka ndị na-arụ ọrụ iji mezuo ya (nnwere onwe apụtaghị ịdị umengwụ) yabụ usoro niile ga-aka mma (gụnyere na ị gaghị eme ya naanị n'ihi na ọ bụ ọrụ gị, mana n'ihi na ị masịrị ya, a isi ihe na free software na na anyị nwere ike ibi kwa ụbọchị na peeji a na m chere na ọ bụ gị na m agbamume ịkọrọ okwu ndị a).
Ekwenyere m na 100% na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ abụghị okpukperechi na ọ kwesịghị, mana ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ka Richard Stallman, bụ ndị, yana uru ya na ọghọm ya, anaghị arụ ọrụ dị ukwuu na ihu ọma ha mgbe anyị na-anwa ịghọta etu esi efu Sọftụwia nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa na ndụ ndị mmadụ, na-emetụta ọ bụghị naanị site na sọftụwia, kamakwa ịbụ ihe atụ dị ndụ nke ụdị nrụpụta dị iche iche (ya na ndị ọma na ndị ọjọọ ọ nwere). Mgbe niile onu ogugu enwere ugbua nke na-ekpuchi ndi ozo nile adighi ewetara anyi ihe oma, ihe obula. N'ozuzu, ike dị ukwuu na-adabere n'okwu ma ọ bụ omume ha, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịnọ ugbu a na oke ma ọ bụ obere.
Ihe ị na-ekwu maka na enwere ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ bụ eziokwu, mana amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ ọtụtụ ndị nwere ike ikwu ya. Lee anya na ebe nchekwa ọ bụla iji hụ ole bụ ọrụ nkeonwe nke ụdị X na-eme na ebe Y, na-enweghị ndị na-enye onyinye ma ọ bụ na 1 ma ọ bụ 2. Nke ahụ bụkwa sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, mana enweghị ọkụ dịka kernel ma ọ bụ nnukwu ọrụ ọ bụla. Eleghị anya ị nwere obere mmetụta zuru ụwa ọnụ, mana ikekwe site na mmetụta siri ike mpaghara (ọ bụrụ na ị nwere, ị nwere ike ịche n'echiche otu ngwa ọrụ nke nwa nwoke 5 mepụtara na afọ ole na ole gasịrị nwere ike ịbụ).
Isiokwu nke ngwanrọ na-enweghị ihe ọ bụla metụtara okpukpe (n'echiche nke ikwere na chi), mana ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Iji nweta nkọwa zuru ezu, ọ ga-ezu iji jee ije site na echiche bụ isi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya (ebe ọ bụ na ị si Spain, echere m na ị kwesịrị ido anya na PSOE abụghị ọchịchị mmekọrịta ọha na eze, obere ihe ndị Russia, Chinese, wdg. dabere na steeti dị ọcha na onye isi ike na-eji steeti iji mezuo nzube ya) iji chọta ọtụtụ nuances nke otu sọftụwia n'efu na-esi tụpụta echiche dị iche iche nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị (ma ọ bụ opekata mpe, ọ na-eme ya, n'echeghị echiche banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ, mana ihe kachasị mma maka ndị mmadụ). O bu ihe nwute n'echiche m, echere m na o nwebeghị nghọta nke ọtụtụ n'ime ndị ahụ metụtara na ihe ndị a nwere njikọ, ikekwe n'ihi oke echiche abụọ dị na ya na n'ihi ajọ mbunobi nke nwere ike ịdị n'akụkụ abụọ, mana lee ndị ọzọ bụ ndị na-akwado free software na mgbochi-onyunyo atumatu na ị ga-aghọta ihe anyị na-ekwu okwu banyere.
Ekele. Ekele maka echiche a ma enwere m olileanya na ha na-agakarị! Ndo maka ndọtị m.
Bravo! Nwere ike kwuo nke ka elu, mana ọbụghị nke doro anya.
Zaghachi Tina Toledo
You ga-abụ ya mere obiọma kọwaa a ikpe: «Oké, akwa ndudue. Linux abụghị nkà ihe ọmụma, ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị ọzọ, ihe atụ doro anya bụ ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ndị nwekwara proprietary nmepe ma jiri Linux maka mkpa ha, dị ka Oracle, AMD, Nvidia, Steam, Intel, IBM ».»? Aghọtaghị m arụmụka gị.
O doro anya na Linux abụghị nkà ihe ọmụma, ọ bụ OS, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ nwere ntọala nkà ihe ọmụma a na-apụghị ịgbanahụ agbanahụ. Nkà ihe ọmụma abụghị ihe i nwere ma ọ bụ na i nweghị, nkà ihe ọmụma bụ ọnọdụ, nkọwa nke eziokwu. N’amaghị ama, ị na-enwerịrị ọnọdụ ọgụgụ isi, a na-akpọ ya "utilitarianism."
Ma, biko, agbaghala nkà ihe ọmụma na okpukpe, ọ nweghị ihe ọzọ ga-emegide ya.
Ọ dabere n'ihe onye ọ bụla ghọtara site na "linux", n'ime oge ochie ọ bụ ngwugwu (GNU / LINUX / DISTRO) ma ọ bụ na ọ na-atụ aka na mmadụ, onye kere ya,
Ọ dị m ka fsf nwere ọnọdụ doro anya, gbasara otu ihe metụtara ọnọdụ izugbe, na dabere na ebumnuche nke otu, ị nwere ike ịtụle echiche nkà ihe ọmụma, distro ọ bụla nwere ụfọdụ iyi ma ọ bụ ụkpụrụ nduzi, na ọnọdụ ndị ahụ, anyị nwere ike ịtụle «nkà ihe ọmụma».
Mana ha nile dabere n’ihe okwu ndị ahụ pụtara na nke ọ bụla
Ọ bụ eziokwu na distro ọ bụla nwekwara echiche nke ya, mana anyị na-ekwu maka iji sọftụwia si n'echiche onye ọrụ, dịka ọmụmaatụ m na-eji manjaro, nke na-abịa na mmemme mmemme yana ewezuga ọkụ, echere m na anaghị m Enweghị m mmemme ọ bụla ugbu a n'ihi na m na-ehicha.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ihe niile nwere onwe ha, mana ọnọdụ dị ugbu a abụghị nke ahụ, enwere ezigbo sọftụwia n'efu maka ụfọdụ ihe, mana n'akụkụ ụfọdụ, ebe sọftụwia dị oke ọnụ ma dịkwa mkpa, ọ bụ okwu ọnụ, enweghị nke ya na proprietary dị ezigbo mma na enwere ndị chọrọ iji ha; (.
N'ihi na enwere nke ọzọ, ị nwere ihe ọ bụla, ị na-eji oge dị ukwuu nke ndụ gị, na ị na-agbaso otu echiche, nke a na-akọwa na nkà ihe ọmụma, na nsogbu ahụ na-ebilite, ị na-egosipụta dị ka ihe ị bụ, ma ọ bụ iji ikike ngwanrọ, nke ị ga-enyefe ndị ọzọ oge dị ukwuu maka ndụ gị iji nweta ya ma rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụ karịa. ma ọ bụ ị nọrọ n'azụ na-ele onye ọ bụla na-agafe ma ị na-anọ n'ihu n'azụ.
Ikekwe ụlọ zuru ezu zuru oke dị oke ọnụ, mana ikekwe ụlọ zuru ezu nke gbakwunyere oge ole na ole ezughị maka ngwa ngwa, nke ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ karịa, ọ bụghị n'ozuzu ya nke nwere ike inye gị nnukwu uru, gbasara otu ụzọ . Mana ị ga-etinyekwu oge (ọ dịka ịkwụ ụtụ isi, ụbọchị ole n'afọ ka m ga-arụ ọrụ iji kwụọ steeti) yana ọ bụ naanị (n'ihi na anaghị m enwe ike ịbanye na ọnụọgụ abụọ), '' Aga-ere ọkụ na MS hell.
Ọ dị mfe ịhụ mkpụrụ ájá dị anya karịa ugwu nke dị n'ihu gị. Ndị dị ka Stalman dị mkpa, mana ụwa n'onwe ya adịghị mma. na ọtụtụ n'ime ndị mmadụ nwere obi ọjọọ na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị karịa nkezi na etiti. Udo na ihunanya bu rue mgbe inwere umu, ma obu i gha aka n’onu otutu ibo maka oru ma obu na ikike izuta ihe gi ari elu.
Mgbe m nwere oge edere m koodu niile m nwere ike, dee ya ma kesaa ya, m na-anwa inye aka na ndụ dị adị na nke izizi. mana enweghị m ike ịkwụsị iji ọfịs, enweghị m ike ịhapụ windo, na na, ọtụtụ, na ọtụtụ n'ime ya abụghị n'ihi na m chọrọ ya, ma n'ihi na ọ dị mfe, (ọ na-ahapụ m oge iji na-umengwụ na ide koodu).
Na ibe nbudata Pidgin enwere bọtịnụ ibudata ihe nrụnye nke kwuru "Linux ndị ọzọ" ...
Moz Na Mozilla Forefox a download kọlụm na-aga na aha «Linux»….
Na Muy Linux ahụrụ m otu isiokwu isiokwu ya bụ «SyncDrive, onye ahịa Google Drive ọhụrụ maka Linux pụtara na ọnọdụ ahụ»
Eziokwu ahụ ndị Pidgin na Firefox installers na-ekwu naanị Linux, kama GNU / Linux, na-eme ka ha rụọ ọrụ faịlụ? Edemede nke MetalByte dere adabaghị n'ihi na n'isi ya ọ na-akpọsa na SyncDrive bụ maka Linux karịa GNU / Linux?
Ọ dịghị ihe dị ka ide edemede na-ekwupụta na Linux abụghị okpukpe ka ndị Zadok n'onwe ha wee rụọ ụka maka ụdị a: “Nkwulu! Na Torah anyị na-ekwu GNU / Linux… ya mere GNU / Linux ga-adị! "
"Ekwesighi ịkọwa ya ọzọ, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-agbagwoju ndị mmadụ anya ..." ka ha kwenyere.
Enteredbanyela na teknụzụ site ugbu a gaa n'ihu mgbe ha kpọrọ m Toledo Agaghị m atụgharị iji hụ ... ọ dịghị mkpa na ọ bụ naanị m bụ Toledo n'ebe ahụ ma ghọta na ọ bụ maka m. Kae, papa m bụ Toledo, nwanne m nwoke bụ Toledo, ụmụ nwanne papa m bụkwa Toledo. Ọ dịghị mkpa na ọ bụ naanị m nọ ebe ahụ, ọ bụrụ na ha akpọghị m Argentina Toledo ma ọ bụ na m ga-atụgharị ịhụ ...
You na-eche n’ezie na 99.9% nke ndị na-eji ngwanrọ akụrụngwa nwere mmasị ịgụ koodu nke OS arụnyere na PC ha? You n’ezie chere na ọ bụ ajụjụ na-echegbu gị mgbe ị nwere nsogbu ndị ọzọ dị mkpa karị, maka ha, iji dozie?
Ruo ole mgbe ka ha ga-achọpụta na ikikere iji sistemụ arụmọrụ bụ ngwaahịa ọzọ dị ka ihe ọ bụla ọzọ?
Achọpụtala m na ha na-esetịpụ ihe atụ na-enweghị isi na ha onwe ha na-ada:
1.- you ga - azụta ụgbọ ala nke na - agagharị naanị n'otu mpaghara na enweghị ike ịmasị ihe masịrị gị? Site na mbido, onye gwara gị na ụgbọ ala n'enweghị nsogbu ebe ọ masịrị anyị? Enwerem Van nke m ji kemgbe ọnwa, gini kpatara ya? n'ihi na ọ bụ yankee na enweghị m ike iso ya pụọ ​​na Mexico ọ gwụla ma m nyere ya iwu na mba a.
Enwere m ya? Eee.Ma emeela m otu ogo ahụ dị ka Windows m, n'ihi na injin ahụ, ọ bụrụ na m gbanwee ya, m ga-eme ụfọdụ usoro iwu iji gwa gị na igwe ochie ahụ abụghịzi nke m na ugbu a enwere m nke ọzọ, nke a pụtara na-emegharị ndebanye ndebanye aha n'ihi na nke a, ya na akara ọgụgụ nke usoro ochie engine, anaghịzi arụ ọrụ maka m. Usoro a nwere ụgwọ. Ghara ikwu Chassis ...
Ah, ma m nwere ike ree ya! Chọpụta, mana mgbe m rere ya, ụgbọ ala ahụ abụkwaghị nke m ... Enwekwaghị m ikike ọ bụla na ya. Dị ka Windows m.
N'ezie, onye nwe ọhụrụ ahụ ga-aga gwa ngalaba na-ahụ maka okporo ụzọ mpaghara ahụ na ụgbọ ala nke engine ya serial xxxxxx na onye chassis ya na ọnụọgụ nọmba ya ugbu a bụ nke ya ma ọ bụghị nke m.
Ma ... chere! Enwere m ike ịkpọga m ụgbọala m na-arụzi ụgbọala ma jụọ ya ka ọ nyochaa ya wee wuo otu dị ka ya. N'ikpeazụ, m nwere ụgbọ ala na mgbakwunye na ịbụ otu ihe ahụ dị ka nke gara aga ka mma ... Naanị m nwere nnukwu nsogbu: Achọrọ m engine, chassis na ahụ ka ha nwee akara akara nke ha ka m wee nwee ike ịgagharị na Enweghị m ike ịbanye na nkuku ahụ na-enweghị ego m ga-enweta ma eleghị anya ọbụna nga n'ihi enweghị ike igosi ebe ụgbọ m si. Otu dị ka Windows m.
2.-Onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke mepụtara ụlọ m rere m atụmatụ mwube ya, ya mere ha bụ nke m, m nwere ike i copyomi ha ma nye ha onye m chọrọ.
Ee, nke ahụ bụ eziokwu. Naanị enwere ihe m na-anaghị echebara echiche, atụmatụ a abụghị naanị usoro eserese na eserese na ihe owuwu na akụrụngwa, ha bụkwa akwụkwọ iwu nke onye ọkachamara bịanyere aka na ya nke onye ikikere ọkachamara ya nyere ya ikike iburu ọrụ obodo na mpụ niile. maka nhazi nhazi nhazi. Na mgbakwunye, atụmatụ ndị ahụ anaghị enyere m aka iwu ma ọ bụrụ na anaghị m ahazi ikike iwu ikike n'ihu obodo, obodo ma ọ bụ ikike kwekọrọ na ya ... nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe atụmatụ ndị ọkachamara ahụ bịanyere aka na-arụrụ m.
Ọ bụrụ na mmadụ anwaa ịrịọ ikike ọhụrụ iji wuo ala ọzọ, a nabataghị atụmatụ ndị ahụ ọzọ. Mana gịnị mere? Naanị n'ihi na onye ọkachamara ahụ bịanyere aka na atụmatụ ndị a ga-enwe ike ịza iwu naanị maka otu iwu ma yabụ na mbinye aka ya enweghị ike ịgbatị ma ọ bụ dị irè maka ikpe ndị ọzọ.
Mgbe ahụ enwere naanị nhọrọ abụọ ... ịghara iji atụmatụ ndị ahụ ma ọ bụ chọọ ọkachamara ahụ ma kwụọ ya ụgwọ ọzọ iji kwado atụmatụ ahụ ọzọ na ụlọ ọrụ ọzọ.
Pandev na ndị na-ede blọgụ ibe ya. Cheregodi ma ọ bụrụ na ihe m dere edepụtaghị ma ọ bụ na ekwenyeghị isi okwu a ga - ekwu ... mana nke bụ eziokwu bụ na ọ dị m mkpa ikwu ya.
TIna, ozigbo elav ma obu nano, ha gafere, ha na-anabata okwu ehehe, xdd dika o nwere otutu njiko, o na-eche nnabata.
Nkwanye ugwu m nye Tina maka inye klas ihe nlere nke komputa (obuna ma obu site na ntughari). Eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ amaghị ụdị mmepe nke ịme ngwanrọ sọftụwia, yana ọ bụrụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ọtụtụ ọnụ ụzọ ga - emeghere gị ma ị ga - aghọta ozugbo ka sọftụwia ọ bụla mepụtara dabere na usoro ịhapụ. Ọ bụghị maka ihe ọchị, ndị na-enye ha akara nke koodu iji nweta nnwere onwe na / ma ọ bụ ihe ngwanrọ mepere emepe bụ akụkụ nke ya, mana ha na-amụtakwa otu esi emepụta sọftụwia.
Ọ bụghị naanị maka nkà ihe ọmụma, mana ọ bụ maka ebumnuche na ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịmaghị, mana sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị mma karịa sọftụwia nwere ikike, ọ bụ n'ihi na ọ na - enye gị ohere isonye na ya ma anaghị ewepu gị nke nwe software.
Onweghi onye na-ajụ na ndị na-ahụ maka sọftụwia kwesịrị inwe mmasị na "ịgụ koodu", ọ bụ na mmadụ ole na ole nwere mmasi enweghị ohere ime ya.
N'ihe atụ 1 nke ụgbọ ala: Mmachibido ndị ị na-ekwu maka ha bụ Iwu Iwu nke obodo ebe ị bi B NOTGHP EGO nke Onye nrụpụta. Ọ B NOTGH same otu ihe ahụ dị ka Windows gị hụrụ n'anya:
- You gaghị na-akụ gị windo, dị nnọọ ịgbanwe ụfọdụ «ngwa»
- ANN GAGH SEL ere ya na windo gị, ị zụrụ akwụkwọ ikikere iji naanị kọmputa gị.
- I nweghị ike imeghe windos gị maka onye ọrụ nyocha
- You nwere ike ịgbanwe gị engine na nkwado iwu ya na-enweghị nkwenye nke emeputa, gị windo O.
Ihe atụ 2 nke atụmatụ:
- have nwere atụmatụ ma marakwa ihe ụlọ gị nwere
- You nwere ike iji ha wuo otu ụlọ (nke ọhụrụ, mbinye aka, nkwado iwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana ọ nweghị ihe jikọrọ ya na onye wuru ụlọ ahụ)
- Ha enweghị ike irere gị ụlọ “mechiri emechi”, na-egbochi gị ịmara otu esi wuo ya
Ezigbo okwu, mana site na ịgbachitere echiche ị ghọkwara ohu ya, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, nke ahụ bụ mmadụ.
Kpọmkwem, ugbu a Pandev bụ ohu ya na nkà ihe ọmụma xD
Naanị ihe edemede a na-emezi bụ na kịnel linux abụghị okpukperechi (nke ọ bụrụ na ọ dị, ọ ga-achọ ọtụtụ afọ ịmụ iji malite ịghọta ya). Amaghị m ihe akwụkwọ gbasara sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ị gụrụ iji dị mwute na-agbagọ echiche nke GNU, kernel na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, enwere m ike ịhụ gị ka ị na-emezi ihe a na-eme na nkọcha onye na-edekọ akwụkwọ maka na ọ ghọtaghị ntụzịaka ndị ahụ.
Enwere m ezigbo echiche, ọ na-amasị m iche ụwa nke anyị na-anaghị etinye ike anyị na ọdịmma onwe anyị, ebe anyị niile bụ ndị mmemme.
Maka na ụwa mebere ihe mmemme ahụ bụ ndị na - achị anyị, ị na - anabata mmemme ndị ọzọ mere, ma ọ bụ ịnabata ha.
Ọ gwụla ma ị bụ onye mmemme, ị ga-agbanwe koodu mmalite ma ọ bụ wuo mmemme nke gị. Echere m na obere akụkụ nke ihe ọmụma mmadụ dị ka mmemme nwere ikike ịgbanwe ụwa. Ọ bụ ya mere nnweta koodu koodu ji dịkwa m ezigbo mkpa.
Ekwenyere m na dị ka ndị nweere onwe ha, ihe omume bụ na omume anyị na-elekwasị anya n'ịkwado nnwere onwe nke ndị ọzọ, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka m hụrụ ikpe ziri ezi.
Ikpe ziri ezi dị m mkpa karịa nnwere onwe.
Maka inwe ezigbo nnwere onwe na ọha mmadụ, ọ bụ ọrụ dịịrị mmadụ niile ịchọ ọnọdụ ka mmadụ nwee ike nwekwu nnwere onwe, dị ka inye ihe dịka ị natara, ịkekọrịta echiche, ịkụzi etu ihe si arụ (ihe fọrọ nke nta ka Linux kụziere gị, nke N'ezie, otu ọ na-amụta ya site n'ịgụ)
Anaghị m anwa duzie onwe m na ndụ kwa ụbọchị, jiri ihe bara uru. Mgbe m na-eche ihu na mma. Ọ bụrụ na m eduzighị omume m gaa n'echiche m, m ga-enwe nnukwu nkwenye.
Ọ bụ ya mere m na-eji mgbe niile na-agbalị free software na ya kwesịrị ekwesị ụfọdụ, n'ihi na o yiri ka m na ọ bụ ihe na-achọkarị mma na ezigbo.
Isaac LA dijo
Zaghachi Isaac LA
O yiri ka ọ bụ nnọọ adịghị mma nye m etu echiche pandev92 si "nwee ekele" (ka emechara, n'ebe ahụ na mkpado ọ na - ekwu MGBE).
Ọ bụ echiche na-adọrọ mmasị, ikekwe ọ maghị etu esi eweghara ya nke ọma wee nwee esemokwu ahụ mana, bịanụ, blọọgụ a dị ka tebụl nwere iko kọfị ebe onye ọ bụla na-ekpughe echiche ha, echiche, echiche, wdg. . ma na-ese okwu banyere ha, jụụ, dị ka agadi nwoke.
Banyere ịkpọ OS GNU / Linux, achọpụtara m ya nke ukwuu (ikekwe ọ bụghị okwu ziri ezi) fanboyism ịkpọ ya GNU / Linux ọ bụghị naanị Linux, dịka ọmụmaatụ, ana m aghọta mgbe m nụrụ Linux na ọ bụ OS mebere ndị a. akụkụ abuo Agbanyeghị ogo ọgaranya na nke ọ bụla, ha abụọ dị mkpa na mbido iji ruo ihe dị ugbu a. Na ọ bụrụ na, ọ dịkarịa ala ọ dị mkpa ịkọwa n'ụzọ ụfọdụ (karịa ihe niile iji zere ọkụ ọkụ) na ha na-agwa gị ka ha na-ekwu na ọ ga-abụ GNU / Linux (na-ekwu okwu nyocha). Ọ bụ ezie na nke a bụ blọọgụ dị oke egwu, enwere nnwere onwe ka ọ gwa gị otu ọ bụla ịchọrọ, ịmara ihe ọ bụ na nke ahụ ezuru, n'otu ụzọ ahụ, GNU anaghị akwụsị n'ihi mmejọ dị mfe (nke ọ bụghị ) dị ka nke ahụ. Ọ bụ ezie na pandev92, nweere onwe gị izere nke a ma kwuo na ọ bụ GNU / Linux mana ị na-ekwu Linux n'ihi eziokwu ahụ, ọbụlagodi m, ike gwụrụ m ịpị shif + GNU + shif + / + L + inux oge ọ bụla m chọrọ ịkpọ ya XD ...
Ihe m doro anya bụ na enweghị m mmasị ma nwekwaa ahụ erughị ala maka omume ọtụtụ ndị mmadụ na-agbaso "x" ma ọ bụ "y" nkà ihe ọmụma. Na ọ bụghị ihe ọjọọ na ha na-agbachitere ya, mana otu ihe bụ iji chebe na ọzọ ọgụ, nri?
Dị ka ihe atụ, otu enyi m (free software extremist na uche m) na-eji Linux (ndo, ma m na-amasị na-ekwu na) na m na-eji Windows n'oge ahụ, o lere m anya nke a ewu nkume wee gwa m na m bụ onye nzuzu maka ịkwụsị nnwere onwe m ma mee m ohu na Windows. Ka o sina dị, "gịnị bụ hel? Free? Enwere m onwe m, obere mkpebi m" ekwuru m. Adịghị m mma n'igosi arụmụka ma ọ bụ echiche, mana achọrọ m ịkọwa karịa ma ọ bụ obere ihe a:
"Usoro ọ bụla ị na-eji, ihe ọ bụla ị chere, kwere na ihe ị kwenyere ma ọ bụ masịrị ihe m masịrị, enwere m onwe m mgbe niile dị ka nkà ihe ọmụma nke m si dị, nke bụ ihe na-ekpebi ihe m bụ. N'okwu a, nkà ihe ọmụma m (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ụzọ m si ahụ ndụ, amaara m na echiche ahụ dị iche mana ọ bụghị echiche ahụ n'onwe ya, echere m) abụghị iji mee onwe m ohu n'ụzọ ọ bụla belụsọ na ọ dị mkpa ma ọ bụchaghị ịbụ amanye. » (Amaara m na ọ dị oke mkpa na ihe, mana nkà ihe ọmụma abụghị uwe m siri ike, n'ihi nke ahụ, ana m ezere ịdaba na nsogbu ma na-anwa ịbụ ohu n'efu dịka o kwere mee).
Ma n'ezie, amatachaala m banyere ụlọ ọrụ ụfọdụ ụlọ ọrụ, ihe isi ike na njedebe nke ụfọdụ ndị ọzọ, yana ụfọdụ ihe n'agbanyeghị na ọ bụ ezie na ha emetụtaghị m nke ukwuu, amaara m na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme ma na oke miri emi ụzọ (iji mee ka nkasi obi gị rụọ ọrụ ma ọ bụ ọbụna gbochie onwe gị nkasi obi ahụ.
Amaghị m ma Photoshop ọ bụ ezigbo ihe atụ, maka ndị na-ese ihe nkiri na-eji Linux, onye ọ bụla ekwu “ahh, mana enwere GIMP, Krita, Inkscape, wdg. ọ na-anapụ onwe ya ", mana gịnị ma ọ bụrụ na ọ nwere ntụsara ahụ na Linux ọ hụrụ n'anya? Kedu ihe ọ ga - eme?, Gbanwee na Windows ma ọ bụrụ na ọ chọrọ (site n'ụzọ, echere m na n'okwu ọ ga - abụ ihe dịka "ịmanye onwe ya ịhapụ ọrụ aka ya"), yabụ onye hel anyị bụ igbochi nnwere onwe ya ịbụ ohu ma jiri Windows naanị site na Photoshop maka mma gị? Nnwere onwe zuru oke maka m, ọ dị ka m ghọrọ onye anaghị eri anụ ka m wee ghara igbu anụmanụ ma si otú ahụ kwanyere ndụ ùgwù, na-egbu osisi.
Okwu nnwere onwe ndị a dị oke mgbagwoju anya maka m ma ana m egbochi onwe m ịmụtakwu, nke ọma, enwere m afọ ojuju n'ihe m chere n'ihi na n'otu ụzọ ahụ m chere na ndụ m ga-adị njọ karịa ịchọ nnwere onwe karịa izere ịgba ohu.
N'ịlaghachi n'okwu ahụ, ekwenyere m na ọtụtụ post, yana ọtụtụ isi na ọkachasị na ịhapụ ihe mgbakwunye ndị ahụ niile na-abaghị uru (m na-ekwu maka ndị ọjọọ, ndị na-eme ihe ike) nke ngwanrọ n'efu ma ọ bụ nke mepere emepe, Linux abụghị mkpụrụ obi nke ụwa na onye ọrụ na-eji Office dịka ọmụmaatụ ekwesịghị ịkwụgbu ya wee bata n'ụlọ iji LibreOffice ... E kwuwerị, ọ dịghị ihe ọ bụla a na-eme na ịkọwa awa 10 mgbe n'ime nkeji 30 Debian arụnyere na n'otu ntabi anya ị ghọtara na ịnwụghị maka ya.
Na njedebe nke ụbọchị, kwa, amaara m na ọ nweere onwe ya ịsọpụrụghị, mana nke ahụ ga-abụ ohu nke ajọ echiche. Na uche m doro anya.
Ndo maka ogologo okwu a, ma eleghị anya ọ tọgbọ chakoo, ma eleghị anya ọ bụghị, mana ọ bụ okwu mbụ m buru ibu na desdelinux na enwere m obi anụrị.
Nke bụ eziokwu bụ na ekwenyeghị m n'ọtụtụ ihe ị na-ekwu. Nyocha gị enweghị mgbatị n'ọtụtụ ụzọ.
Naanị m chọrọ igosipụta ihe: Ndị ọrụ Linux niile kwesịrị imegide ikpe na-ezighị ezi yana, ya mere, megide usoro akụ na ụba ụwa.
Onye na-eji ubuntu ekwu ya, distro nke na-enye ụlọ ọrụ Canonical ikike. Site n'ụzọ, eziokwu ahụ bụ na linuxers na-eji gnu / linux apụtaghị na ha na-ekerịta gnu nkà ihe ọmụma (naanị ị ga-ahụ isiokwu Pandev). Site na ebe ahụ ịkekọrịta echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị-akụ na ụba enwere nnukwu Mgbatị.
Kubuntu ịbụ ihe dị oké ọnụ ahịa, nke bụ otu ma ọ bụghị otu. Ana m ejikwa ihe dị nro ma ọ bụrụ na ọ baara m uru. Mana nke ahụ abụghị ihe mere m jiri kwusi na ihe dị ka nke a na enweghị ike ịgbanwe. N'aka nke ọzọ, abịara m nweta sọftụwia n'efu n'ihi na m na-alụ ọgụ maka mgbanwe yana ọ dị m ka ọ bụ ezigbo ngwaọrụ, ma e wezụga inwe mmetụta nke akụkụ ụwa nke, na-emegide ihe Linus na-ekwu, na-achụpụ ịchọ ọdịmma onwe onye naanị na ịkpa ókè nke onye sistemụ ka anyị jiri ya.
N'oge na-adịbeghị anya enweela ebe ndị ọzọ nwere echiche yiri nke a. Ekwenyere m na Linux n'onwe ya bụ ngwá ọrụ. Ihe nwere nkà ihe ọmụma n'onwe ya abụghị linux, kama ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Ekwenyere m na ụfọdụ n'ime ihe ndị i kwuru. Ọ bụ eziokwu na ịmepụta sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na ihe atụ akụnụba ugbu a dị mgbagwoju anya maka obere onye nrụpụta. Mana ọ dị mkpa ịgbanwe ụdị akụ na ụba maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ, sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ otu! Ekwenyeghị m na ịsị "Nke ahụ ziri ezi, oge, ọ bụrụ na ị masịghị ya, ị na-atụgharị onwe gị." Ọfọn, ọ bụrụ na enweghị m mmasị na ya ma ọ dịkarịa ala m nwere ike ịsị na anaghị m amasị ya.
Ana m asọpụrụ echiche gị, mana m na-ahụ ya na nke ọzọ. Mgbe afọ 6 nke iji Linux, ana m eji ya maka ebumnuche nkà ihe ọmụma (ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ya). O doro anya na ọtụtụ ihe ga-adịrị m mfe ma ọ bụrụ na m na-eji windo eme ihe, mana maka IHE AH ((tinye aha ọ bụla ịchọrọ), ekpebiri m iji Linux na ngwanrọ n'efu maka ihe niile. Nke ahụ chere na m ga-amụta n ’ọganiihu na nsogbu ndị ọzọ; na nloghachi, ana m ewere nsonaazụ ya kachasị mma ma enwere m obi ụtọ na onwe m. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na m ga-eji MSOffice, Agaghị m eji ya, m ga-achọpụta etu esi edochi ya. N'ezie, ọ bụ naanị otu echiche.
Isi 1: OLE
Point 2: kedu ihe ị na-eji kama flash? Enweghị m ike tufuo ya: \_
Ndo, Adobe flash *
Ee: GNU Gnash. Naanị ihe ọjọọ bụ na ọ naghị emepe ọkọlọtọ mgbasa ozi niile na-apụta, na mgbakwunye na ọtụtụ ibe weebụ emere na ngwụcha ọkụ anaghị emepe n'ụzọ ziri ezi, na mgbakwunye, ọ na-eri ọtụtụ akụ karịa Adobe Flash Player n'onwe ya.
Ekweere m na nsogbu anyị -many- na flash nwere ụbọchị ha guru. Ọ bụ ezie na anyị nwere ụfọdụ nhụjuanya fọdụrụ.
Ọ bụghị okpukpe, ma n’azụ ya, ọ nwere nkà ihe ọmụma.
N'azụ ya nwere ọtụtụ puku nkà ihe ọmụma dị iche iche, nke ị na-enweghị ike ịsị "nke a bụ ya, na ndị na-eche echiche dị iche na m, na-aga n'elu osisi", ọ bụ sistemụ arụmọrụ, ebe onye ọ bụla na-erite uru n'ụzọ nke ya.
Amalitere m Linux n'ihi ọchịchọ ịmata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7 afọ na ọkara gara aga na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu dị ka ụlọ nsọ.
Echetara m mgbe a jụrụ Stallman banyere mwepụta nke Steam maka Linux, ọ bụ ezie na ọ masịghị echiche ahụ (ọkachasị n'ihi okwu DRM, nke m na-eso na nke a) n'agbanyeghị na o mechara kwuo "opekata mpe ị gaghị eji Windows"
Ọ bụ ezie na m na-ekekọrịta nnwere onwe 4 nke Free Software na m na-agbachitere ya, ọ bụrụ na m ga-eji sọftụwia nwere ikike, ma ọ dị mkpa ma ọ bụ n'ihi na achọrọ m, dị ka ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA ma ọ bụ Steam n'otu n'otu, ana m eme.
N'ezie, enwere otu nke atọ na Linux, ha bụ ndị na-ekwu na naanị ndị ọkachamara na mpaghara, mahadum, wdg ga-eji Linux, ọ bụghị site na ndị ọrụ desktọọpụ (dị ka a na-akpọkarị anyị)
"Ọ dị nwute na ụwa n'ezie, echiche nke sọftụwia bụ ngwaahịa ka na-aga n'ihu, na enwere ụgwọ maka iji sọftụwia a, ma ọ masịrị anyị ma ọ masịghị anyị, mana nke a bụ ụdị anyị bi na ya"
Na ahịrịokwu ahụ ị mehiere ọtụtụ na-eme, na-atụle sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Ọ bụghị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ bụla bụ n'efu, ọ bụ ezie na ọ kachasị, ma ọ bụghị sọftụwia niile anaghị akwụ ụgwọ.
Banyere post n'ozuzu, ekwesịrị m ikwu na m kwenyere na onye ọ bụla na-eji ihe ọ bụla ha chọrọ n'oge niile (M, dịka ọmụmaatụ, jiri Windows na GNU / Linux).
Echekwara m na okwu gbasara nnwere onwe gbagwojuru anya. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe ma na-anwa ime ka mmadụ kwenye banyere ihe ha ga-eji, anyị na-amanyekwa ha, mana sọftụwia nwere ikike na-egbochi ojiji ị nwere ike inye ya, na-egbochi gị, dịka ọmụmaatụ, ịgwa gị ihe atụ ọ bụ mmadụ na ịbụ ị nwere ike “gafere” ya.
"Ikekwe, mmadụ ga-abịa, were koodu ahụ, melite ya na ngwa gị ga-akarị nke mbụ, jiri obere mbọ"
Ebe ị na-ahapụ ndị niile ahụ nwere ike inye aka melite nchinchi ma ọ bụ ọrụ n'ozuzu ekele inwe ike ịnweta koodu isi.
Na nkenke, na mgbe m chere, na onye ọ bụla na-eji ihe kachasị amasị ha na ihe ha chọrọ n'oge niile, mana na sọftụwia nwere ikike na-egbochi anyị mgbe a bịara n'ihe anyị chọrọ.
Ndewo, jiri nkwanye ugwu dị ukwuu, a na m agwa enyi m biputere nke a, GADKWUO BOU N'OULỌ B FREE N'FREELỌ NT FREEKW FREEKW FREEKW FREEKW FREEKW FREEKW FREEKW FREEKW FREEKW ,KW ,KW ,KWỌ, edela imeju gị, ị nweere onwe gị ịhọrọ ihe ịchọrọ.
Linux bụ kernel GNU / Linux bụ ihe ziri ezi (nchịkọta yana kernel)
Radicals n'aka nke ọzọ, ana m echetara gị na etinyere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ha na - enye ya ikike ma ha na - eme ka ndị ọzọ jiri ya NA Ọ B IFR THEY na ha enweta ọrụ (ọ na - arụ ọrụ maka ha), a na - enye onyinye, nke a bụ etu ọrụ free si adị ndụ, ndị mmepe jiri ihe ha na-ewu ma na-enye ụlọ ọrụ nkwado ụlọ ọrụ na nke ahụ bụ ihe ha bi na ya, ọ dịghị onye na-anwụ n'ihi agụụ ọ gwụla ma, dị ka onye umengwụ, ha na-echere ka ha kụọ aka n'ọnụ ụzọ ha n'egosighi ihe ha nwere ike ime. Anyị niile na-eji ngwanrọ microsoft na free sw n'ụzọ ụfọdụ, n'ihi na anyị na-arụ ọrụ n'ebe dị iche iche ma ọ bụghị mmadụ niile na-eche dị ka anyị, dịka ọmụmaatụ enwere m mmasị maka free sw, m na-eme mgbanwe maka ihe dị ma ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ m gbalịa dozie ya na Enwere akwụkwọ na isi saịtị ọrụ yana enyemaka obodo, m na-amụta ma jiri GNU / Linux na BSD sistemụ arụmọrụ, Amụtakwara m ịme mmemme ngwa weebụ yana site na m na-ebikarị iji ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na anaghị m '' na-etu ọnụ na m na-eji nke a, anaghị m ekwu okwu dị ka onye na-anụ ọkụ n'obi, mana ọ bụrụ na mmadụ nwere mmasị, ana m agwa ha ihe dị mkpa, m na-anwa ịnye azịza site na iji teknụzụ efu, jikwaa sava na GNU / Linux na BSD ( FreeBSD, OpenBSD na NetBSD) Achọpụtara m na ọ bara uru ma anaghị m ada ma anaghị m eme mkpesa, enwere m mmasị na ịhụnanya maka nnwere onwe sw, enwere m mmasị ụfọdụ ụzọ iche echiche ebe ha na-ekwu na teknụzụ metụtara sw ekwesịghị ịdị emechi, anyi kwesiri iguta ihe banyere ikikere GPL na BSD tupu edereihe ọ bụla, ị na-nwere obere ma ị bụ nnọọ radikal.
Echere m na ọ bụrụ na anyị ga-arịọ mgbaghara maka sọftụwia na akụrụngwa anaghị akwụ ụgwọ yana akụrụngwa akụrụngwa veto ruo n'ókè nke ike anyị. Ma na-enweghị onwe-flagellating. Echeghị m na ọ bụ obi ọjọọ ịnwe ma wụnye Steam iji tụfuo omume ole na ole, ọ dị mwute ikwu na ndị na-egwu egwuregwu enweghị onyinye na-eme ka ọ bụrụ obere ndò na nnukwu ntụrụndụ.
N'okwu a, ọ bụ usoro akụ na ụba etinyere mgbe ị na-ere egwuregwu emechiri emechi. Ọ bụ ikeketeorie ma na -eweta ọtụtụ nde uru. Enweghi oke ego na oru Linux ọ bụla nwere ike ịlụ ọgụ na Blizzard, dịka ọmụmaatụ.
Ezigbo ihe ederede ma gha meputa esemokwu, site na ikikere gi m detuo ya ma biputa ya na peeji nke m (ya bu na nzere gi). Echiche bụ na onye ọ bụla na-atụnye ụtụ dịka ahụmahụ ha si dị ọ bụghị ọfụma ha.
Achọpụtara m ihe ederede, ọ dị nwute na m ka nwere mmemme sitere na ndị ọrụ ahụike m na-arụ ọrụ naanị na Windows yana ụlọ ọrụ ndị mere ka ha achọghị ka m mee otu maka Linux, yabụ m ga-eji ha na OS ahụ, ee ma ọ bụ ee .
Ma ọ bụghị ya, GNU / Linux na-amasị m.
E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi nweta ego, otu ụzọ iji mee ka ngwanrọ gị mepee ma ree ya bụ bulite koodu isi ya ma ree usoro a chịkọtara: ọ bụrụ na ị maara etu esi achịkọta ya bụ n'efu ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ee e. Ihe m na-agaghị eme bụ ịbanye agha nke "onye hapụrụ sọftụw dị ọnụ ala".
Mana ọ bụrụ na enwere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, jiri ya mee ihe oge ọ bụla i nwere ike. Ekwenyere m n'eziokwu ahụ bụ na onye ọ bụla nweere onwe ya ịme ihe ọ bụla na-esite na bọọlụ ha pụta na kọmpụta ha, mụ onwe m enwebeghị ike iwepụ ọkụ (na ịta ikikere na ọkụ ọ naghị agara m nke ọma), na m na-eri Facebook na google + (nke ahụ bụ ihe ọzọ, ị nwekwara ike ịme ego na mgbasa ozi). Agbanyeghị, ọ bụrụ na inwere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ọ bụla nwere otu atụmatụ ma ọ bụ ka mma karịa ndị nke sọftụwia nwere nke ọma nyere (ma lezie anya na anaghị m ekwu ihe ọ bụla gbasara "Enwere m ike iji ya mee ya" na ịme ihe ndị bụ isi ị nwere ike ibi na ngwanrọ ahụ) n'efu, n'agbanyeghị flash).
Gnu bu enyi gi na enyi o noro ya inyere gi aka ma nyere gi aka n’uzo o bula. Na hey, ọ bụrụ na anyị nwere ike inyere obodo aka na ọtụtụ mmemme na ndozi, gịnị ma ị mee ya?
O doro anya na ụwa m na-achọ ọdịmma onwe m nanị, m ga-atụnye ụtụ na ọrụ nke baara m uru.
Ọ bụ na nke ahụ bụ ihe ya xD anaghị m atụ anya na ị ga-amalite ịme koodu maka ngwa nke naanị Russian XD
kwuru pandev92 "Ọ bụrụ na m mụtara ihe ọ bụla n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ na eziokwu ahụ dabere n'akụkụ nke ị na-ele anya, na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime anyị nwere ya n'ozuzu ya" wee gaa n'ihu na eziokwu Ya, juputara na mgbagwoju anya, ịkọgharị na ahịrịokwu .
Eziokwu ahu juru m anya site na mpako na mpako ahuhu nke ichoro eziokwu gi.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya n'oge a, ndị mpako ugbu a na-ekwu maka nnwere onwe na ọchịchị onye kwuo uche ya, mana ọ bụ naanị nke ya.
Pandev92 ga echetara gi na gnu / linux bu SHARING na obughi mpi.Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị dozie echiche gị. , ebe mpako nke ikike.
Ọ bụrụ na ị kwuola ya, nke ahụ bụ echiche nke gnu, imeghe emeghe bụ ihe bara uru, karịa naanị ọgụgụ isi.
N'aka mpako, ka mma tolite ma kwụsị ịgwakọta atụrụ churras na atụrụ merino.
Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ị nwere ikike ma ọ bụ ebe ị nwere aka ekpe, ọ bụ nsogbu gị pandev92.
Ma nke kachasị njọ bụ na ị na-eji ubuntu ma ị na-ekwu maka ọchịchọ ịkekọrịta na obodo, dịka a ga - asị na nke ahụ bụ ihe ọgbaghara na - eche. Ọ bụrụ na ị jiri trisquel ma ọ bụ gnusense, aga m anabata ihe ị na-ekwu, mana n'ụzọ a, ị dị ka onye ihu abụọ ọzọ, na-ezo n'okpuru keyboard.
Kedu ihe jikọrọ ya na iji Ubuntu kwuo maka ringkekọrịta? Echere m na ị na-ezighi ezi n'ebe ahụ enyi, n'ihi na dịka ị na-ekwu na ị na-eji Linux, Windows ma ọ bụ OS X maka ọtụtụ ihe, Vivaldis nwere ike inwe otu ihe kpatara ya, ma ọ bụ ihe dị iche iche maka iji Ubuntu, ọ bụghị n'ihi nke ahụ na-agbaso echiche, nkà ihe ọmụma ma ọ bụ omume nke Canonical.
Adịghị m ehie ụzọ, iji bụrụ onye na-agbachitere nkà ihe ọmụma gnu, ị gaghị enwe ike iji ihe na-akwadoghị nkà ihe ọmụma ahụ, ọ bụ ihu abụọ. Adịghị m agbachitere ya ma ị hụghị m ka m na-eji gnu sense ma ọ bụ trisquel.
Mgbe ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume ịbụ 100% GNU nke ahụ apụtaghị na ị na-emegide otu ihe, abụ m onye ọrụ Debian, mana ruo ogologo oge achọtara m onwe m na mkpa iji distro na-ewe m obere oge iji wụnye (I jiri iso net wụnye, ọ bụghị na m ga-abanye nkọwa ma ọ bụ mkparịta ụka banyere nke a ma ọ bụ ihe kpatara na anaghị m ebudata ọzọ iso ... blah blah) isi okwu bụ na m na-eji Trisquel, mana kaadị ikuku m anaghị arụ ọrụ, yabụ enwere m iji budata onye ọkwọ ụgbọ ala, chịkọta ya ma buru ya na edemede mmalite. Agbanyeghị, Lap m abụghị 100% Free mana n'ihi na HD m abụghị Ọ bụ n'efu, ọ dị ka ọtụtụ Onwe, yabụ opekata mpe na Mexico anyị enweghị omenala HD Free, anyị ka na-apụ ịbụ 100% Free, nke ahụ abụghị Ọ pụtara na ndị ọrụ Trisquel nwere ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ dịka m na-eme, ka anyị bụrụ ndị ihu abụọ.
Zaghachi ka ọ bụrụ Reepeecheep
Njehie mkpịsị aka: "Ọ Pụtaghị na ị naghị emegide iwu obodo"
Na n'ezie, obere, na-aga na ikuku nke ịdị elu, mgbe ọbụnadị onye na-ekpe ikpe, na-ekwenye onwe ya onye na-agbachitere gnu, mgbe ahụ ọ tụgharịrị na ọbụnadị onye ahụ anaghị eme ihe ọ na-ekwu.
Iji kpee ndị ọzọ ikpe, ọ dịkarịa ala, ị ga-eme ihe ị na-ekwu, ma ọ bụghị ya, ị na-ata ahụhụ site na ihe akpọrọ uche abụọ yana:
Onye nwere uche abua na-agbanwe agbanwe n'ụzọ ya niile
Agaba, aga m agbanwe ederede nke tux okwu gi, nihi na ha niile na-ekwu GNU / Linux
Do chere na ọtụtụ n'ime ndị na-eji GNU / Linux ga-eji GNU / Linux-Libre kernel? Anaghị m eche ya n'ihi na ha nwere AMD / ATI yana / ma ọ bụ NVIDIA ngwaike na Broadcom.
N'ebe a, ọ bụghị okwu banyere isi ma ọ bụ ojiji. M na-eji kernel "anaghị akwụ ụgwọ" ma ugbu a, ana m eji windo (chọrọ).
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, a na-akpọ usoro ahụ GNU / Linux, ọ bụghị n'ihi na m na-ekwu ya, mana n'ihi na ọ bụ ya (ọ na-ekwu n'ụzọ doro anya na akara ngosi Tux) ma enwere otu na-ekwusi ike na ilelị echiche GNU, ọ bụghị naanị maka eziokwu ahụ nke iwepu ya na aha, ma maka ihe nile di iche iche nke nkparita uka (“onye isi ala”, “okpukperechi”) megide, n’enweghi ichoputa ihe bu ihe di nkpa di ka ihe di iche di n’agbata ndi nweere onwe ha.
Anaghị m ekpe ndị na-eji sọftụwia nwere ikike ikpe ikpe (anaghị m otu ụzọ n'ime ha) mana nlelị nke "amamihe n'efu", mana amatakwara m na echiche ndị a nke ịmegharị ya na "komunizim" ma ọ bụ "iyi ọha egwu" ma ọ bụ ihe maka a na-emetuta ụdị ahụ site na ike nke sọftụwia nwere ikike site na mgbasa ozi.
Ọ bụ ihe ihere na blọọgụ etinyere na nsogbu metụtara kernel Linux (ma ọ bụ na-enweghị gnu) dị ka nke a na-akọwahie nke ọma na ụdị isiokwu ndị a.
Anyị anaghị 'ebo' ihe ọ bụla, anyị na-anwa ime ka ndị ọzọ mata.
Obi ebere na-aghọtaghị ozi ahụ
Na ndị mepụtara Ubuntu, Red Hat na distros ndị ọzọ anaghị etinye GNU / Linux na ya, ọ bụ na ha etinyeghị ya otu ahụ n'ihi na ọ dị ha ka ọ? Mba, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ ha anaghị enwe ọmịiko na nkà ihe ọmụma nke FSF, ya mere, ha anaghị etinye ya.
Anaghị m ekwu kpọmkwem na nkà ihe ọmụma, mana ọtụtụ oge, ụdị ugbu a nke ndị na-agbachitere kernel GNU / Linux na-eme ya na-enweghị iburu n'uche nkà ihe ọmụma nke FSF, yabụ FSF gbaara distros ndị na-eji Linux-libre akara kernel ma obughi Trovals kernel n'ihi nsogbu nke blob.
Adị m njikere ịwụnye Parabola GNU / Linux-Libre n'ihi na ngwaike m nwere ike ịgba kernel ahụ na enweghị nsogbu.
Ọ bụ na ngwanrọ free na-enye ohere nke ahụ. Ọ bụrụ na m chọrọ, enwere m ike iwere kernel linux, gbanwee ya ma kesaa ya dị ka morpheoOS.
Ubuntu, Red Hat na ndi ozo nwere ike ime ihe obula ha choro: "Open office" ka emere "Libre Office", ejiri MySQL mee MariaDB, eji Linux kernel eme Android, eji MariaDB na JQuery mee m mmemme, wdg. Ọ bụghị ya kpatara m ga-eji kpọọ ha Myprogram / JQuery. Ọ bụ Myprogram, gịnị mere ọ ga-eji kwado naanị otu akụkụ?
Ma anyị amaghị ókè ụlọ ọrụ ndị a nwere ọmịiko ma ọ bụ na ha enweghị FSF, nke ahụ adịghị mkpa.
Nsogbu a bu na anyi kpachapuru anya na eleghara ndi kere ndi otu a anya nke anyi nile na erite uru na ya, nke anakpo GNU. Linux bụ naanị kernel, nke emechara tupu HURD (mana afọ 10 mgbe amuchara GNU) ma nwee aha "na-adọrọ adọrọ", ọ dịghị ihe ọzọ.
Enwere m ikike dị iche iche, ya bụ, onye ọ bụla nwere ọnụ ka a na-akpọ oke nkụda. You chere na ị nwere ike ịgbanwe eziokwu ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma.
Ọfọn, anaghị m emehie, ahụrụ m na ị kọwapụtara onwe gị dị ka onye na-emesapụ aka, ọ na-egosikwa, echiche ọgụgụ isi gị na-esi ísì nke onye na-emesapụ aka mebiri emebi, ederede ị dere ede dị ka IHE koodu ahụ.
Abụ m onye ọrụ njedebe nke gnu / Linux, m na-amatakwa ihe ọma site na ihe ọjọọ, ihe gị, nke ị maara, na-amaghị.
Aghọtaghị m ihe bara uru gbasara edemede a ... Ma ọ bụ otu esi ekwe ka ibipụta isiokwu nwere ụdị ịdị ala dị ala ... N'ezie otu ihe enwetala: n'ime ihe na-erughị awa 10 ọ nwere ọtụtụ echiche na echiche. ..
Maka nke m, tufuru onye na-agụ ya. Na-ehichapụ RSS ...
I nweere onwe gi ime ihe obula ichoro xphnx. Anyị ekwuola ya otu puku ugboro ma ọ na-agwụ ike: Ebe ọ bụ na Linux abụghị pandev, ọ bụghị nano, ọ bụghị elav, ọ bụghị KZKG ^ Gaara, ma ọ bụ ya bụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe ebe a. Ọ bụrụ na ị hụ onwe gị: bye! Nwere ike ịbịaghachi mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ọ dị m ka ọ bụ otu ihe ahụ m kwuru na ọkwa ọzọ, mana aha ọzọ. Ọ bụrụ na m chọta ya na Taringa, Fayerwayer na / ma ọ bụ na plp.cl, ana m ekele ya ma edozi ya.
@elav Ọ bụ eziokwu, mana ụdị edemede ndị a na - ebelata ogo nke blọọgụ. Ihe ihere
Lelee linuxquestions.org anya, ebe anyị na-agba mbọ ime ike anyị niile ka mma.
Otu isiokwu na-emebi ogo nke blog niile? M na-ekwu, otu post a na-eme ka ndị ọzọ na-esi ísì dị ka nke ahụ, ma ọ bụ nke ọma, enwere m ike ịghọtahie na m nọ na-agbachitere, mana agbanyeghị, maka otu ma ọ bụ ndị ọrụ abụọ ndị hapụrụ ịgụ blog, ọ naghị anwụ ma ọ bụ pụọ n'anya.
Amaghị m ihe kpatara m ji kwuo okwu na nke a ma ọ bụrụ na ọnweghị ihe gbanwere, mana ka ọ dị m mkpa ịpụ….
Gaa, n'ikpeazụ onye tụfuru bụ otu n'ihi na blọọgụ a magburu onwe ya, nke kachasị mma enwere ma ana m ekele gị, ọ bụghị mmadụ niile na-eme ụdị ọrụ ahụ. Mara na opekata m mma onye ọrụ nwere afọ ojuju, anya m na-eji obi ụtọ anabata na blog.desdelinux.net 😉…
Agaghị m ahapụ ịgụ blọgụ ahụ, m na-eche, nke ahụ bụ ihe a na-ekwu maka ya, n'ihi na echere m na isiokwu ole na ole gara aga:
Kama inye onyinye dị mma, ha na-akọwahie ma na-agbagha isiokwu dị ezigbo mkpa maka blọọgụ (gụọ aha ahụ "Ka anyị jiri Linux bụrụ n'efu") ihe anyị na-ahọrọ na usoro nke ngwanrọ na ha na-awakpo ngagharị nke nyere mgbanwe a dị mkpa nke bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ.
Ọ bụ ụzọ gị si ekele, ikekwe ọ bụ eziokwu na echiche ya dị iche na nke gị, n'ọnọdụ m anaghị ahụ ya n'ụzọ ahụ, mana, na nsogbu a, kedu ihe a ga-eme? Iji bipụta (na n'okwu a, okwu a "ezi" dabara nke ọma) n'echiche ya, mana ka, agụgoro m ọtụtụ isiokwu m chọtabeghị na nke kachasị mma m nwere ike ime bụ ileghara ha anya (anaghị m echeta nke, n'ihi na eleghara m ha anya).
Ka o sina dị, na obi ọjọọ, anyị na-ahapụ ma ọ bụ anyị nọrọ na nke ahụ na-eche ihe ọma na ihe ọjọọ ya.
Chọta ụfọdụ ogo sitere na blọọgụ obodo adịlarị oke ịjụ, ma, ọ na-eme ihe ọ nwere ike.
Nke ahụ bụ ihe pandev92 na-akatọ n'elu, karịa enweghị ndidi na mpako, omume ahụ nke ịkpọasị ma ọ bụ nlelị (na anaghị m ekwu na ị bụ, n'ihi na echiche gị nwere nghọta site n'ọnọdụ gị). Biko gbaghara m ma oburu na m gbachitere onwe m ma ọ bụ na aghọtaghị m onye ọ bụla.
Ga-ewere nwayọ nwayọ nwayọ.
Morpheus, ị nwere ikike na ibe peeji, n'okpuru isiokwu ndị ahụ, pager nke ga-akpọrọ gị ịgụ ọgụgụ nke mmasị ka ukwuu. I nwekwara ike iji nke Tags na Categories .. 😉
Kedu ihe. Ọ bụ echiche echiche nke anaghị anwa ịkụzi ihe ọ bụla ma ọ doro anya, naanị na ụfọdụ malitere ịgwagbu ya na nkọwa ha. Ana m ekwu, ọ bụrụ na ọ masịghị ha, ma ọ bụrụ na a hapụ ha na blọọgụ a, gịnị kpatara na "ndị nkwutọ" a na-emebu anaghị ede ezi edemede, ka anyị hụ ka ha si eme ya.
Ọ bụrụ na enweghị nhọrọ, mgbe ahụ enweghị nnwere onwe.
Ihe ọtụtụ gnu / linuxers na-atụ aro bụ na enweghị nnwere onwe. Nye gnu / linuxers ohere ma ha nwere ike iwepu sọftụwia azụmaahịa, n'ihi na ha nwere ihe mmezi na ya. Ha enweghị ike ịhụ ma ọ bụ ikekwe ha aghọtaghị ezigbo nnwere onwe bara uru, ebe anyị nwere nhọrọ nke ikesa nkesa Linux na kọmputa anyị, site n'oge ahụ, onye ọ bụla n'otu n'otu, m na-ejedebe na ngwanrọ azụmahịa.
Agbanyeghị, achọrọ m ịnwe ike ikpebi ma m ga-alaghachi na azụmaahịa ngwanrọ azụmahịa, n'ihi na achọrọ m inwere onwe m ime ya.
Anaghi m etinye anya nke oma na gnu / linuxers. Ha na-ekwu na software ga-abụ n'efu iji gbanwee ha mgbe ha chọrọ; mgbe ahụ ha na-eme mkpesa n'ihi na nke a ma ọ bụ nkesa ahụ na-esi na GNOME gaa n'otu ma ọ bụ na KDE ma ọ bụ ihe ọ bụla; Yabụ nkesa anaghị enwere onwe ha iji sọftụwia ọ bụla masịrị ha; Gini mere ha ji eme mkpesa, ha enweghi onwe ha iji nkesa ozo ma obu, mebie nke a, gbanwee ya mgbe o choro?
Kedu ihe kpatara ị ga-eji lebara otu gnu / linuxers anya, ndị na-eme mkpesa banyere mgbanwe nke akwụkwọ ahụaja na nkesa.
Red Hat bụ ụlọ ọrụ na-ere Red Hat Enterprise Linux operating system, nke zuru oke "ngwanrọ azụmahịa" yana "FREE". Red Hat bụ ahịa ọha.
Abụ m onye mmemme na m ere ngwanrọ m na-eme mana enyere ikikere n'okpuru GPL (ọ bụ kpamkpam n'efu ma ana m ejikwa ọba akwụkwọ n'efu), na-ebute koodu isi yana ọnụọgụ abụọ (n'ozuzu m na-arụ ọrụ na asụsụ ndị atụgharịrị, yabụ enweghị dị ọnụọgụ abụọ), ka onye ahịa m mee ya ihe ọchọrọ n'ihi na ọ bụ nke ya, ọ bụ ikike ya. Dịka onye mmemme, echeghị m na m nwere ikike izochi otu mmemme m si arụ ọrụ n’aka ndị ọrụ m.
O nweghi ihe jikọrọ ya na nke a ma ọ bụrụ na sọftụwia ahụ bụ azụmahịa ma ọ bụ na ọ bụghị, mana ọ bụrụ na Ọ B FREE N’ FREEB orR or ma ọ bụ KPIVRIVTA
Are nweere onwe gị ime ihe ọ bụla ị na-ekwu na ị na-eme ma ndị ahịa gị nweere onwe ha ịhọrọ ihe ị na-eme.
Yabụ kedu ebe "ọtụtụ gnu / linuxers na-atụ aro, bụ na enweghị nnwere onwe"?
Ogba 23 dijo
Ọ bụghị okpukpe, mana, ọ bụ ezie na m na-eji windo eme ihe ndị dị oke mkpa, ọ bụrụ na m na-eji ya n'ihi na enwere ngwa ndị na-adịghị na linux ma ọ bụ dị obere ịchọta, ya mere, ọ bụrụhaala na iji windo eme ihe ka na-agba ume, a gaghị enwe ngwa ndị ahụ maka linux.
Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ịnweghị ịgbachitere sistemụ arụmọrụ, ike dị ukwuu ga-aga n'ihu karịa ya, ọ dị ka a ga - asị na m mepụtara sistemụ ugbu a wee sị: Ma windo dị mma nke ukwuu, eh ọ nwere ihe sistemụ arụmọrụ m na - eme ọ bụghị.
Mgbe ahụ ọ dịghị onye ga-eji sistemụ m, ị ga-akwalite linux na ya kwesịrị ya.
Kpọmkwem. A kọwara nke ọma ma jiri nlezianya mee ya.
Naanị otu nkọwa zuru ezu, n'anya m, dị ezigbo mkpa.
Ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ, enweghị ike ịnweta kọmputa n'ihi na ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka mmemme ma ọ bụ akwụkwọ ikike n'ihi na ha dị oke ọnụ. Agbanyeghị, GNU / Linux na-eme ka ihe dịrị ha mfe. You ma ihe niile enwere ike ịme na komputa na ọ bụrụ na GNU / Linux anọghị, enweghị ike ịme ha n'ihi ego? Enwere ndị na - enweghị ike ịzụta kọmputa, mana ha nwere isi doro anya iji ya nke ọma.
Anaghị m eji GNU / Linux kpomkwem n'ihi ego. M na-eji ya n'ihi na enwere m mmasị na ya, n'ihi etu ngwa ya si arụ ọrụ, n'ihi ọnụ ya, n'ihi KDE, na otu puku ihe ndị ọzọ ... mana ọ bụghị n'ihi na ọ bụ n'efu, ya bụ, ọ bụghị isi ihe kpatara m 😉
Ọzọkwa, nsogbu abụghị kpomkwem ego, ma n'ụzọ nke otu onye na-aga iji software. M na-eji GNU / Linux maka nkasi obi mgbe m na-arụ ọrụ na mmemme, ihichapụ malware maka USB na ibudata faịlụ site na cyberlockers na ọ na-arụ ọrụ ebube, gbakwunyere na agaghị m akwụ ụgwọ maka antivirus mbụ n'ihi na sistemụ arụmọrụ Microsoft bụ plethora nke ịba uru ma nwee m jikọtara na ngwa ha maka idezi ọtụtụ ọdịnaya ọdịnaya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ana m eji Windows (kwere m, ana m eji Windows Vista SP2 ma ọ na-arụ ọrụ ebube) n'ihi na anaghị m enwe ike iji ngwanrọ dịka GIMP, Inkscape na / ma ọ bụ Scribus.
Ekwenyere m na ihe niile ị na-ekwu na okwu a, mana dị ka gị, achọrọ m ịkọwa isi ihe ọzọ: @Pandev - na m ezighi ezi na ọ na-agbazi m - ọ dịghị oge ọ na-ekwu na ịdị adị nke GNU / Linux dị njọ mgbe say na-ekwu na site na taa GNU / Linux abụghị nkà ihe ọmụma, ị kwuru eziokwu. Agbanyeghị, okwu Pandev anaghị agọnahụ na n'ime GNU / Linux ọ dịghị nkà ihe ọmụma ugbu a na atụmatụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka mgbanwe.
Onweghi onye na-ajụ na a mụrụ GNU dị ka ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị / mmekọrịta mmadụ na ibe ya - nke sitere na nkà ihe ọmụma na-akwado ya, ma ọ bụghị ya, atụmatụ ahụ ga-abụ oghere - mana dịka nke taa, na maka ebumnuche ndị bara uru, a gafeela atụmatụ ahụ. Ọ bụrụ na anyị gụọ nkwupụta niile, ọtụtụ n'ime anyị na-ekwupụta na anyị na-eji GNU / Linux maka obi ụtọ, ọ dịghị ihe ọzọ. Ọbụna ọtụtụ n'ime anyị ekwenyeghị - nke ka ukwuu ma ọ bụ nke pere mpe - na Maazị Stallman.
Nke a ọ pụtara na anyị enweghị mmasị ịdị adị nke GNU / Linux ngagharị? MBA. N'aka ozo. Ọ dị mma na enwere ndị na-eme ihe maka ọdịmma nke ọha mmadụ, mana ihe ọtụtụ n'ime anyị na-ajụ bụ omume. Ekwenyesiri m ike na, dị ka ọ bụla na-elekọta mmadụ, enwere radicals na moderates na nkenke nkwupụta Pandev na-aga na mpaghara ahụ dị egwu, ọ bụghị n'ebe usoro GNU / Linux n'onwe ya dị.
N'ikwu eziokwu, ọ dị m ka ọ bụ ịjụ Pandev ihe ọ ga - eme, ihe dị iche ọ na - eme - ma ọ bụ dee, na nke a - Linux ma ọ bụ GNU / Linux mgbe anyị niile nọ ebe a amatala ihe ọ bụ? Ka ọ bụ na enweghị ike ịkpọ GNU / Linux, na ụzọ mkparịta ụka, Linux, wee ghọta echiche ahụ, ebe ọ bụ na anaghị ewepụta mkpụrụ okwu "Linux" naanị n'ime usoro echiche? Ọ dị m ka na n'okwu na-agbagha radicalism, omume m kwesịrị iche na m ga-agbachitere echiche bụ kpọmkwem onye na-emebiga ihe ókè.
Odi m ka GNU ije kwesiri icheghari echiche onodu ya na, ikekwe, obuna akuku nke post post ya n'ihi na taa, GNU / Linux anaghi anochite anya otutu ndi anyi, ndi oru ya, dika ha. Otu ihe atụ nke a bụ pragmatism nke Canonical onye OS bụ, n’enweghị obi abụọ ọ bụla, nke kachasị ewu ewu yana nwee ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ kachasị na ụwa GNU / Linux. N'ezie, nke a na-eche na anyị kwekọrọ n'echiche anyị na omume anyị, n'ihi na enweghị m ike ịchọta ahịrịokwu ewepụrụ na ntụnye Stallman karịa "... nke a abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya." Agbanyeghị, na agbanyeghị na Canonical abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya, o wetala atụmatụ GNU / Linux ịbịaru nwoke na nwanyị nọ n'okporo ámá anya.
Na, biko, isi ebe a ịghara imepe arụmụka banyere ma Canonical na-eleghara ndị ọrụ ya anya ma ọ bụ na ọ na-eme nkwekọrịta azụmahịa iji tinye mgbasa ozi na / ma ọ bụ ịkọwahie data nke ndị ọrụ ya. Mba. Ihe bụ bụ na postulates nke bụ usoro ọmụmụ nke GNU anaghị emetụta GNU / Linux niile. Nke a bụ ihe anyị ga-eche.
Tina na-enye mmetuta nwere ezi uche n'ihe m dere xdd, asi m na m ma nke oma na nkowa eheheh!
Ọ bụ ezie na amaghị m ma ọ bụrụ na ihe m dere gbasara otu ihe edewo ya nke ọma ma ọ bụ na edeghị ya, mana ọbụlagodi na m kpachapụrụ anya n'okwu m.
Enweghị mwube ihe atụ m kwenyere na Pandev LOL
Ebumnuche nke GNU agaghị abụ OS kacha mma, ma ọ bụ onye ọ bụla jiri ya, kama ịkwalite nkà ihe ọmụma ya. Ọ dị mwute na "imirikiti ndị ọrụ ya" anaghị aghọta ya.
Enwere m mmetụta na nke ahụ "akwụkwọ ozi ndị ahụ bụ usoro ọmụmụ nke GNU anaghịzi etinye n'ọrụ."
Kwa ubochi ihe achoputara nke n’egosiputa na Stallman kwuru eziokwu banyere “obi ojoo” (I CLARIFY, obi ojoo SOFTWARE, obughi ndi n’eji ya, ndi ahu bu aja). Have nụla banyere Snowden na NSA?
Ikwu na okwu a bụ "Stallman kwuru eziokwu" ka ekwughachiri.
Ndị ga-echegharịrị ọnọdụ ahụ bụ ndị ọzọ.
Ugbu a karịa oge ọ bụla ị ga-anwa ịnwekwu nnwere onwe karịa mgbe ọ bụla.
Amatala m na Stallman kwuru eziokwu. N'ezie, ọ bụrụ na ị gụọ usoro na ọnọdụ nke ngwanrọ akụrụngwa (gụnyere Google Chrome), ị ga-achọpụta na n'ụzọ ị na-enweghị ike ịgbanwe injinia ndụdụ Chromium ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye ya (gụnyere Pepper Flash).
Ugbu a, na ndị mmadụ anaghị echegbu ịgụ nke ahụ na / ma ọ bụ hụ ihe nhọrọ nzuzo nke netwọkụ mmekọrịta kachasị ama dịka Facebook na / ma ọ bụ Twitter nwere (gụnyere ngalaba onye nrụpụta nke netwọkụ mmekọrịta), a ga-enye mmadụ ịghọta ọ dị mfe ihie ụzọ na ịdenye aha ọtụtụ.
Gbalị iwu ya ezughị 😀 ka anyị jiri ihe anyị nwere iji wuo teknụzụ ọhụrụ anaghị akwụ ụgwọ nke nta nke nta, ụlọ ọrụ FreeSoft nwere ike ịkpata ego, were ndị mmemme na-achọkwa ọrụ na nri ezinụlọ ha.
Morpheus, ewepula ikpe m na akuko ya, biko. Onwebeghi mgbe m kwuputara na "postpost nke bu genesis nke GNU anaghizi etinyezi", ihe m na-ekwu bu na "ndi postpost nke bu genesis nke GNU adighizi etinye ihe nile GNU / Linux."
Ugbu a gwa m na nke ahụ abụghị eziokwu.
Stallman n'onwe ya na-akọwa ihe kpatara na enweghị ike ịtụle gam akporo dị ka OS nke GNU / Linux.
Agaghị m ajụ ma ị bụ onye ziri ezi ịtụle nke ahụ, mana ọ bụrụ na m nwere ike ịjụ onwe m mgbe ahụ ole n'ime OS, nke a na-ewere taa dị ka akụkụ nke GNU / Linux, dị ọcha na mkpụrụ ndụ ihe nketa iji tụlee n'ime ụdị GNU / Linux? Onye na n'okpuru ihe njirisi nyocha ogo nke ịdị ọcha nke OS iji daba ya n'ime nhazi ọkwa? N’okpuru etu esiri mee mkpebi mkpa nke “obere” ma ọ bụ “ọtụtụ” nke mkpụrụ ndụ ihe nketa GNU?
Ihe m chere bụ na n'ikpeazụ GNU / Linux ụwa ga-ejedebe na schism na onye ọrụ Linux Mint, dịka ọmụmaatụ, ga-ejedebe na iji Linux OS, na-enweghị GNU, dị ka gam akporo ugbu a.
Ọ dị m ka ngụkọta nke Manichaeism iji kwado na ihe niile rere ure na Denmark, ekwenyeghị m na ihe Mirlo, dịka ọmụmaatụ, kwuru: ihe abụghị naanị oji na ọcha. Ọ bụghị agha nke ndị mmụọ ozi megide ndị mmụọ ọjọọ.
Iche echiche otu a dị ka ịchọ ịkwụsị ịda ogbenye site na igbu ndị ọgaranya maka eziokwu dị mfe nke "iche" na akụ na ụba na ihe ọjọọ na anyaukwu na ya mere ndị ọgaranya niile dị njọ. Ihe ngwanrọ nile ọ nwere dị njọ n'ezie? Niile sọftụwia ọ bụla bara uru bara uru n'ezie? Kedu ka anyị si mara na ụlọ ọrụ Snowden na-arụ ọrụ maka iji GNU / Linux ngwanrọ dị ka ngwa iji ledoo ndị ọzọ?
Morpheus, ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke GNU bụ ịkwalite nkà ihe ọmụma ma ọ bụghị ịchọ ịbụ sọftụwia kachasị mma na nke a na-ejikarị, gịnịzi bụ praxis ya? Kedu otu echiche nkịtị nke nkà ihe ọmụma a si jikọọ na eziokwu dị adị?
Ọ dị m ka GNU na-akwalite mgbanwe nke akọ na uche na ọ dị m ka ọ zuru oke, mana mgbanwe dị otu a nke kacha nta ọ nwere ike ime bụ itinye ọnọdụ dị egwu dị ka n'èzí anyị ihe niile dị njọ na ihe niile anyị na-ekwu dị mma. Anaghị m enwe obi abụọ maka ebumnuche ọma Stallman, enweghị m obi abụọ na ebumnuche ọma nke Snowden ... mana anaghị m atụkwasị obi ma na-enweghị mmasị n'okwu na ọnọdụ ndị na-ekwu maka uru ha naanị na-atụleghị akwụ ụgwọ na-adịghị mma. Nke ahụ bụ demagoguery.
Kedu ihe "IHE NILE GNU / Linux" na-agbanwe?
Echeghị m na ụwa abụọ nke GNU / Linux. Na otu aka GNU na Linux? Ọ bụ gị kpatara nkewa ahụ.
Android anaghị eji ngwanrọ GNU. Ndị okike nke GNU maara mmemme ha mere, ha makwa ma ha nọ n’usoro.
Kedu ka anyị si mara na ụlọ ọrụ Snowden na-arụ ọrụ maka iji GNU / Linux ngwanrọ dị ka ngwa iji ledoo ndị ọzọ?
N'IHI NA ANY CAN P RER THE CODE !!!
Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ amaghị etu esi eme mmemme apụtaghị na ndị anyị maara nwere ike nyochaa ya ma hụ ihe ọ na-eme ma ọ bụ tụnye.
Ọ bụrụ na enwere obi abụọ ma ọ bụrụ na na ntuziaka dị mfe nke ndị na-ahụ maka intel (RdRAnd), ndị NSA jiri linux jiri ya mee ihe dị ka azụ, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịmata n'ime ihe ọ na-eme.
Anaghị m ekwu na "ngwanrọ niile nwere ikike dị njọ", m na-ekwu na anyị kwesịrị ịnwe ikike ịmara ihe sọftụwia niile anyị na - eji eme iji jide n'aka na ọ bụghị (n'etiti ikike ndị ọzọ m weere dị ka onye ọrụ).
"Niile akụrụngwa software n'ezie dị mma maka nnyocha?"
Nsogbu bụ na anyị enweghị ike ịma ya, nke ahụ bụ ihe m na-adịghị atụle n'ụzọ ziri ezi, igbochi onye ọrụ ahụ ịma ihe mmemme a na-eme.
»Kedu ihe bụ praxis gị? Kedu ihe jikọrọ echiche dị omimi nke nka na eziokwu dị ndụ? "
Ọfọn, ịkwalite na ịgbasa echiche a. Informing, ghara ụgha na-ekwu na "anyị bụ ndị kachasị mma." Ime ka uwa mara na enwere uzo ozo n’enweghi ego, na ha di n’ebe ahu ka ejiri ha, ka nma ha ma obu were ha dika ihe eji eme ihe ka nma.
Ọ bụrụ na anyị anọgide na-arapara na proprietary software n'ihi na "onye ọ bụla kwuru na ọ bụ ihe ọjọọ" ha ga-mgbe mma free ọzọ.
Na ihu ọma n'ụwa, SL na-aga n'ihu site na mmali na oke.
Ọmịiko maka otu a ka nwere urukpuru na uru nke Photoshop, na n'elu nke ahụ, ha na-ede na "site na linux" na-anwa iju anya ịkwụsị mgbanwe a.
«Echeghị m na e nwere ụwa abụọ nke GNU / Linux. Na otu aka GNU na Linux? Ọ bụ gị kpatara nkewa ahụ. "
Mba. Nke ahụ bụ ihe Stallman na-ekwu:
«Android dị nnọọ iche na GNU / Linux sistemụ arụmọrụ n'ihi na ọ nwere obere GNU …… ọnọdụ dị mfe: Android nwere Linux, ma ọ bụghị GNU; ya mere, Android na GNU / Linux kachasị dị iche. »
"Android dị iche na GNU / Linux sistemụ arụmọrụ, ebe o nwere obere GNU ... ... ọnọdụ dị mfe: Android nwere Linux, mana ọ bụghị GNU, ya mere gam akporo na GNU / Linux dị iche."
Stallman na-ekwu na gam akporo nwere GNU, mana ọ pere mpe ka a ga-ahụta GNU. Kedu obere ihe ntakịrị ntakịrị ịhapụ OS site na GNU na ole zuru ezu iji tụlee ya n'ime ụdị ahụ?
«“ Ma olee otu anyị si mara na ụlọ ọrụ Snowden rụrụ ọrụ maka iji GNU / Linux ngwanrọ dị ka ngwa ọrụ iji ledoo ndị ọzọ?
N'IHI NA ANY CAN P CANRAD ODLỌ AH !!! !!! »
You gụrụ koodu nke ụlọ ọrụ Snowden rụrụ ọrụ maka ya? Morpheus, Anaghị m ekwu na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị njọ, mana m na - ajụ na naanị eziokwu nke ịbụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ga - egbochi ya iji ihe ọjọọ
"Ọ jọgburu onwe ya maka otu ndị ka nwere urukpuru na uru nke Photoshop, na n'elu nke ahụ, ha na-ede" site na Linux "na-anwa iju anya ịkwụsị mgbanwe a."
Onweghi onye na-agba mbọ ịkwụsị mgbanwe a, ihe a na-ajụ abụghị echiche kama ụzọ.
Stallman anaghị eche echiche nkewa site n'echiche:
Stallman bụ onye mmemme, o mere usoro mmemme nke na-arụkọ ọrụ ọnụ mejupụtara sistemụ arụmọrụ zuru oke nke ọ kpọrọ GNU. Ha kwesiri imecha kernel (HURD) mgbe Torvalds mepụtara Linux na, na-erite uru n'ọrụ GNU n'efu, sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ.
Stallman maara ma ọ bụrụ na gam akporo nwere ụfọdụ mmemme ndị a n'ime ya, ọ ga-ejikwa ụfọdụ, mana ezughị iji kwupụta android na sistemụ GNU.
Stallman anaghị ekpe Andtroid ikpe ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ, GNU bụ usoro mmemme, ọ bụghị ọkwa nke "mma" ma ọ bụ "ịdị mma."
"You gụrụ koodu nke ụlọ ọrụ ebe Snowden na-arụ ọrụ?"
N’ụzọ doro anya, anaghị m ekwu maka koodu GNU / Linux. Agụwo m ya (ọ bụghị n'ozuzu ya) na nde mmadụ ndị na-emekọ ihe na ya. Nwere ike ime ya ma gbalịa ịhụ ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ọjọọ. A sị na e nwere, a ga-agarịrịrị kọọrọ onye ọ bụla, dịka m na-agwa gị ihe mere na intel.
Kedu ihe bụ "ụzọ" ndị a? I chere na m nwere "ụzọ ndị ahụ" na nkọwa m? Nzube anyị bụ ka anyị gwa
Ndo iche na nke a. Stallman mara ikpe ma maa mma. N'ezie, echiche radical ya maara nke ọma. 😉
Na otu ụzọ, Apple mere ya na OSX ya n'ihe gbasara BSD, ọ bụ ezie na site na BSD, o nwechaghị kernel ochie nke DrawinBSD.
Echere m na echiche nke bara uru, nke ọma wdg. A ghaghị itinye ha n'uche na-eche maka ego ị na-akwụ, ọ bụghị naanị ego ka m na-ekwu, kama ọ bụ eziokwu na ha weghaara kọmputa gị. Maka na ha amachi ihe i nwere ike iji ya mee n’èzí, ị na-enye ha mkpịsị ugodi ịbanye igwe gị mgbe ọ bụla masịrị ha. Ga-amata nke ahụ wee họrọ
Usoro ngwanrọ a na-enye n'efu na-egosi na ị nwere ihe ọzọ ebe ọ na-enweghị mbụ, ị nwere ike ịhọrọ kọmputa gị bụ nke gị, na sọftụwia ahụ bụ nke gị ịkekọrịta ma gbanwee ya dịka na mgbe ịchọrọ.
Na Canonical, ka anyị ghara ịgbagwoju anya. Ọ ka bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, anyị ka nwere ike imeghari ya, gbanwee ya, ma kesaa ya ndị ọzọ, dịka anyị nwere ike ime na Debian, Arch ma ọ bụ distro ọ bụla ị nwere ike iche.
Agbanyeghị, n'ihi nsogbu ngwaike, a ka manyere anyị itinye sọftụwia nwegasịrị, ọ bụghị otu ihe iji onye ọkwọ ụgbọala mechiri emechi, nke mere na kaadị netwọọdụ gị na-arụ ọrụ, karịa sistemụ arụmọrụ niile, ọ nweghị ntụnyere.
Na Canonical ma ọ bụ ihe ọ bụla, nwekwara ikike ime ka sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dịkwuo mma, nwekwuo enyi na enyi ma ọ bụ ihe ọ bụla ... ọ bụrụhaala na koodu ya mepere ma onye ọ bụla nwere nnwere onwe iji gbanwee ma kesaa ya dịka ọ masịrị ha, ọbụnadị ugbu a ka ikpe.
Mmegharị nke Canonical nwere ihe ọzọ ị ga - eme na mbata ya na mbadamba na smartphones, nke ga - abụ ụzọ iji kọmpụta n'ọdịnihu. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ka ghọtara ihe nke a pụtara.
Anyị enweghị usoro ọzọ, anyị niile kwesịrị ịmụ iji mmụọ ọjọọ eme ihe, mana n'ime afọ 10, ọ nwere ike bụrụ ihe gbasara ụmụaka anaghị eji mmụọ ọjọọ eme ihe na ndụ ha, igwu egwu, ma ọ bụ ịrụ ọrụ ma ọ bụ ịmụ ihe.
N'ihi na kọntaktị mbụ ha nwere na Mgbakọ bụ mbadamba nkume ma ọ bụ smartphone na Unity etinyegoro. Ha ga-ejikwa ya mee ihe na iji ọnụ, karịa na-acha anụnụ anụnụ, nje, na nke ọzọ> ọzọ> ọzọ.
Ma aha, ọ bụ Gnu-Linux na ọ bụghị Linux, gịnị ka anyị nwere ike ime! Ọ na-adaba adaba iji mee ka aha nke ihe dị ka esi akpọ ya, ọ bụghị dị ka anyị si ahụta ya karịa ma ọ bụ bara uru.
Ị masịrị m. Ọ na-egosi na ọ bụrụ n ’ịhapụ ụlọ gị n’ime afọ iri gara aga xD
Zaghachi Gabriela Gonzalez
Nke ahụ bụ ihe dị mma banyere itinye Arch Linux iche maka oge goodeeeeeeeeeen.
Echere m na ebe a enwere ọtụtụ echiche agwakọtara na ọ dị mma ikewapụ. Iji họrọ na nnwere onwe, mmadụ ga-enwerịrị ozi site na nnwere onwe. Ka anyị wepụ akụkụ nkà ihe ọmụma n'akụkụ ma gbadata na bara uru.
Ajuju m chere na ị ga-ajụ onwe gị bụ ... gịnị bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ? .
Ọ na-eje ozi ka mmadụ niile ma ọ bụ otu ọ bụla nwee ike ịnweta ngwanrọ ahụ, n'agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba ma ọ bụ nke mmekọrịta ha. A na-eji ya ịkekọrịta, kesaa, kụziere ma melite, yana nnwere onwe zuru oke, mmemme na sistemụ arụmọrụ ma gbanwee ha maka mkpa onye ọ bụla.
A na-eji ya mara ihe ọ na-eme na anaghị eme ihe ị wụnye na kọmputa gị. Ọ na-eje ozi maka ụlọ ọrụ iji nweta ego, ebe ha nweere onwe ha iji ya, yabụ na ọ na-ewepụtakwa uru akụ na ụba na ọrụ, (na ịchekwa ụtụ isi anyị, nke bụkwa ego, mgbe ndị ọchịchị na-eji ya).
Ma n'ezie n'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego ahụ, gịnị bụ sọftụwia nwere ikike maka? . A na-eji ya maka ụlọ ọrụ ndị mepụtara ya iji tinye ọnụ ụzọ na kọmputa gị (ee, nke ị nwere), ma nwee ohere ịnweta ozi gị.
A na-eji ya maka gị iji kọmputa gị, ọ bụghị ka ịchọrọ ịme ya, mana dị ka onye nrụpụta nke mepụtara sistemu ma ọ bụ ngwa ahụ chere na ị kwesịrị iji ya.
Ọ na-enye ọrụ nye nnukwu ụlọ ọrụ gigantic ndị dị ka eze, yabụ na ị na-eji sọftụwia ahụ eme ihe, n'ihi na sọftụwia ahụ abụghị nke gị ma ị nwere ike ịzụta ya, naanị ị nwere ikike iji ya ikike na nwere ike ịgbanwe n’oge ọ bụla n’enweghị nkwenye gị.
Mara ihe nke ọ bụla nwere ike iji mee ihe, ọ dịịrị onye ọ bụla iji ihe ọ bụla ọ chọrọ.
"Ọ na-eje ozi ka mmadụ niile ma ọ bụ otu ọ bụla nwee ike ịnweta ngwanrọ ahụ, n'agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba ma ọ bụ nke mmekọrịta ha." Akụkụ a dị mma, mana na omume ọ bụghị eziokwu kpamkpam, ọ nwere ike ịkwado na koodu ahụ dị, mana ọ bụghị na ọnọdụ akụ na ụba abụghị njedebe (na ị gaghị akwụ ụgwọ iji nwee koodu ahụ, ma ọ bụ nwee ọnụọgụ abụọ iji ya). Nsogbu bụ na e nwere ọtụtụ ikikere nke jikọtara ihe anyị maara dị ka ikikere n'efu http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#Compatibilidad_y_licencias_m.C3.BAltiples
Nwoke ... doro anya ma ọ bụrụ na ịnweghị ịzụta kọmputa, ị gaghị enwe ike ịnweta ngwanrọ ọ bụla, ma ọ bụ n'efu ma ọ bụ na-enweghị n'efu. Tupu ọ ga-abụ iri nri ma nwee nlekọta ahụike kwa ụbọchị, karịa inwe pc. Ihe m na-ahụghị bụ Microsoft na Mac na-enye ndị mmadụ enweghị ikikere sistemụ arụmọrụ, nri?
Echere m na blọọgụ a dị mma, ha nyere ezigbo ndụmọdụ mana ha adabalarị na ụdị MuyLinux na-acha odo odo, ọzọ na-ewepụ ha na RSS
Gịnị a troll ...
Kpọtụrụ @ pandev92 iji kụziere ha klas ide ihe (ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ, ịmepụta flamewars bụ ihe okike maka ụfọdụ ndị mmadụ).
Echegbula. Anyi agaghi adi ka odo dika TechRights. Enwela obi abụọ na nke ahụ.
Ọ dị mma, ọ bụ ezie na ihe kachasị tabloid na mpaghara Hispanic bụ FayerWayer. Nke m enweghị obi abụọ.
Na FayerWayer enweghị okpukpe nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ mana nke Apple (dịka Alt1040). na TechRights ee.
Ndi akaebe nke GNU, ndi ama GNU n’ebe nile.
Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ndị isi okpukpe gbara okpuru, dịka ebe niile. Oge ụfọdụ ana m anọ ndị Fans, ha anaghị eche echiche nke ọma, ha bụ naanị atụrụ na-ekwughachi ihe ndị ọzọ na-ekwu. Ana m ekwu maka Fans n’izugbe.
N'okwu m ugbu a, m na-eji Windows 8, ọ bụ ezie na agbanyeghị m igwe na otu ọnwa n'ihi na enweghị m ihe ọ bụla dị mkpa ịme na ọ bịarutela mahadum. M na-ahụkarị ihe nkesa archlinux na-enweghị eserese eserese, naanị maka ftp na sava http. Toghara iji wammp shit. Ma enwere m mmetụta ka mma n'ụzọ dị otú a, igwe m na-arụ ọrụ nke ọma ma enwere m mmemme niile dị mma m chọrọ. Achọghị m ịmalitegharị igwu egwu, ma ekwesighi ịgọnahụ ụlọ ọrụ akwụkwọ.
M na-aga shoutcast.com, budata faịlụ .pls ma mepee ya na VLC. Ọ dị nfe ahụ ige ntị na ọdụ Shoutcast.
Hahahaha echere m na otu ihe ahụ, m na-emekwa otu ihe ahụ, ọ masịrị m ịmegharị Linux maka ihe m chọrọ ebe Windows na-arụ ọrụ dị ukwuu nye m na igwe m niile na m na-eji ngwanrọ m chọrọ, tupu e kewaa ha maka Linux na Windows (na ọzọ nwere OS X) na nke ahụ bụ ọgbaghara, yabụ ekpebiri m ịhapụ Windows na niile ma nwekwaa ezi uche, ebe Linux achọghị ọtụtụ akụrụngwa n'ihi na abụghị m nsogbu na ọtụtụ mmemme ngwanrọ n'efu na-arụ ọrụ na Windows n'enweghị nsogbu ...
Dị ka ọ dị, igwe m archlinux na-eji 20mb ebule, nnweta. Iji Linux eme ihe dị ka sistemụ kachasị arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ, mana ị ga-agba arụkwaghịm wee kpọọ isi na nkwenye niile Linux na-eweta, nke ejiri boot abụọ ahụ dozie, mana ọ baghị uru. Ọ bụ ihe na-eme ka ọ dịrị gị mma.
kwuru pendev92 «" Linux bụ nkà ihe ọmụma "
Ọbụna oriri na-ewu ewu nọ na mpaghara m na-eji Linux eme ihe dị mkpa, n'ihi na ọ gaghị emegharị ọtụtụ kọmputa yana naanị n'ihi na ọ na-ekpuchi ihe niile emere, yabụ na anyị enweghị ike ikpebi onye na-eme ya »
huh nke a na atu m egwu. Ha na-atụ m egwu, ndị neoliberals, ndị na-apụnara mmadụ ihe, na-enweghị ụkpụrụ ma ọ bụ omume, ha na-erubere Machiavelli isi nanị "njedebe na-eme ka ihe dị mma", njedebe bụ ị nweta ego, ihe pụtara izugbe ọha na eze.
Pendev92 ọbụnadị na ị mataghị arụrụala ị na-ede.
kwuo Ogbogbo 92 "" Linux bụ nkà ihe ọmụma "
Pendev92? "" Linux bụ nkà ihe ọmụma "? WTF?!
Ihe @ pandev92 tinye tupu tinye ahịrịokwu ahụ bụ nke a:
«Returnlaghachi na ihe na-echegbu anyị, ọ bụghị mmadụ niile na-eji Linux maka nkà ihe ọmụma, ikekwe ọtụtụ na-eme ya maka mfe na nkịtị mma, n’etiti ha, mma nke modifying gị usoro gị masịrị gị, mma nke inwe ike iji desktọọpụ dị iche iche, njikarịcha nke sistemụ, na ọtụtụ ndị ọzọ maka ihe dị mfe na nkịtị ịmata […] »
Mmehie dị oke njọ, amachaghị etu esi gụọ ederede dị otú ahụ nke ọma.
pandev92 dere tupu
"Ọ bụrụ na m mụtara ihe ọ bụla n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ na eziokwu ahụ dabere n'akụkụ nke ị na-ele anya, na ọ dịghị onye n'ime anyị nwere ya n'ozuzu ya."
Nke mbụ, buru ụzọ chọpụta ihe metụtara omume, ma hapụzie ahịrịokwu ha.
Mmehie dị oke njọ, amataghị otu esi aghota ederede dị ka nke a nke ọma.
ọ ga-adị mkpa na oke iwe neoliberal
Zuru!, Anyị bụ ndị na-eji Linux maka naanị mma / mkpa na ndị na-eji ya ịgbaso nkà ihe ọmụma ... Gini kpatara esemokwu? Amaghị m ihe m ga-akpọ ya, mana ọ dị m ka nzuzu na onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịnwere onwe ya site n'itinye echiche ndị ọzọ. (Enwere m ike ịla azụ)
Mana ka emechara, a na-eji Linux. Ọ bụrụ na ọbụlagodi slogan nke blog na - ekwu: "Ka anyị jiri Linux nwere onwe", mana gịnị kpatara? Linux na - eme ka anyị nwere onwe ma ọ bụ mkpebi iji ya n'onwe ya? ...
Echegbula, Fans na fanboys kụrụ afọ n'ala site n'ịghara ịnọgide na-anọpụ iche.
PS: Ọ nwere onye nwere ike imechi ihe ndị a? Ha eruola narị abụọ.
Ee, ọ bụ naanị na ebule na-enwu mgbe m hụrụ enweghị nsọpụrụ na ha nwere ikike ha, mana ikike ịkwanyere ugwu n'echiche m na-ebuwanye ibu.
Ndahie ya mere ka m tufuo XD (ọjọọ ọchị) ...
PS: Ma nke a emechabeghị, o juru m anya na agaghị ahụ Nano, KZKG na ndị òtù ha ...
Na ngwụcha ụbọchị, ọ bụ sistemụ arụmọrụ, ngwa ọrụ, ma ọ bụ ụzọ ịnyagharị, ma ọ bụ igwu egwuregwu, ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị chọrọ iji ya nọrọ; ọ bụ nanị sistemụ arụmọrụ, ọ bụghị ọbara onye ọ bụla.
Kpọmkwem, ọ dị ka karịa ịkwado ịdị adị nke nnukwu sistemụ arụmọrụ (ma ọ bụ kernel, dị ka ịchọrọ) ha na-agbachitere echiche ndị na-ezighi ezi ma ọ bụ ziri ezi mgbe ụfọdụ.
Ọ dịghị onye nwụrụ n'ihi na m kwuru nke a "M na-eji Windows hahahaha", nri?
Ọ bụrụ na m nọ n'ihu mmadụ, ọ ga-adọpụsị ire m ma gbanye Arch Linux CD n'ime ọnụ m ……… ..
I nwere ike ikwu maka nhọrọ mgbe ngwaahịa anyị nwere ike ịhọrọ ịhọrọ ga-enweta otu nkwado ahụ. Ebe ọ bụ na enweghị ụdị ihe ahụ n'ọtụtụ ngwaahịa, mmadụ enweghị ike ikwu maka nnwere onwe ịhọrọ: ị nọrọ na Windows ka ngwaahịa gị rụọ na 100% ma ọ bụ jiri Linux, jiri, iji ihe atụ, kaadị vidiyo 80% n'agbanyeghị sistemụ ga-akwụsi ike. N'ime nke a enwere ọtụtụ, ọtụtụ ihe atụ.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ ngbanwe dị iche iche nke ọ na - atụ aro maka mmekọrịta nke onye nrụpụta / ndị na - azụ ahịa, ọ bụ ngbanwe n'usoro azụmaahịa dịka nhichapụ ikike ọrụ, ikike nwebisiinka na ndị ọzọ na-emechitere ndị ahịa nke na-eme ka ngwaahịa dị oke ọnụ, yana nke na-anaghị ekwe ka ha webata. Free software bụ a nkà ihe ọmụma nke ndụ, na-enweghị na-aga n'ime fundamentalisms, n'ihi na ya mmepụta nlereanya nwere ike etinyere ọ bụla oru ngo na ya pụta bụ mgbe niile mma n'ihi na onye ọ bụla, ikekwe ọ bụghị maka azụmahịa ụdị na-agbalị ịdịgide onwe ya.
Ọ dị m ka ikwu okwu banyere "enwere ezinụlọ iji kwado" bụ ịnwe echiche na-agbanwe agbanwe na nke na-abụghị mmalite; N’akụkọ ihe mere eme nile, e nwere ahịa ndị na-adịkwaghị efu ọnụ (ndị ọrụ mbuli elu, dịka ọmụmaatụ). Agụrụ m mmasị na-adọrọ mmasị nke nyeere m aka ịkwụsị inwe obi abụọ ọ bụla: ọ bụrụ na enwere igwe na-edepụtacha achịcha na-ekwe ka mmadụ niile nwee achịcha ha ma n'otu oge ahụ enwere ike ịmegharị igwe ahụ iji mee ka ekpomeekpo dị iche iche ghara ịdabere na ya enweghị onye na-eme achịcha, gịnị ka ị ga-ahọrọ? Kwado ahia onye na-eme bred ma ọ bụ uru nke igwe na-eme achịcha bara ụba?
Ekwenyere m na ebumnuche ahụ, ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ihe ọ dị ka ọ bụ apịtị apịtị.
pandev92: »» Ma ọ bụrụ na onye ahụ chọrọ ịkpata ego, ọbụlagodi obere ego, kedu ka ọ ga - esi hapụ koodu ahụ? »
Na ọ bụ n'efu apụtaghị na ọ bụ n'efu. Kwụ ụgwọ maka mmemme efu anaghị apụta na ọ nwekwaghị akwụ ụgwọ. Adị m njikere ịkwụ ụgwọ iji nkesa m masịrị m. Ahọrọ m nkesa a na sistemụ arụmọrụ a abụghị n'ihi na ọ bụ n'efu mana n'ihi na achọpụtara m na ọ kachasị mma maka m. Ọ dị onye ọ bụla n'ime anyị na-adịghị njikere ịkwụ ụgwọ iji GNU / Linux?
Tupu ha atụba m n’ime egwu, aga m agwa gị na anaghị m ekwu maka ego naanị. Nke ahụ bụ ụzọ dị mfe. Echere m na ị na-ekere òkè (ọ bụghị naanị mkpesa) na ime distro gị, kernel, nke kachasị mma: site na ịghọ beta beta, na-aga site na ịsụgharị akwụkwọ ntuziaka, ịbanye na ụlọ akwụkwọ na inyere ụfọdụ ụmụ akwụkwọ aka izu ike ịnwale GNU ma ọ bụ isi mmalite.
Selfishchọ ọdịmma onwe m nanị na-akpali m ichebe ihe m ji kpọrọ ihe nke ukwuu. Achọrọ m ka ọ bụrụ asọmpi. Linux bụ asọmpi: a mụrụ ya asọmpi, ọ na-ebi asọmpi na ọ dịghị ụzọ ọzọ a ga-esi mee ihe. Ime ka o ruo onye ozo bu ihe ozo, ma ihe m ma n’uwa a bu mpi. M nwekwara ike mechie anya m biri na lollipop villa nwa oge.
pandev92: »» Eleghị anya, mmadụ ga-abịa, were koodu ahụ, melite ya, ngwa ya ga-akarị nke mbụ, jiri obere mbọ, wee hapụ onye okike mbụ na asọmpi asọmpi, na-akpata na njedebe iji kpebie ịghara ịga n'ihu na mmepe, nke mere ọtụtụ oge, nyere nsogbu nke monetizing obere oru ngo.
Nke a anaghị egbochi onye okike izizi ịnara ngwaahịa ya "emeziwanye", meziwanye ya ọzọ, na ịnwa ịgbanwe ya maka ego. Ọ ka bụ nsogbu ikike. Ọ bụ ya mere m ji were ya dị mkpa na anyị niile ga-emekọrịta site na ịnye ndị okike ihe anyị chere na ha dị mkpa, ọ bụghị naanị na ego.
Anyi aghaghi ikewapu okwu a na efu. N'ezie, amaghị m ihe ọ bụla bụ n'efu na ụwa a. Ihe ọ bụla nwere ụgwọ. Ewerela m oge buru ibu iji dozie obere nsogbu ndị m gbabaworo. E boro m ebubo n'ihi na enwetara m ngwaahịa siri ike melite na mgbanwe, ọbụlagodi ịkwụ ụgwọ.
Nwere onwe ya, ee; Free mba.
Zaghachi iji adeplus
Anyị dịkwa otu! Ọ bụrụ n ’ire ihe nwere ikikere n’efu, enwere m ike iwere koodu gị ma kesaa ya n’efu n’enweghị mgbanwe ọ bụla, n’ikpeazụ, m ga-efunahụ m. Ghọtaghị ihe m na-ekwu?
Lọ ọrụ dịka Red Hat nwere ike imeli ya, n'ihi na ha bụ akara, akara, ụdị Linux nike. Ha ga-ere mgbe niile, n'agbanyeghị ole linux centos na ndị ọkà mmụta sayensị si pụta.
Aghọtara m gị nke ọma. Ma ọ dịghị ihe na-egbochi obere onye nrụpụta ahụ ịnye ngwaahịa ahụ n'ọnọdụ ego. Ọ bụrụ na RedHat gosipụtara ma chọọ idobe ngwaahịa onye nrụpụta ahụ, hapụ ya ka ọ kwụọ ya ụgwọ. Nke a apụtaghị na mmemme ahụ enweghịzị nnwere onwe, ma ọ bụ obere onye nrụpụta tufuru ikike ya ịkwalite ngwaahịa ya, ma ọ bụ iji wughachi nke RedHat rụpụtara. Ọ bụrụhaala na RedHat na-akwụwa aka ọtọ ma na-akwado usoro nke nkwekọrịta ahụ.
Nsogbu a ka bụ na anyị na-eche n'echiche nke "Ana m adọkpụ ya," na mgbawa nke "mellow-locrackeo-ya-run." Na, ọ bụrụ na ị mee m ọsọ ọsọ, n'ihi sọftụwia ahụ.
Isi ihe a bụ na m kwenyere na gị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, belụsọ maka atụmatụ gị na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ kwesịrị ịbụ n'efu.
Ezi ntinye Pandev,
megide isi n'ụdị ọ bụla nke 😉
«Amalitere m oge mgbe m kwusịrị okwu Stallman, na-ejide n’aka na nke a bụ naanị eziokwu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, mgbe anyị kwenyere na anyị nwere 100% nke eziokwu ahụ, anyị ezighi ezi, anyị enweghị ike ịhụ ezigbo ụwa, mkpa ha ma anyị ghọọ ụdị ndị okpukpe na-anụ ọkụ n'obi bụ ndị, ruo n'ókè ụfọdụ, na-echekarị nnwere onwe ngwanrọ karịa nnwere onwe mmadụ, nke na-atọ ụtọ mana ọ bụ eziokwu.
Ọ bụrụ na m mụtara ihe ọ bụla n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ na eziokwu ahụ dabere n'akụkụ nke ị lere anya, na ọ nweghị onye n'ime anyị nwere ya n'ozuzu ya. "
ọ dịghị ihe richard stallman bụ onye nzuzu taliban onye ara na-agba. ọ bụ onye na-agbanwe agbanwe. ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi n'okpukpe. richard stallman enweghị ike ikwu na o nwere akụkụ ihe kpatara ya.
Pandev92 ekwuola "Amụtala m na nnwere onwe nke mmadụ, karịrị nnwere onwe nke ngwanrọ ahụ" Oh, ebe ahụ, oh ebe ahụ ị malitere ịhụ nke ọma ebumnuche ya, iji gosipụta ọdịiche dị n'etiti ọrụ mmadụ na mmadụ.
Pandev agbakwunyela "Kedu ka onye nrụpụta na-emepụta ngwa egwu ga-esi nweta ego, naanị site na ịnye ọrụ ọrụ aka, dị ka Red Hat na-eme?" Ikpeazụ kick to open source, na ebe ahụ ka ọ na-egosi ya neoliberal ọchị. Olee otú a Mmepụta na-ebi ndụ? zuru oke alibi ka PRIVATIZE koodu ahụ.
Enwere m ike ịkọwakwu ọtụtụ ihe, mana ịgụ ederede a na-ewetara ndị ezigbo mmadụ ihere.
Izizi ndị Farisii ma ọ bụ ụkpụrụ mmadụ abụọ, nke na-achọ ime ihe iwu kwuru ma o leghara ya anya, emewo m ka m nwee ahụ nfụkasị.
Agaba, aghotaghi m ya otu ahu. Mgbe m gụrụ pandev92 m ghọtara na ezughị oke ịbụ onye na-eso ụzọ kpuru ìsì mana na ozi ahụ ga-emerịrị. Nke ahụ enwetaghị iru eru ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ na-emepekwara unu abụọ ụzọ hiere ụzọ mgbe unu na-ekwu eziokwu na eziokwu.
Site n’ikwu na ị masịrị nnwere onwe mmadụ karịa nnwere onwe ngwanrọ, Aghọtara m na nnwere onwe mmadụ karịrị echiche nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Ahụghị m mmegide ọ bụla n'ihi na ọ bụ mmasị onwe onye.
Bụ neoliberal pụtara na ị na-ekpebi mgbanwe nke akụ na ụba site n'akụkụ ọkọnọ. Nwere ike iji ya dị ka ihe na-atọ ụtọ, mana ọ ka bụ echiche akụ na ụba.
Adị m mma ma enweghị m ụjọ ọ bụla, enwebeghị m ike ịchọta n'isiokwu ahụ na akpọrọ Richard Stallman dị ka onye nwere mmasị ma ọ bụ okpukperechi.
Ekwenyere m na nke ahụ nfụkasị ị kpọtụrụ aha; Enwere m oge ọjọọ.
Na paragraf nke atọ, jiri nlezianya gụọ akara Richard Stallman dị ka onye okpukpe na-anụ ọkụ n'obi,
Ndị neoliberals abụghị naanị nhọrọ akụ na ụba, ọ bụkwa ịda ogbenye akụ na ụba nke ụmụ amaala, ebe wepụ nke ndị bi na ya, ebe enwere ụfọdụ ndị nwere ikike wepụtara akụnụba niile maka uru nke aka ha, nke amara Chineke họọrọ, tinye echiche akụ na ụba dabere na ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, onye maara ihe na-ebibi ihe niile.
Achọghị m onye nwere ọgụgụ isi kachasị na gọọmentị, achọrọ m ka onye kacha nwee ezi uche. Lee al wert, onye ozi nwere ọgụgụ isi ma baa uru, mana ọ kwaghaara agụmakwụkwọ maka abamuru nke klaasị wepụ akwụkwọ.
Obi ụtọ na-enye obi ụtọ ga-eduga anyị n'agha, a ga-etinye ngwaahịa ngwaahịa na mba atọ ma ọ bụ anọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ikwu maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, anyị nwere ike ime ya na njedebe na nnọkọ a, ọ nweghị ihe ọ bụla ị ga-eme ebe a, ma e wezụga nke ahụ, ị ​​na-atụgharị uche naanị, ọzọ ...
pandev92 gị echiche, nke kwesịrị niile m na-akwanyere, impregnated na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ dị m nwute ịgwa gị, ezigbo enyi m, na ọbụna ọnụ agwa bụ mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Mkpebi Stallman mepụtara ngwanrọ bụ n'efu bụ mkpebi ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ gaghị ekwe omume ikewapụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọha mmadụ, mmadụ bụ «anụmanụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị», yabụ omume nzukọ ọ bụla na-ewetara ya usoro, usoro iwu na / ma ọ bụ iwu, n'ikpeazụ, ma ị masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị, bụ a omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Sọftụwia bụ ngwa ọrụ, ọ bụghị njedebe n’onwe ya.
Agbanyeghị, ọbụbụeze yana njikwa gị n'ike nke a, nke na-adịwanye mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Nke ahụ bụ mkpa nke Free Software.
Ọ bụrụ na Stallman amaliteghị ya (ma kwere m, onye ọzọ agaraghị eme ya n'okpuru okwu dịka GPL, n'ihi na n'ikpeazụ, ịchụ onwe onye n'agha nke a ga-emerịrị iji rụọ ọrụ n'ụzọ o mere dị ọtụtụ).
N'oge a, anyị agaghị enwe ike ịgbachitere onwe anyị n'ọtụtụ akụkụ. Dị ka NSA (dịka ọmụmaatụ).
Eziokwu bụ na mmetụta nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị ukwuu iji banye na akụkụ ọ bụla nke emetụtala anyị niile (ma ha maara ya ma ọ bụ na ha amaghị).
Mana ma ị masịrị ya ma ọ masịghị gị, ihe kpatara eji emepe sọftụwia, ọkachasị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ abụghị teknụzụ. Enwekwara nkwalite echiche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Iswa abụghị naanị ụlọ ọrụ na ọnụ ọgụgụ. Ma jụọ Stallman, onye bụ ihe atụ dị ndụ na enwere ike ịmalite imegharị naanị n'ihi echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke amamihe gị.
Na ugbua ha achoghi ime ihe obula bu ihe ozo, ma o doro anya na o nweghi onye n’ime gi puru ime ihe nile achupuru nke gbasoro echiche gi rue na ndu nke gi.
Maka gịnị? Ọ na-adịrịghị anyị mma ile anya otubo ma chee naanị otu?
Gini mere ị ga - eji chee maka ndị ọzọ, ọ bụrụ n’ikpeazụ, n’agbanyeghi etu ị siri gbalịa imezu ihe kaara onye ọ bụla mma, ụmụ nwoke ga - arara onwe ha nye na - eme gị ihe ọchị ma na-eleghara gị anya maka eziokwu nke ịchọghị ọdịmma onwe gị naanị ezi mmadu?
Na ngwụcha, ndị ahụ bụ ndị na-abanye n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị n'ihi na ha na-egosi showbiz, kama n'ihi na ha na-eme ihe ọ bụghị mmadụ niile nwere ikike.
Ọ bụ ya mere e nwere ndị nwere mmasị n’ebe ha nọ, ọ bụ ya mere e nwere ndị na-agbaso nzọụkwụ ha, ọ bụ ya mere e nwere ndị na-arụ ọrụ na echiche ndị ahụ ma na-aga n’ihu na-akwado ha.
Sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ amamihe? ee
Ọ bụ ndọrọndọrọ ọchịchị? ee
Otu ihe bụ software na ihe ọzọ bụ ihe n'azụ ya.
Mana ekwesighi ekwenye na nkà ihe ọmụma ha iji nye aka ma nyere aka na ya. N'ihi na enwere akụkụ ọrụ aka ya na ya.
Akụkụ nke teknuzu bụ ngwanrọ, na akụkụ mmadụ bụ ihe anyị ji ya eme. Ọ bụ kpomkwem nke ikpeazụ a ka m kwuru n’elu na-egosi. N'ihi na ngwanrọ anaghị eme onwe ya, ọ naghị eji onwe ya. Obu onye n’emerita ya na eji ya.
Ọ dị m nwute ma ọ bụrụ na m dị ntakịrị mgbe m dere, ana m arụ ọrụ na oge nri ehihie ma na rush enwere m oge siri ike inweta echiche = P.
Mana ọ bụrụhaala na ozi a ghọtara, ọ dị mma. =)
Okwu gị dị ezigbo ụtọ, Wilson, m na-ewepụ okpu m.
Nke mbu, ekwuru m ikwu na blọọgụ banyere Linux nke na -eweta ụdị edemede ndị a ga-emepe arụmụka echiche dị mma ma baa ọgaranya. Bravo maka Site Linux! An agora na Intanet ebe a na-atụle echiche na echiche dị iche iche na-adị mma mgbe niile.
Mana n'ezie, isiokwu a na-ajụ nwere ọtụtụ arụmụka nke m chọrọ inye echiche m
1. Iji kwuo na Linux bụ nkà ihe ọmụma abụghị "oke mmejọ." Linux, dịka ihe ndị ọzọ dị na ọha mmadụ a, nwere agwa abụọ. Na Seminally, akụkụ nke ịtụrụ ime banyere sọftụwia akọwapụtara na atụmatụ ọgụgụ isi. N’ezie, nke a anaghị agbanwe agbanwe. Ojiji na ntolite nke kernel emeela ka amụma ya gbanwee karịa iji ruo "onye ọrụ nkịtị, onye na-azụta ngwaike n'echeghị ọtụtụ ajụjụ echiche. Approachzọ nke mepụtara agwa pụrụ iche (otu "ngwa ọrụ") nke GNU-Linux. N'ezie, Linux bụ ma, mana ike nke otu na nke ọzọ bụ, ịsị na ọ dịkarịa ala, ahaghị nhata, agbanyeghị ọtụtụ ihe nwere ike ịbụ "karịa" nke bara uru karịa nke ọzọ.
2. Ọtụtụ mgbe, iji nwatakịrị eme ihe pụtara ihe nnwere onwe. Ọ dị m ka ọ bụ otu a. Ọtụtụ ihe edere banyere nke a. Ndị ode akwụkwọ dịka Albert Camus ("Onye nnupụisi"), Guy Debord (The Society of the Spectacle), Michel Foucault na Slavoj Žižek (ikwu nanị ole na ole), abanyela n'ajụjụ a. Ọ dịghị onye nweere onwe ya kpamkpam. N'ezie "Nnwere Onwe" nwere ike bụrụ mmụọ. Ọ bụghị otu ihe ahụ mgbe a na-ekwu ya, iji ghọta onwe gị, site n'aka onye na-echekwa ego ma ọ bụ onye isi ala nke United States, dịka a na-ekwu ya mgbe nwunye na-eti ihe, onye agụmakwụkwọ ma ọ bụ onye na-akwado ihe ndị ruuru mmadụ. Ezinaụlọ, ọrịa, njikọ ọbụbụenyi ma ọ bụ mkpa, na -emepụta igwe agbụ anyị ga-eji mee njem ụbọchị anyị ụbọchị. Anyị nwere ike ọ gaghị achọpụta ya n'ụzọ ahụ, n'ezie, mana ịdị adị ya na-anapụ anyị "nnwere onwe ime nhọrọ." N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na "nnwere onwe ime nhọrọ", n'onwe ya, bụ echiche arụmụka. Ihe ọzọ dị iche bụ ma “mmadụ” ọ manyere anyị ime ihe ụfọdụ ma ọ bụ masịrị anyị. Mkpụrụ nke ọtụtụ ikike, ihe ma ọ bụ mgbasa, nke anyị bi kwa ụbọchị na-ebi, kpọmkwem, ebe a. Na nke a, ekwenyeghị m n'eziokwu na GNU bụ isi ọchịchị isi ike. Itinye ya na nke ahụ bụ naanị "ntaramahụhụ." Ihe ọzọ dị iche bụ na arụmụka ha abụghị okwu mkparị n'ihi na ha kpasuru anyị iwe. Ma nke ahụ bụ okwu dị iche. Iji merie ya anyị ga-arụrịta ụka. Naanị ihe anyị na-eme taa.
3. N’akụkụ ụwa nke enyi, ebe anyị nwere ike ịgbanwe PC anyị kwa afọ abụọ ma ọ bụ atọ, anyị na-echefukarị ego ole ọ pụtara na ihe ọ na-efu iji nweta n’akụkụ dị iche iche nke ụwa. Otherlọ ọrụ ndị ọzọ anaghị eche ma ha nwere ike ịzụta Mac ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ikike AutoCad. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. N'ebe Ọdịda Anyanwụ, maka mgbanwe, anyị na-eche banyere onwe anyị dịka otu nke ụwa. GNU-Linux, nnukwu ọrụ Mgbakọ na-abụghị nke azụmahịa na mbara ala, nwere mgbagha "mana" na ọchịchị aka ike nke ngwa ahịa. Ka anyị ghara ichefu ya. N’echiche m, n’achọghị ịtọ onye isi, nke a bụ isi. N'ikwu eziokwu, ịtọhapụ ya na ngwaọrụ dị mfe, nke ụlọ na nke enweghị ntụpọ, nke naanị ihe dị mkpa na-agbanwe ọnọdụ desktọọpụ na ịhazi ya ka ọ masị anyị, ọ ga-ada.
Akụ na ụba (asọmpi, uru, isi obodo, uru, ego, ahịa fetishism) adịkwaghị achịkwa anyị ogologo oge. Ha na-eme n'akụkụ niile nke ndụ ma na-edo anyị n'okpuru (anyị enweghịzi ike iche n'echiche ndụ na-enweghị ha, ọbụlagodi na ikeketeorie nwere naanị afọ 500 nke akụkọ ntolite). Site na nsogbu nke mepere anya nke anyị na-ahụ kemgbe 2008, na ọdịda nke ihe nlere anya nke metụtara ndị otu ya niile, "amamihe" ọzọ nke GNU-Linux tụpụtara, na-eme ka ojiji nke okike nke okike, "na-ewepụta" ya site na ọcha okirikiri aku, nke uru na ihe e kere eke bụ kacha na naanị ọnọdụ.
4. "Onweghi onye bịanyere aka na narị otu narị ka anyị were mmemme emechi." Eziokwu, ma ị ga-ekwenye na m na elementrị eziokwu na n'etiti a oke na-aga n'ihu mgbasa ozi igba egbe na ihu ọma nke ụfọdụ ndụ, na <> bụ nnọọ oyi.
Iji mechaa, nkebi ahịrịokwu mere ka m chee na izu ndị gara aga ma echere m na ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na ihe anyị tụlere taa:
«… Ma sistemụ dị ka ndị dị otú ahụ anaghị arụ ọrụ n'ihi na o nwere nkwekọrịta nke ndị ọ na-achị, ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na ọ na - eme ka ihe ọ bụla ọzọ ghara ikwe omume», (Anselm Jappe, «Ebe E Si Nweta Ọnwụ» Ed. Pepitas de Calabaza, 2011)
Ndo, m mezie a ndudue
4. "Onweghị onye na-edebanye aha maka otu narị otu narị ga-eji mmemme emechiri emechi." N'eziokwu, mana ị ga-ekwenye na m bụ eziokwu nke elementrị na n'etiti oke mgbasa ozi na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-akwado ụfọdụ ndụ, "nhọrọ a na-enye n'efu" bụ ezigbo ọnọdụ.
Xeip ... Enwere m ike ekwenyeghi na arụmụka gị niile, mana ejiri m n'aka na rue ugbu a ederede gị bụ ezigbo ihe atụ nke olumba. Ọ dị mma ịgụ ya.
Daalụ otu puku.
Mmasị, ọ dịbeghị onye nwere ike ịkọwa ya nke ọma ... Amaghị m ma ọ bụrụ na ị raara onwe gị nye ide mana ihe ekwuru bụ ihe na-atọ ụtọ ịgụ. ekele
“N’ụzọ dị mwute n’ụwa a, echiche nke sọftụwia bụ ngwa ahịa ka na-aga n’ihu, ma a na-akwụ ụgwọ maka iji sọftụwia a, anyị nwere ike masị ya ma ọ bụ na anyị achọghị, mana nke a bụ ụdị anyị bi n’ime ya, ma megide ya, ọ dị ka ịga megide ụkpụrụ akụ na ụba ụwa. "
ma ị maghị ya, ọ chọrọ nrubeisi, na ndụ dị ka nke ahụ, ... ọ bụrụ na ọ na-echetara m ọ raụ, ịkpa ike na ịchụ àjà, galik na mmiri, rapara ya ma jigide ya, ihe ndị a bụ ... ka anyi hu pandev92 GNU / LINUX bu iguzogide ya n’ihe guzosiri ike, ma odi gi nma ma odighi, obu ngaghari megide mmegbu, nnabata ... o di nwute, ka anyi lee ma anyi teta
Apụghị m ịkwụsị ịchị ọchị na ntụnyere gị nke @ pandev92 na onye isi ala nke Spain ugbu a.
Akụrụngwa ahụ n'onwe ya bụ ihe ezi uche dị na ya nke akụrụngwa kọmputa, ya mere enwere ike ịnye ya dịka ọrụ.
Ugbu a, nke ịghọ ngwaahịa, nke ahụ bụ ihe Bill Gates tụrụ anya ya mgbe ọ malitere ịkwụ ụgwọ maka koodu isi nke onye nchịkọta ya na Basic (agbanyeghị, nke ahụ bụ naanị ihe m na-egosipụta na Microsoft na mgbakwunye Windows interface View).
Ihe bụ nsogbu bụ na e nwere mgbe a horde nke ndị fasiji dị njikere iweda gị ala n'ụzọ kacha asọ oyi, na-etinye echiche ha n'ihe egwu iyi ọnwụ.
M nwere otu oge dị ka m na gị na-agbalị distro mgbe ọzọ na m nwere na-eji Windows ma ọ bụ OS X ime akpan akpan ihe -Ebere na less-.
Ọ na-eju m anya ụbọchị ọ bụla na enwere ndị werela nke a dịka okpukperechi ma mechaa n'otu mkparịta ụka ebighi ebi: "Chineke m ka nke gị mma" ma na-azọ onwe ha aghụghọ.
Ebe m nwere uto maka Linux, achọpụtara m na ọrụ m dị ka linuxer bụ iweta Linux na Windows na Mac ndị ọrụ chọrọ ike.
M na-etinye Ubuntu ma kọwaa otu esi eme ya, m na-akọwa njikwa na ngwaọrụ ndị bụ isi na ọ na-adị m ezigbo mma mgbe ha nọrọ n'akụkụ penguuin.
Ihe anyi choro bu ndi n’eme ihe ma ghara ikwu ya.
Ndị mmadụ na - eme akwa ngwaahịa: Red Hat
Ndị na-eme ngwaahịa amamịghe na mfe iji maka ndị ọrụ ọhụụ: Canonical / Ubuntu, Linux Mint.
Ministri nke agụmakwụkwọ ebe a na-akwalite agụmakwụkwọ kọmputa zuru oke na ọnweghị oke n'ịmụ ngwaahịa Microsoft: Venezuela
Dị ka ibe mbụ nke mkparịta ụka bụ teknụzụ gnu / linux or Linux. Dị ka Wikipedia si kwuo, mmemme nke GNU mepụtara nke anyị ga-ahụ na distros nkịtị bụ gimp, gnome, bash na gcc / glibc. N'ihe m, arch Linux enweghị gnome ma ọ bụ gimp, ọ na-ejikwa csh kama bash. Ọ bụrụ na ha na-eji chakra ma ọ bụ oghere, ọ bụ otu ihe ahụ. Otu Gnome kere miguel de icaza kwuru na muylinux na azịza ya site na git na naanị ndị nzuzu na-akpọ ya gnu / Linux. Eziokwu m kwenyere bụ ezigbo nzuzu na nka anaghị emetụta ma e wezụga na ọ na-ewe ogologo oge ịsị na m na-eji gnu / Linux kama iji Linux. Ọ dịghịkwa onye na-eche. Mana ana m ekele gị maka glibc, gcc na gdb nke nyeere m aka ịkwado mmemme 1 na C.
Ọtụtụ ihere wụsara na nkwupụta ahụ, enweghị m ike ikwenye na ọ dị mkpa ka ndị mmadụ jiri ink nu ihe niile kọọ ihe, m achọ, ọ dịghị ihe na-emetụ bọọlụ m aka karịa nke ahụ, na ha chọrọ ịchị ọchịchị ihe, ma ọ bụ nye ya ihe ọ pụtara gafere ọ bụ.
Ka o sina dị, ọ bụ ịsị na, ọ bụrụ na m amalite ịza mbibi ọ bụla nke moron ọ bụla m hụrụ, anaghị m agwụ, ọ bụkwa isiokwu ejirila otu puku na otu ugboro, ọ nweghị ihe ọ bụla.
kwesịrị ma ọ bụrụ na ị oko, ị ọkọ
Nọmalị ma ọ bụrụ na ị na-ekpeghachi a comment dị ka nke a, na-enweghị isi, m na-ehichapụ ya. Anam agwa gi na nma nma.
Imebiga ihe oke n'anya site n'echiche gị .. ọ pụtaghị na ọ bụụrụ ndị ọzọ .. 😉
elav this comment is out of tune !!! .. agbanyeghị, ekele, na uru
Amaghi m ebe m siri puta n'olu m, azaghachiri m Nano site na iji okwu ya.
Ma ana m eme ka ọ maa mma: Eziokwu ahụ bụ na mmadụ na-eche echiche n'ụzọ banyere ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ, enyeghị ha ikike ịsị na onye na-echeghị otu ihe ahụ ezighi ezi ma ọ bụ na-ekwu okwu ahịhịa.
Nke ahụ bụ ihe m bu n'uche.
Know maara nke ọma ihe m na-ekwu nkwọcha, ị maara nke ọma ihe m na-ekwu, ma ị doro anya na n'ime ọgba aghara ahụ niile, ihe karịrị otu mmadụ agbanyela ma hapụ ihe dị mkpa na-ekwu n'ụdị ikwu.
Achọghị m ka m too ogologo, agbanyeghị, banyere firecracker nke Vivaldi Ọ dị mkpa iji dọọ gị aka na ntị ihe ma ọ bụ gịnị? Biko, anyi mee ya ugbua nwoke.
elav Echere m na e nweela nghọtahie.
Nano nke ukwuu na na na ị dị nnọọ inu, lee ma ị na-asa.
Nke a bụ nano, kedụ ebe ị mụtara imeziwanye ihe?… Gini mere ị bụ ezigbo enyi pandev92? Nweghị ike ịza edemede gị? ị na-ewe iwe ọsọ ọsọ? ... onye bụ onye na-ere ọkụ? Enwere m olile anya na ị mezi, rịọ mgbaghara ma kpaa agwa gbasara ASỌPESR..
Hmm na afọ na-emegharị saịtị a, echere m ... ọ bụ ezie na nchịkọta ma ọ bụghị iji too ogologo ...
"Nọmalị ma ọ bụrụ na ị oko, ị ọkọ onwe gị"
Na-arịọ nkwanye ùgwù, mana na-akpọ m onye nzuzu 😉 bịa, mgbe ahụ abụ m nwata ahụ dị mkpa.
Lee, agwara m gị na agaghị m agbatị ma emeghị m, dị ka onye si agba ọkọ, nri? Emere m otu ihe ahụ maka gị ma o doro anya na ị masịghị ya, ma eleghị anya, ị chọghịkwa na mhichapụla ihe ndị gara aga, agaghị m eme ya ma ọ bụrụ na ebughi ha mkparị.
Agbanyeghị, i nwere ike na-eche echiche ihe ị chọrọ banyere m na m moderating, ka emechara, ọ dịghị mkpa 😉
Echere m na onye ọ bụla kwesịrị ịdọrọ nkwubi okwu nke aka ya banyere ngwanrọ ngwanrọ n'efu na usoro mmeghe, ụdị edemede a na - ewepụta nkewa karịa na "echiche", echiche mbụ na ọtụtụ echiche ndị ọzọ, isi ọ bụla bụ ụwa.
Zaghachi ka raptor
Mba. Echere m na ụdị edemede a na-ewetara echiche ndị mmadụ banyere isiokwu a n'ezie.
Ọfọn, nke a dị ka ịgụ akwụkwọ akụkọ na-agwa m akụkọ na-ezighi ezi ma ọ bụ nye m ọkara eziokwu, enwere m mwute maka akụkụ m, mana m na-apụ. O doro m anya na pandev92 abụghị FromLinux mana ọ dị nwute, enweghị m ike ijikwa "mmiri ara ehi ọjọọ" nke ukwuu, n'ihi na n'ikpeazụ ọ bụ ihe m hụrụ, mmiri ara ehi ọjọọ. Imakụ mmadụ niile, asịrịla m "ihe niile". Daalụ maka ihe niile, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile. Kpọọ m ihe ị chọrọ, m ga-abụ nke ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ dị mma karlinux: Bye! Na ị na-aga mara mma. A ga-anabata gị ịlaghachi oge ọ bụla ịchọrọ .. 😉
Lee gị na Taringa na Fayerwayer, bro.
Ọ dị mma ịsị na ngwanrọ ngwanrọ bụ nhọrọ, mana anyị kwesịrị ịgbakwunye na ọ na-agbanyekarị na onye ọrụ, na-aghọ iyi egwu.
N'aka nke ọzọ, GNU karịrị nkà ihe ọmụma, na-enweghị GNU, ikekwe Linux agaghị adị. Anyị ekwesịghị naanị mesie "adịghị mma", anyị ga-adị mma.
Maka ndị ọzọ, enwere m mmasị ịgụ ya.
Mgbe m na-agụ, achọpụtara m ọchịchọ dị ukwuu ịme gnu / Linux ihe azụmahịa, m na-emeghachi ya, gnu / linux adịghị edepụta na ngwaahịa mgbanwe na ọ bụghị ụlọ ọrụ.
Ndị a na-emekọ ihe ọnụ iji nweta mmemme na sistemụ arụmọrụ na-abụghị ihe azụmahịa, ya bụ, ebumnuche ha abụghị ịkpata ego, ma ọ bụ ikekwe ọ bụrụ na ha jisie ike nweta ego ha ga-ekesa dollar ole na ole nye anyị niile na-eji?
Ndị mmepe na-achọ ịkpata ego ugbua nwere windo na mac ị ga-azụlite ... Amaghị m onye na-akpọ ha gnu / linux mgbe ha maraworị ihe iwu dị ebe a ... M na-ekwu otu iwu ahụ mere ka amụọ ya na na-eto ma na-aga n'ihu na ezi ahụ ike.
gnu / Linux bụ obodo, ọ bụ ịdị n'otu…. ọ bụghị ụlọ ọrụ! naanị ebumnuche azụmaahịa bụ ịkpata ego yana ọ kwesiri ịdị.
Biko echekwala na ime ka distrosị dịrị ma mee gnu / Linux otu ọrụ.
Ihe ị kwesịrị ịghara ime bụ iji "ngwangwa" ma ọ bụ "iwu na-akwadoghị" emechie na Software nzuzo; Iji sọftụwia efu eji ọ bụla, agbanyeghị, mgbe ọ bụla, maka ihe ọ bụla dabara adaba mgbe ọ bụla:
Naanị ya anaghị arụ ọrụ.
O bughi VALID ozo ka I jiri Software Emechie Emechiri na Prippy bu CRIME na eji ya “n’enweghi ikike” ma obu “iwu akwadoghi”, nke a ekwughi m, ndi nwe software ahu kwuru ya, O bu CRIME.
Naanị ma ọ bụrụ na, abụghị m "sesual stallmaniac", ọ bụ ya mere m ji eji Kubuntu.
Enwere m ike ibi na ihe anaghị akwụ ụgwọ (ndị ọkwọ ụgbọala, kernel blobs, codec, wdg), mana ọ bụrụhaala na m nwere ike iji ha n'ụzọ ziri ezi.
N'ihe banyere m, enwere m igwe obibi akwụkwọ nta na Free Software na Linux bụ naanị ndị ọzọ nwere ike ịgbanwe, iji ihe ndị ọzọ ga-abụ ANTI-ECONOMIC na COUNTERPRODUCTIVE.
trojan dị njikere 😛
werekwa ya jiri ire oku a gwuchaa. Ekele @Ed maka ọkụ ọkụ.
Rodrigo ezuru dijo
Isiokwu a dị obere, na nkenke, ndị ọrụ Linux dị iche iche na ihe ijuanya na ikekwe maka onye na-agụghị ihe ngosi nke Free Software na Philosophy nke mmekorita nke a na-aghotaghi ihe Linux uwa bu, na pere mpe Iji Linux na Free Software, ọ bụ ndụ ndụ
Zaghachi Rodrigo Satch
ezigbo enyi enyi!
Echere m na ọ bụ ire ọkụ, mana n'eziokwu na mkparịta ụka ahụ, ị ​​nwere ike ịmụ ọtụtụ ihe gbasara sọftụwia na Linux n'efu. Go Linux !! .... ndo Go Gnu-Linux !!!
N'oge ahụ echere m na m na-agụ akwụkwọ ozi nke BiLL GATES dere na 80, gbaghara mana ekwetaghị m na ụfọdụ ederede ederede gị
Ihe kachasị mma ga - abụ iji nwayọọ nwayọọ dochie sọftụwia nwere nke ọma ka ọ ghara ịdaba na okporo ụzọ. Ekwetaghị m n'ọtụtụ n'ime ihe nyocha gị.
Ahụrụ m ọkwa a na Taringa, ihe dọọrọ uche m bụ na ihe ndị a kwuru dị jụụ karịa ndị nọ ebe a.
Anaghị m ekwu na onye ọ bụla kwenyere, mana na ha maara nkà ihe ọmụma nke gnu / Linux.
Pan tufuru ala pandev92 na otu akụkụ ma gosipụta okwu dị mfe: ọ na-eme gị otu ihe ahụ dịka ndị kwenyere na ihe ha hụrụ na ihuenyo cinema bụ ihe niile, ka m kọwaa, ị na-ekwu na ngwanrọ ngwanrọ enweghị ike ịdị ka ịgba ohu mmadụ na ọ dịghị onye nwere egbe na narị otu narị iji manye ha ka ha jiri ụfọdụ ngwa, nke ọma, lee ihe dabara adaba, laptọọpụ ọhụrụ m nwere Windows 8 nke na-anaghị efe m maka ọrụ m, nke a bụ n'ihi mmachi ya nke m nwere ike ịgagharị n'ụzọ dị mfe mana o doro anya na enweghị ikikere, nke m ga-akwụ puku ole na ole, (maka ụdị windo nke m na-aga ọrụ, ọ bụrụ na m cheta na ha gbanwere ya ka ọ na-esi na bọọlụ ahụ pụta ma na-amanye ya imelite ma ọ bụghị na ha ga-ahapụ gị n'enweghị ọrụ? programmed obsolescence na aghọta agabiga, xox macho ole ego dị ka mezuo ọrụ m) na-eme m iwu na-akwadoghị ya mere enweghị m ike iji ma ọ bụ jiri ọrụ m kpamkpam, nke bụ ihe ijuanya na m usoro (Ha kwesịrị, ka emechara, pụta na-esote nke m aha xD) ma ọ bụrụ na ọ na-enye m ohere n'ụzọ iwu ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na m nwere ike inye aka na mmelite ya dịka ekele m na-eme ya ma na-azụta ihe ndekọ na ndị na-ekesa ha iji kwado ego iji kwado ọrụ ahụ (oge ọ bụla enwere ụdị nkwụsi ike ọhụụ, nke a anaghị ibu ọrụ ma dịka nloghachi na ọrụ ahụ nke na-enye m ihe niile site na mbido na-enweghị ịrịọ maka ihe ọ bụla na nloghachi, lee ihe dị iche, ọ na-echetara m mgbe m zụrụ ikikere azụmahịa na Jamendo ọbụlagodi na anaghị m eji ha azụ ahịa, yabụ pasta enweghi nsogbu ma oburu na i naghi eme ha), ya bu na ikwu na okwu ole-na-ole bu ezi omume na eme ka gi dika mmadu, achorom ihu na IOS ma obu Windows na eme nke ahu, na site na ụzọ na Windows 8 ga-eri m ole na ole dollar Enwere ọtụtụ na-enweghị m chọrọ ya ma na-amanye m ime ya n'ihi na ụlọ ọrụ ị na-azụta ya amanye ime ya, ee e, ọ bụghị egbe egbe na narị mmadụ taa ka anyị bụ ọha mmadụ azụmaahịa na ọ bụ kpọmkwem na nke ejiri yie ya egwu, ya bụ, ọ gakwaghị anọ na nfe ihuenyo kama ọ na-emetụta gị n'ihe aha ezighi ezi aha, ma kpachara anya na ị nwere ike iji "mgbọ" onye ọ bụla na-amanye gị ịzụta akara ahụ, na e nwere ụdị na laptọọpụ na-eji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma ọ bụ dị ọcha, nke ọma, ọ bụrụ na ị hụ na amaara m ma chee ihe m ga-eche ... ọnwa isii ka ha zitere m otu dị ka site na Spain n'ihi na ha enweghị otu ihe m chọrọ n'ime ọnwa 6 ndị a Mana nke ahụ jiri obiọma na nnukwu ọrụ ha ga-akwadebe m, ma ọ bụrụ na anyị gụọ na nnwere onwe bụ ime ihe ịchọrọ oge gị, ego na-anọchi anya oge na mbọ, usoro mgbochi mmachi m mefuru ego na oge maka ya nnwere onwe m, iji ike eme ihe ma ọ bụ enweghị ike ịhọrọ 😉 (nke a bụ obere ntabi anya? ma ọ bụrụ na ọ bụghị XD biko gwa m ihe wink bụ), na N'ezie ọ bụrụ na anyị na-aga n'ihu site na iwu na ị nwere ike ghara ire Hardware na a Software gụnyere na obere ụgwọ, nke na-efu XD, ha bụ iwu na-akwadoghị;).
Ugbu a onyinye m na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụrụ na enweghi ọtụtụ ozi ezighi ezi na sistemụ a, sọftụwia na teknụzụ n'ozuzu ya, analog blackouts (n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ) gburugburu ụwa agaghị eme ka ọtụtụ puku mmadụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị nde mmadụ n'ụwa, Naanị site n'ịkpọ Spain, ọtụtụ obodo enweghị ụzọ esi ekiri telivishọn (n'agbanyeghị ma telivishọn na-eme ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ndị a enweghịdị ohere ahụ ma Spain karịrị Madrid, Barcelona ma ọ bụ Andalusia) n'ihi nnukwu ụgwọ nke akụrụngwa dị mkpa iji gosipụta nnabata, nke anaghị adị oke ọnụ maka mmepe ha ma ọ bụ nrụpụta ha mana ha dị oke ọnụ n'ihi mgbochi nke sistemụ na ọnụ ahịa nke akwụkwọ ikike ha (emere m "igwe onyonyo smart" na eriri USB na ihuenyo dị larịị iji belata ọnụ ala 10 dollars XD, iji mee ya na sistemụ windo a na m enweta ihe karịrị puku dollar anọ maka ikikere iberibe na ikike -.-, dị ka ihe atụ maka ọdịiche dị na ụgwọ), na ị bụghị onye si SpainỌfọn, otu ihe atụ bụkwa Hispanic, enwere ike ịme dijitalụ dijitalụ na Tijuana na ọnụ ahịa maka akụrụngwa nke 80 dollar kachasị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ụfọdụ mmejọ nke ụfọdụ ụlọ ọrụ;), mana emeghị agbanyụ ọkụ n'ihi na akụrụngwa dị ọbụna na dollar 900 (ọ bụghị ma ọtụtụ ma ọtụtụ) nke ndị mmadụ na-enweghị ike ịzụta, kedụ ka ị ga-atụ anya ka ezinụlọ na-akpata 10 ma ọ bụ 100 dollar kwa izu iji zụta ha? Ekwesiri ighota na otutu ndi mmadu ndi analog na-emetuta bu ihe dika 60 ma obu 70 percent nke onu ogugu ha, mana i kwuru na ihe mere na ngwanrọ abughi ihe dika ihe ndi mmadu na-eme, gini ma oburu na m agwa ị na-enye ha mkparị na-ekwenye ekwenye na site na ọrụ ebube ma ọ bụ na ha agaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ (ma kpachara anya na nsogbu anyị na-enwe bụ nke e mepụtara site na kredit na ngwaahịa na-adịghị mma nke nyere ndụ ọtụtụ egosipụta, n'oge a ndị mmadụ na-egbu onwe ha na Spain n'ihi na a na-achụpụ ha, naanị ka ị wee hụ na isi ihe ndị ahụ ejikọrọ karịa ihe ị chere, ọ bụrụ na ndị a agaghị enwe ike ma ọ bụ jiri ọrụ ebube nwee ike ịkwụ ụgwọ ndị ahụ, ọ na-egosi na onye ọ bụla nyere ha bụ azụmaahịa ụgwọ, azụmaahịa nke nyeere aka nke ukwuu Nsogbu taa 😉) ịzụta ngwaọrụ na-emegbu obere ozi ha maara? Gịnị ma ọ bụrụ na m gwa gị na a na-akwụ ụgwọ mgbaàmà telivishọn ma ọ bụ telivishọn ahụ maka ụtụ isi ha ma n'eziokwu, ha kwesịrị inwe ikike ịhọrọ ụdị teknụzụ ha ga - eji ma ghara ịmanye ya maka ihe ọ bụla? N'ihi na ihe gbanwere, nke na-eduga m ịsị sọftụwia ahụ gbasara gị ma ọ bụ m karịa ka anyị maara banyere ụwa a, enwere ndị nọ ebe ahụ na-emejọ site na ozi ha na-ezighi ezi na omume nke ụlọ ọrụ ụfọdụ na-erite uru na ya, mmetọ ahụ. E wezụga ndị nọ n'azụ tebụl, ma ọ bụ ndị na-ese ihe, ndị okike, ndị injinia agụmakwụkwọ na ogologo wdg, omume ahụ na-eme ndị mmadụ ohu, ọ dị ka ihe ịtụnanya na YouTube na-egbu n'ezie, taa na n'ihi ọtụtụ puku vidiyo. ụwa na-alụ maka ntụrụndụ na ihe onwunwe nke ndị hụrụ ha na youtube, ugbu a ị ghọtara pandev92 na ihe gafere ihe ị hụrụ na ihuenyo gị na / ma ọ bụ ụwa nke gị?
Na mmechi na okwu dị mfe, ndị otu kwenyere na ị nwere ezi ihe kpatara na anaghị ekwenyekwa maka ọtụtụ ihe kpatara ya, site n'ụzọ m hụbururịrị onye ga-anwa ịgba m ọkụ maka ide ihe nke ukwuu mana ọ bụrụ na ị kọwaghị onwe gị ị na-eme aghọtaghị na mgbe ahụ dịka m ebe a, naanị m nwere igbe igbe dị ka ụzọ ngosipụta, ọ na-ele anya xD. N'ikpeazụ, m kwenyere na: Linux abụghị okpukpe, karịa okpukpe m ga-asị nkwenye ma ọ bụ, -, na n'echiche m gara aga banyere isiokwu ọzọ m doro anya banyere ya, Systems ihe ọ bụla ha bụ ngwaọrụ naanị nke ahụ. "A hama bụ hama, ọ na-eji hama ma ọ bụ gịnị ka ị chọrọ ya, na-eyi ya dị ka ihe nti?"
Nkwanye ugwu na-akwanyere ugwu, ma ọ bụrụ na okwu a adịghị ka nkwanye ùgwù xux bụ nsogbu nke ịkpụzi echiche na arụmụka ndị a mgbe ụfọdụ abụghị nke velvety, ọzọ na-akwanyere ùgwù ekele owo.
Have gwakọtawo ọtụtụ ihe na-enweghị ihe jikọrọ ha na ibe ha.
Nke mbu, ị gha agbagha na OS na-eji 90% nke pc bi, yana ibu ọrụ. Ọ bụrụ na pc abịa na windo 8, m na-ewepụ windo 8 ma tinye ihe ọ bụla m chọrọ, ugbu a, ọ bụrụ na ọrụ gị chọrọ windo n'ihi na ngwa ị na-eji bụ naanị windo, n'ihi na microsoft enweghị nsogbu ahụ, ọ na-eme ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ya ga-arụ ọrụ na windo.
Ihe analog blackout anaghị eme ọfụma. Ha nwere ike itinye ọwa na mgbakwunye nri satịlaịtị n'ụzọ dị mfe, wee hụ ihe dị mma karị. Anọ m afọ atọ na-enweghị ike ịhụ tdt n'ihi ụlọ, enwere m ekele na enweghị ike ịhụ ya, n'ihi na maka ihe ha tinyere: D….
Na e nwere 5, 6% nke ndị bi na-enweghị mgbaama telivishọn, eziokwu dị ntakịrị ^^, n'otu oge analog, e nwere 2 ma ọ bụ 30% nke ndị bi na ya hụrụ ya nke ọma, ya mere ha ahụghị ya .
Nsogbu a dị na Spain, n’adịghị ka Europe ndị ọzọ, sitere na ụlọ akụ, gọọmentị na ndị mmadụ na-achọ ịbanye n’ụgwọ ma họrọ ịrụ ọrụ, itinye ego na ụfọdụ ọrụ.
E kwesịkwara iburu n'uche na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ gọọmentị ga-adị iche, ma ọ bụrụ na anyị gụọ ndị niile na-arụ ọrụ ojii ...
Na a na-emejọ ndị mmadụ site na ozi ụgha ha bụ naanị n'ihi ha, n'ọnọdụ ọ bụla ha na-eme onwe ha ohu. Banyere nchụpụ, n'ihi na mgbe ị naara ego, ị ga-adị njikere maka ya, steeti enweghị mmejọ, ọzọkwa, amaghị nke nwa amaala na-ebute nsonaazụ ọjọọ. Ọ bụrụ na irite euro 1100 kwa ọnwa, ọ bụ nzuzu ịzụta ụlọ maka 300 puku euro. Mana ebe ọ bụ na anyị ejiri ịta ụta maka ihe niile, n'ihi na anyị kwenyere na ọ bụ nna ... nke ọma, lee.
Echere m na ị agwụbeghị ịgwakọta nke ọma, n'ihi na ị gwakọtara echiche ndị na-adabaghị na ibe ha.
Mana ị chere na ọ bụrụ na enwere ezigbo ohere ịchọta ọrụ dị mma ma dabara adaba, a ga-enwe ọtụtụ mmadụ ịbanye na pudulu nke ịrụ ọrụ "na oji"?
Ọchịchị na ndị mgbasa ozi metụtara ya nwekwara ọrụ zuru oke maka ịgbasa amaghị ihe a, n'ihi na ọ masịrị ha n'ezie. Ka anyị ghara ichefu na ihe kachasị achọsi ike na ọha mmadụ bara ụba bụ ego.
A kụrụ gị aka.
Ysmụ okorobịa, agụwo m blog a kemgbe ihe karịrị otu afọ!
Enwere m mmasị na Pandev92's op-ed, n'agbanyeghị esemokwu ọ nwere ike ịkpalite. 100% kwenyere!
M na-agba gị ume ka ị gaa n'ihu n'usoro gị, ị nwere ọtụtụ àgwà, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na-ekwu okwu ọma anaghị apụta mgbe niile. Contribute na etinye aka karịa ihe ọmụma, echiche gị dịkwa mkpa dị ka ịmara otu esi eji Linux.
Zaghachi ka pepenike
M na-emejọ aha njirimara m ... discudpalme
Zaghachi ka ị ghara ịza ụra
Are kwudosiri ike, adabala m na nkwenkwe mbụ ma bụrụ onye na-akwado Linux na Ubuntu ọkachasị, mana dịka ị na-ekwu na ị nweghị ike ịmanye onye ọ bụla iji nke a ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ahụ, n'agbanyeghị otu anyị chere na ọ ka mma, ókè dị njọ mgbe niile.ekele sitere na Barcelona
Ma ịgbachitere ojiji na nkà ihe ọmụma nke na-akwalite ngwanrọ n'efu anaghị eme ka ị bụrụ onye okpukpe, ọ na-eme ka ị bụrụ onye ọrụ na ịnụ ọkụ n'obi. Ihe ọzọ bụ na a na-anabata nkatọ pere mpe yana na a na-ewere ihe ọ bụla dị ka mmehie na ụwa ... nke n'ọnọdụ ụfọdụ nwere ike ịbụ, mana ọ bụchaghị.
Anthony Ruiz dijo
Akụkụ ihe ọmụma, n'echiche m, bụ nke ọrụ GNU, nke Linux nakweere na mmalite ya, Linux bụ akụkụ nke GNU nke karịrị. The binomial bụ (fọrọ nke nta) zuru okè, were otu akụkụ, ndị ọzọ ma ọ bụ ihe niile, ị na-ahọrọ = Nnwere onwe.
Zaghachi Antonio Ruiz
"Onye ọ bụla nwere nnwere onwe ịkwụsị iji ihe ha jiri ma gbanwee mmemme, ọ nweghị onye na-atụ aka narị otu narị maka anyị ka anyị jiri mmemme mechiri emechi." Onweghi Stallman biara na AK-47 ma nye gi ike itinye Trisquel; Ma anyị niile maara na "aghụghọ" na proprietary software ụlọ ọrụ na-eji agbụ gị (na a atụ uche echiche, n'ezie 😉) ka ha na ngwaahịa.
"Anyị agaghị echefu nzube GNU!" Anaghị m ahụ na nkwupụta a bụ onye isi, ọ na-anwa ịdebe ndụ ụkpụrụ nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ malitere imepụta.
Ihe edeturu m: Otu n'ime ihe nkwuputa okwu 1.998.923 nke na-anwa ịmepe ndị na-agbachitere ngwanrọ n'efu dị ka ndị isi okpukpe (ndị Taliban bụ ihe gara aga, anyị anaghịzi akpọ ha). Daalụ.
Ka ahụ. Di na nwunye. Nke mbụ, Linux abụghị okpukpe, anyị kwenyere ebe ahụ, mana ọ bụghị naanị otu ngwanrọ. Ma ị chọrọ ịkọwa otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ dị ka nkwenkwe nkwenkwe nke ọ bụla, Linux bụkwa nkà ihe ọmụma, nkà ihe ọmụma nke mejupụtara ngwanrọ a kpọtụrụ aha, n'ihi na e kere ya ma kee ya n'echiche, anyị nwere ike ịsị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye na-enye onyinye, n'ihu nke omume agbasokarị n'oge ahụ, mgbe ngwanrọ niile bụ nke ụlọ.
Ekwesịrị m izo aka na ngafe nke liberalism nke ị gosipụtara n'ụzọ doro anya na ahịrịokwu ndị dị ka "N'ime nnwere onwe nnwere onwe mmadụ, enwerekwa ohere ịnwe nnwere onwe n'aka ụmụ mmadụ ndị ọzọ, ihe mere ọtụtụ puku ugboro ma ọ dị mwute na ọ ga-aga n'ihu na-eme ", nke You jiri n'akụkọ ifo nnwere onwe ime nhọrọ nke nnwere onwe zuru oke, mana echiche nke nnwere onwe na-emegiderịta onwe ya ma ọ bụ echiche anyị nwere" ibi na nnwere onwe "bụ. Ruo ókè ha a canaa ka anyị pụrụ ịtụle nnwere onwe kwesịrị nplaomi? Mmadu aghagh inwe nlezianya mgbe i na-eji ar u uka nke nnwere onwe mee ihe, n'ihi na o nwere ike izi ezi ihe nd i na-ad igh i mma. Ọ bụ ya mere na ihe omume niile nwere oke, na nnwere onwe ime nhọrọ ka ị na-akpọ ya anaghị asọpụrụ oke dị n'etiti nnwere onwe gị na nke onye agbata obi gị, ya mere, a ga-ewebata usoro nke nwere ike ijide nnwere onwe nke otu na nke ọzọ. Ma ọ nwere ike ịdị ka nke enweghị obi nkoropụ na ọbụnadị na-emegiderịta onwe ya, mana iji mee ka e nwee nnwere onwe ịnakwere, a ga-amachibido ya iwu iji zere 'oke nnwere onwe' nke ụfọdụ nwere ike ịnara.
N'ihe banyere ngwanrọ, site n'echiche a, emepụtara ikike GPL, ikikere nke na-eme ka sọftụwia enyere ikikere nweere onwe ya ma hụkwa na ọ ga-enwere onwe ya n'ọdịnihu.
Onye nwere mmụọ imesapụ aka, onye m chere na gị na ya nwekọrọ ọnụ, mepụtara ikikere BSD.
Ihe ederede. Mgbe ị kwuru na "sọftụwia nwere ikike anaghị anapụ gị nnwere onwe gị, ọ na - enye gị nhọrọ" ị gha agbagwo ma gwakọta nnwere onwe ngwanrọ na nnwere onwe mmadụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nnwere onwe ngwanrọ, n'ụzọ dị irè enweghị nnwere onwe dị otú ahụ. Companylọ ọrụ ahụ bụ nke na-ekwupụta ọnọdụ nke ojiji, nke na-ejedebe na njiri onwe onye siri ike, na ọ nweghị ihe ọzọ ị ga-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka nnwere onwe nke onwe, n'ezie ị nwere nhọrọ iji ya ma ọ bụ na ị gaghị eji ya, mana ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya ị ga-agbaso usoro eji eme ihe, nke na-enweghị oge ịtụgharị uche na mmezi ma ọ bụ redistribution. Ma nke ahụ bụ nnwere onwe anyị na-ekwu maka ya n'ihe gbasara sọftụwia.
Nke atọ. Iji kwado nkwupụta gị, ị na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ wepụta mmemme nke ha mepụtara, "mmadụ ga-abịa, were koodu ahụ, melite ya, ngwa ya ga-akarị nke mbụ, jiri ntakịrị mbọ, wee si otú a hapụ onye kere ihe mbụ na asọmpi ọghọm ", nke m ekwenyeghi ma ọlị, n'ihi na ọ bụrụ na mmemme a nwere nnukwu ọrụ n'azụ ya, echeghị m na ịkwalite ya na ime ka ọ ka nke mbụ mma ga-eme onye ọ bụla nwere" obere mbọ " na ị rụtụrụ aka ebe a, nke bụ nleda anya na enweghị nkwanye ugwu maka ọrụ otu na nke ọzọ.
N'ikpeazụ, ahịrịokwu ahụ nke kachasị mma nke ndị nnwere onwe na-anwa ịkọwa ihe niile: "Ọ nweghị onye na-atụ aka na narị otu narị ka ha jiri mmemme mechiri emechi. N'ebe ahụ ana m agwa gị na ikekwe ọ bụghị n'ụzọ nkịtị, mana ọtụtụ oge ọ bụ n'ụzọ ihe atụ, dị ka a ga-amanye anyị n'ọrụ ma ọ bụ na ọmụmụ ihe iji usoro mmemme nke ụfọdụ, ma ọ bụ iji usoro ụfọdụ. Kedu ka anyị ga - esi bụrụ na Linux apụtaghị? Inwe gafere mgbanaka nke Microsoft ma ọ bụ Apple.
Ee, ọ bụ eziokwu, maka na otu n'ime nnwereonwe ndị ahụ bụ nnwere onwe ịhọrọ inwere onwe gị ma ọ bụ na ọ gaghị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị bụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ mba
Ozi sitere na Microsoft kpaliri akọnuche gị hehehe… Ndị mmepe jisiri ike mee ya dịka onye okike Facebook mere… Echetara m gị mgbe enwere esemokwu nke ndị nchọgharị na 80s Netscape zigara Microsoft wepụtara onye na-enyocha intaneti n'efu ma Ọ mebiri ụlọ ọrụ ahụ dum. ma ndi oru ya hapuru n'enweghi oru dika onye ezin’ulo, ma oburu na emebere nnwere onwe ebe ahu? Gịnị kpatara ya? Ana m ahapụrụ gị ajụjụ ahụ ...
Steam OS: Valve na-ekwupụta Linux distro ya